YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, June 02
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး [ကမ္ဘာ့ ဇာတ်ခုံ]
UNITY စာပေမှ စာအုပ် အမှတ်စဉ် (၄၆) အဖြစ် ၂ဝဝ၇ ဒီဇင်ဘာမှာ ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ် ဖြန့်ချိလိုက်ကတဲ့ ဦးအောင်သန့်ရဲ့ 'မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေး (နိုင်ငံစုံ သံတမန် ဆက်ဆံရေး)၊ Conference Diplomacy မိတ်ဆက်' စာအုပ် အခန်း (၄) မှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ "ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး [ကမ္ဘာ့ ဇာတ်ခုံ]" ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း စုဖွဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ကြပုံ အကျဉ်းကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံများမှာ - ၁၉၄၅ ခုနှစ်က ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ စစ်သည်တော်များ အထိမ်းအမှတ် ခန်းမကြီးတွင် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်း (UN Charter) ကို လက်မှတ် ရေးထိုး နေကြပုံ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အဦ၊ အလံ၊ အထွေထွေ ညီလာခံ ခန်းမနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေး ခန်းမ။ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့
(က) လန်ဒန်မှ မော်စကို ဖြတ်လျက်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေသည့် အကြားမှ လူးလွန့် ကုန်းရုန်း ထလာသည်ဟု ဆိုလောက်၏။
၁၉၂၉-၃ဝ နှစ်များတွင် ကမ္ဘာတဝန်း၌ စီးပွားရေး ကပ်ကြီး (World Economic Depression) ဆို၏။ ၁၉၂၉ ခ၊ု အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ စတော့စာချုပ် ဈေးကွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့၏။ တကမ္ဘာလုံး မီးခိုွးွ့ကက်လျှောက် ကူးသွား၏။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံ အားလုံးလိုလို အကြီးအကျယ် နစ်နာ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြ၏။ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ကပ်ကြီး၏ နောက်ဆွယ်၌ တကမ္ဘာလုံး အေးချမ်းလှသည် ဟူ၍ မရှိ၊ အဘက်ဘက်မှ ရှုပ်ထွေးလျက် ရှိ၏။ တစတစ ပို၍ ယိုယွင်းလာခဲ့ရာ နောက်ဆုံး၌ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မီးကြီး ထတောက်လေတော့၏။
ပထမ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကာလ မြင်ကွင်း
ဂျာမနီတွင် ဖက်ဆစ်နာဇီတို့ အာဏာမရမီ ပထမ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကာလ (ပိုမို တိကျရသော် ၁၉၂၃ ခု၊ စက်တင်ဘာလ) နှစ်များတွင် စီးပွားရေးမှာ ခ္ဆွတ်ခြုံကျလျက် ရှိခဲ့၏။ ဂျာန်မန် မတ်ငွေသည် တန်ဖိုး မရှိသော စက္ကူစုတ်သာသာမျှ အခြေဆိုက်ခဲ့၏။ အလုပ်သမားများမှာ နေ့စား လစား မဟုတ်တော့ဘဲ တနာရီ တခါ လစာ ထုတ်ပေးရ သဖြင့် နာရီစား ဖြစ်နေကြ၏။ လူထုလက်ဝယ် ရောက်နေသော ထုတ်ဝေလှည့်လည် သုံးစွဲနေသည့် ငွေစက္ကူများကို ဘဏ်က ပြန်သိမ်းပြီး မူလ တန်ဖိုး၏ နောက်က သုညတွေ တသီကြီး ထည့်ရိုက် ပေးရ၏။ အိမ်ရှင်မတို့၏ ဘဝမှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်၏။ ငွေစက္ကူ အထုပ်များကို ဈေးခြင်းတောင်း အကြီးကြီးတွင် အပြည့်ထည့်လျက် ဈေးသို့ သွားရသည်။ ပါသမျှ အကုန်သုံးပြီး ဈေးက အပြန်တွင် ပေါင်မုန့် ခပ်သေးသေး အနည်းအကျဉ်းသာ ပါလာသည်။ ဈေးခြင်းတောင်းကြီး မလိုတော့။ အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ယူလာရုံဖြင့် လုံလောက်၏။
မီးဖိုချောင်ကို အုပ်ချုပ်သည့် အိမ်ရှင်မများသာ အကျပ် တွေ့နေရသည် မဟုတ်၊ တကမ္ဘာလုံး မည်သူမျှ အနေမချောင်ကြချေ။ တကမ္ဘာလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွ။
၁၉၃၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ဂျပန်က မန်ချူးရီးယားကို ဝင်တိုက်သည်။ ၁၉၃၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်တွင် ဟစ်တလာ (Adolf Hitler) သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ အဓိပတိ (Chancellor) ဖြစ်လာသည်။ မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ဂျပန်က နိုင်ငံပေါင်းစုံ အသင်းချုပ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘလ ၁၄ ရက်တွင် ဂျာမနီကလည်း နိုင်ငံပေါင်းစုံ အသင်းချုပ်မှ လိုက်ထွက်ပြန်သည်။ ၁၉၃၅ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်တွင် မူဆိုလီနီ (Benito Mussolini) ခေါင်းဆောင်သော အီတလီက အဘီဆီနီးယား (Abyssinia)၊ ယခု အခေါ် အီသီယိုးပီးယား (Ethiopia) ကို ဝင်တိုက်၏။ ၁၉၃၆ ခု၊ ဇွန်လတွင် စပိန် ပြည်တွင်းစစ် (Spnish Civil War) စသည်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ခေါင်းထောင်လာသည်။ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတွင် ကျူးကျော်ရေး စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲ၍ နယ်ချဲ့ စိုးမိုးရန် မူလကပင် နှစ်အတော်ကြာ အချိန်ယူ၍ ကြံစည်နေခဲ့သော ဂျာမနီ၊ အီတလီနှင့် ဂျပန်တို့သည် ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံများ (Axis Powers) အဖြစ် သူတော်ချင်းချင်း ပေါင်းဖက် မိကြလေ၏။
ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့သည် ပွဲဦးထွက်တွင် အလွန် လက်သံ ပြောင်ခဲ့ကြ၏။ အတော် စောစောကပင် ဂျာမနီသည် ဆူဒင်တန်လင် (Sude-Tenland) ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယား၊ သြစတြီးယားနှင့် ဒန်ဇစ် (Danzig)၊ ပိုလန် စသည် တို့ကို မျက်စောင်းထိုးလျက် ရှိခဲ့သည်။ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရန်စ ခြိမ်းခြောက်သည်။ ၁၉၃၇ ခု၊ မတ်လတွင် ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားကို ဝင်သိမ်းသည်။ ဧပြီလတွင် အီတလီက အယ်လ်ဘေးနီးယား (Albania) ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်သည်။ ဇူလိုင်လတွင် အာရှ၌ တရုတ်-ဂျပန် စစ်ပွဲ စသည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ရာတွင် လက်ဦးမှု ရထားသော ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ် စသည်တို့နှင့် (အခါပင် နှောင်းသော်လည်း) နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်ရန် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ သြဇာ အမောက်ထောင် ထွက်လာသော ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့ အင်အားပြိုင် ကြ၏။ အပေးအယူ လုပ်သည့်အခါ လုပ်ကြ၏။ အဝေမတည့် ဖြစ်ကြ၏။ ပဋိပက္ခ ပို၍ ကြီးလာ၏။ ၁၉၃၉ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်တွင် ဂျာမနီက ပိုလန်ကို ဝင်တိုက်၏။ ပိုလန်နှင့် မဟာမိတ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားကြသော ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ်တို့သည် ဆက်၍ လက်ပိုက်ကြည့် မနေသာတော့ ချေ။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် စစ်ကြေညာပြီး ပိုလန်ဘက်မှ အတိအလင်း ပါဝင်လာတော့၏။ ဝင်ရိုးတန်း ဖက်ဆစ်နိုင်ငံများ ခေါင်းထောင် လာကတည်းက တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာနေသော ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆီမီးတောက်သည် လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်း သွားလေတော့၏။
မည်သည့်အခါမျှ အညံ့မခံ အရှုံးမပေးဘဲ သမိုင်းတလျှောက် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ကျော်လွှား၍ အပွဲပွဲ နွှဲခဲ့လှပြီ ဖြစ်သော လူသား၏ စိတ်ဓာတ်သည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မီးကြီး အရှိန်ပြင်းစွာ တောက်နေဆဲ ကာလ၊ အမြောက်သံ ဗုံးသံများ၊ ဗြောင်းဆန်နေသည့် အကြားမှပင် တရှိန်ရှိန် တညီးညီး တောက်ခဲ့၏။
၁၉၄၂ ခုနှစ်လောက်တွင် ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်တည်း ဟူသော ဝင်ရိုးတန်း ဖက်ဆစ်နိုင်ငံတို့သည် လျှမ်းလျှမ်းတောက် တန်ခိုးထွားလျက် ရှိ၏။ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်ကြီး သုံးတိုက်လုံးတွင် ဗြောင်းဆန်အောင် တိုက်ခိုက် နေကြ၏။ ဥရောပ တတိုက်လုံးလိုလိုမှာ ဖက်ဆစ် ဂျာမနီတို့ လက်အောက်သို့ ကျရောက် နေလေပြီ။ ဥရောပ ရှစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ အဖွဲ့ အသီးသီးသည် လန်ဒန်မြို့၌ အဝေးရောက် စစ်ပြေး အစိုးရများ အဖြစ် ရုံးစိုက် ခိုလှုံလျက် ရှိကြလေ၏။
လန်ဒန်မြို့၊ စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက် (၁၂၊ ၆၊ ၁၉၄၁)
ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေနှင့် အချိန် အခါမျိုးတွင် အရေးကြီးသော ကြေညာချက် တစောင်သည် လန်ဒန်မြို့မှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့၏။ ၁၉၄၁ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ရှေးဟောင်း နန်းတော် တခုဖြစ်သော စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော်တွင် တွေ့ဆုံ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော် ကြေညာချက် (St. James Palace) ဟု ခေါ်၏။ ယင်းကြေညာချက်ပါ အောက်ပါ စာပိုဒ်မှာ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ မျိုးစေ့ကို စတင် ချပေးလိုက်သည့် သဘော ရှိလေ၏။
"ကျူးကျော်ရေး စစ်ပွဲကြီး၏ အန္ဈရာယ်မှ ရုန်းကန် လွတ်မြောက်၍ နိုင်ငံ အသီးသီး၏ စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် စိတ်ချရသည့် ကာလ၌ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို တပါတည်း တည်ဆောက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးရန် လိုသည်။ ယင်းအခြေအနေမျိုးကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများ အားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြင့်သာလျှင် တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီး မတိုင်မီ ကာလနှင့် တကွ စစ်ကြီး ပြီးဆုံး၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ရရှိသော ကာလ၌ပါ က္ဆွန်ုပ်တို့ ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးသူ နိုင်ငံများ အချင်းချင်းသည် လည်းကောင်း၊ အခြား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများဖြင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် က္ဆွန်ုပ်တို့ အားလုံး ရည်မှန်းထားကြောင်း"
စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက်ကို အောက်ပါ နိုင်ငံများ ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
၂။ ကနေဒါ (ဗြိတိသျှ ဒိုမီနီယံနိုင်ငံ)
၃။ သြစတြေးလျ (ဗြိတိသျှ ဒိုမီနီယံနိုင်ငံ)
၄။ နယူးဇီလန် (ဗြိတိသျှ ဒိုမီနီယံနိုင်ငံ)
၅။ တောင်အာဖရိက (ဗြိတိသျှ ဒိုမီနီယံနိုင်ငံ)
၆။ ဘယ်လ်ဂျီယံ (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၇။ ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယား (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၈။ ဂရိ (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၉။ လူဇင်ဘတ် (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၁ဝ။ နယ်သာလန် (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၁၁။ နော်ဝေ (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၁၂။ ပိုလန် (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၁၃။ ယူဂိုစလားဗီးယား (လန်ဒန်ရောက် စစ်ပြေးအစိုးရ)
၁၄။ ပြင်သစ် (ဖက်ဆစ်ဂျာမန် အုပ်ချုပ်မှုကို တော်လှန်နေသော ဗိုလ်ချုပ် ဒီဂေါလ်၏ ကိုယ်စားလှယ်)
ကြေညာချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးသူတို့သည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး စခါစ မိမိတို့ ခွက်ခွက်လန် အရေးနိမ့်နေဆဲ ကာလ၌ပင် စစ်အောင်နိုင်ရေး အတွက် သာမက အောင်ပွဲခံပြီးနောက် ကာလ၌ မည်ကဲ့သို့သော ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို တည်ဆောက်သင့်သည်၊ တည်ဆောက်ကြမည် ဟူသော အချက်ကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားလျက် ရှိကြ၏။ အားရဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။ လူသားတို့၏ သေခါမှ လျှော့သည့် စိတ်ဓာတ် ဖြစ်၏။
အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် (၁၄၊ ၈၊ ၁၉၄၁)
စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက်ထွက်ပြီး များစွာ မကြာလိုက်ပါ။ အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် (Atlantic Charter) ဟူသော အမည်ဖြင့် ကြေညာချက် တခု ထွက်ပေါ်လာပြန်၏။ အမေရိကန် သမ္မတ ဖရန်ကလင် ဒီလာနိုးရုစဗဲ့ (Franklin Delno Roosevelt) နှင့် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီ (Winston Churchill) တို့ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာ အတွင်း အထူးလျှို့ဝှက်စွာ ဆွေးနွေးရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ် ဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံကြသည့် နေရာ အတိအကျမှာ နယူးဖောင်လန်က္ဆွန်း၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း အနီး အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာ အတွင်း ပလာဆင့်ရှာ ပင်လယ်အော် (Placentia Bay) ၏ တခုသော နေရာ၌ ကျောက်ဆူးချထားသော ယူအက်(စ)အက်(စ) သြဂတ်စတာ (USS Augusta) ဖျက်သင်္ဘောပေါ်၌ ဖြစ်၏။ နေ့ရက်ကား ၁၉၄၁ ခု၊ သြဂုတ် ၁၄။
ဖက်ဆစ် ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့ ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်းနေချိန်၊ ကြမ်းသလောက် ရမ်းသလောက်လည်း အောင်မြင်နေချိန်၊ ဟစ်တလာ၊ မူဆိုလီနီနှင့် ဂျပန် စစ်ခေါင်းဆောင်များ လက်ခမောင်း ခတ်နေသည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်၏။ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဂျာမန်တို့၏ လက်ချက်ကြောင့် ဗြိတိသျှ စသည့် မဟာမိတ် သင်္ဘောတို့ တစုပ်စုပ် မြုပ်နေသည့် အချိန်လည်း ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က တခုတည်းသော ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုကိုပင် နာဇီဂျာမနီက စတင် ရန်မူနေလေပြီ။
အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှ ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးတို့ တွေ့ဆုံကြသည့် နေရာ၊ အချိန်အခါနှင့် အကြောင်း ကိစ္စတို့မှာ အထူးကိစ္စတို့ ချည်းသာ ဖြစ်ရကား ထိုဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသော ကြေညာချက်သည် မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ စသည့် ကိုလိုနီနိုင်ငံများ အပါအဝင် တကမ္ဘာလုံးသို့ ပဲ့တင်ထပ် သွားခဲ့လေ၏။ အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်ပါ စာပိုဒ် ၈ ပိုဒ် အနက် စာပိုဒ် ၈ ကို အောက်တွင် အရင်းအတိုင်း တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
"(၈) ဂျာမန် နာဇီ အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းပြီးနောက် နိုင်ငံ အသီးသီးတို့အား ၎င်းတို့ အသီးသီး၏ ပိုင်နက် နယ်နိမိတ် အတွင်း၌ စိတ်ချ လုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ကြစေရန် အလို့ငှာ လည်းကောင်း၊ ဒေသ အရပ်ရပ်ရှိ လူအားလုံးတို့အား စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ၊ ကြောက်ရွံ့ရမှုနှင့် ဆင်းရဲတောင့်တ အလိုမပြည့်ဝမှုတို့မှ လွတ်ကင်းကြစေရန် အလို့ငှာ လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်နိုင်ကြစေခြင်း အလို့ငှာ လည်းကောင်း လိုအပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရန် ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးတို့က မျှော်မှန်းထားကြကြောင်း …"
ဤအချက်သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လခန့်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက်နှင့် တထပ်တည်းလိုပင် ဖြစ်ပြီး ထပ်လောင်း၍ အားဖြည့် ပေးလိုက်၏။ ထူးခြားချက် နှစ်ရပ်ကား ရှိပေသည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး စောစောပိုင်းတွင် ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ် စသည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံတို့ ဘက်မှ ပါဝင် တိုက်ခိုက် နေကြသော နိုင်ငံတို့အား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်သာ ကူညီခဲ့၏။ အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် အရမူ စိတ်ဓာတ်အား ပစ္စည်း အင်အားဖြင့် သာမက ကိုယ်ထိလက်ရောက် စိတ်ဓာတ်၊ ပစ္စည်း၊ လက်နက်၊ လူသူ အားလုံး အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပါဝင် လာတော့မည်ဟု အမေရိကန်က ကမ္ဘာသို့ ကြေညာလိုက်ဘိ သကဲ့သို့ ရှိ၏။ ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့ကို စိန်ခေါ် လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တွင် ပြိုင်ဘက် ဖြစ်ကြသော အင်အားစု နှစ်ရပ်တွင် မဟာမိတ်တို့ဘက်က သိသိသာသာကြီး အလေးကဲ သွား၏။ ဤကား အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်၏ ပထမ ထူးခြားချက် ဖြစ်၏။
အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ရှုထောင့် တမျိုးမှ ကြည့်သော် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အာရှ၊ အာဖရိက စသည်တို့တွင် ကိုလိုနီ နယ်ပယ် အမြောက်မြားကို သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်လျက် ရှိသော ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ် စသည့် ဥရောပ နယ်ချဲ့ နိုင်ငံကြီး တစုနှင့် နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်ရာ၌ နောက်ကျ ကျန်ရစ်ပြီး ဝေစု ရလိုသော ဂျာမနီ၊ အီတလီနှင့် ဂျပန် သုံးပွင့်ဆိုင်တို့ အချင်းချင်း အားစမ်းသော၊ ကိုလိုနီနယ် လုသောပွဲ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိုဒိုချိုင်းနား စသည့် သူ့က္ဆွန်ဘဝ ရောက်နေကြသော နိုင်ငံများ အဖို့ ရွေးချယ်စရာ မရှိချေ။ စစ်ပြိုင်ဘက် အုပ်စု နှစ်ခုလုံး နယ်ချဲ့သမားချင်း အတူတူနှင့် အနူနူသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတ္ဈလန်တိတ် စာချုပ် ထွက်ပေါ်လာသော အခါတွင်ကား လုံခြုံရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တန်းတူညီမျှရေး၊ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရေး စသော သဘောတရားတို့ကို အတိအလင်း ဖော်ပြ ပါရှိလာ၏။ ဤတွင် မည်သည့်ဘက်မှ ပါဝင် မဲတင်း ပေးရမည်ကို ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေကြသော ကိုလိုနီနိုင်ငံ အသီးသီးရှိ ပြည်သူ ပြည်သားတို့ အဖို့ မည်သည့်ဘက်က ရပ်တည် သင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လွယ်ကူ သွားစေခဲ့သည်။ တနည်းဆိုသော် အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် ထွက်ပေါ်လာသည်မှ စ၍ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တွင် ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက် နေကြသော နိုင်ငံ အုပ်စုများ အနက် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးကို လိုလားသူတို့က တဖက်၊ ဖက်ဆစ် အာဏာရှင် စနစ်ကို ကျင့်သုံးသူတို့က တဖက်ဖြင့် နှစ်ပိုင်း နှစ်ကဏ္ဍ ကွဲပြား ထင်ရှားသွား၏။ အဖြူ အမည်း၊ ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ခွဲခြား လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့၏။ ကိုလိုနီနိုင်ငံ အသီးသီးရှိ ပြည်သူများ (မြန်မာတို့ အပါအဝင်) တို့သည် အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် ထွက်ပေါ် မလာမီ အထိ ကာလတွင် ဟိုဘက် လိုက်ရနိုးနိုး သည်ဘက် လိုက်ရနိုးနိုး အမှန်ပင် ဝေခွဲမရ ကာလ ဖြစ်ခဲ့ကြပေသည်။ အဆိုပါ အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်၏ ဒုတိယ ထူးခြားချက်သည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်က အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းတရပ်တွင် ပေါ်လွင်စွာ ထင်ဟပ်လျက် ရှိသည်။
၁၉၄၅ ခု၊ သြဂုတ်လ၌ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်သို့ နိုင်ငံရေး အသင်းအဖွဲ့ အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ရှင်းလင်း တင်ပြရာတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖော်ပြရာ အောက်ပါ အချက်လည်း ပါဝင်၏။
(က) ဖက်ဆစ်ဝါဒ ကမ္ဘာတွင် လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သည် အထိ ဆောင်ရွက်ရန်။
(ခ) အတ္တလန်တိတ် ကြေညာချက်၊ တီဟီရန် ကြေညာချက် စသော ကြေညာချက်များ အတိုင်း မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတို့သည် မိမိတို့ ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ဘာသာ ဖန်တီးနိုင်ရန်။
(ဂ) မြန်မာပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်း မိမိတို့ ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ဘာသာ ဖန်တီးနိုင်ပြီး အားလုံး၏ သဘောနှင့် ညီညွတ်စွာ ထူထောင်သော နိုင်ငံ တည်ထောင်ရန်။
(မှတ်ချက် - မူရင်းသတ်ပုံ အတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။)
အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်မှ ပေးလိုက်သော မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ကြောင့် မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စသည့် ကိုလိုနီ နိုင်ငံများက ယင်းစာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကို ကိုးကားလျက် လွတ်လပ်ရေး၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရရေး တောင်းဆိုသံတို့သည် ပိုမို ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီး သွားခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီသည်ပင် ဆက်လက်၍ မသိကျိုးက္ဆွံ ဥပေက္ခာ ပြုခြင်းငှာ မစွမ်းတော့ သဖြင့် ဗြိတိသျှ အောက်လွှတ်တော်၌ ရှင်းလင်း ဖြေကြား တင်ပြ ခဲ့ရသေး၏။
အတ္တလန်တိတ် စာချုပ် ထုတ်ပြန်ပြီး၍ နှစ်လ တင်းတင်းမျှပင် မပြည့်သေးမီ ၁၉၄၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၌ အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်ပါ ရည်မှန်းချက်တို့ကို အခြား နိုင်ငံများကပါ ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြ၏။ ထိုသို့ ထောက်ခံကြောင်း ထပ်မံ ကြေညာသူများတွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ အဝေးရောက် စစ်ပြေး အစိုးရ အဖွဲ့ ရှစ်ဖွဲ့လည်း ပါဝင်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ဖက်ဆစ် ဂျာမန်တို့အား ပြောက်ကျားစစ် ဆင်နွှဲနေသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒီဂေါလ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လည်း ပါသည်။ ယင်းစာချုပ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် ၎င်းတို့ အသီးသီးကလည်း အစွမ်းကုန် ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ကြ၏။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ရေတွက်သော် နောင်သုံးနှစ်ခန့် အကြာ၌ ပေါ်ပေါက်လာမည့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ရည်ရွယ်ချက်များသည် စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော် ကြေညာချက်နှင့် အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်တွင် သန္ဓေတည်နေပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂ ဟူသော ဝေါဟာရကိုကား ယင်းကြေညာ စာတမ်းများ၌ တလုံးတပါဒမျှ မတွေ့ကြရသေးချေ။
ဝါရှင်တန်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက် (၁၊ ၁၊ ၁၉၄၂)
၁၉၄၂ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဗဲ့၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီ၊ ဆိုဗီယက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လစ်ဗီနော့ (Maxim Litvinov) နှင့် တရုတ် သမ္မတ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး တီဗွီဆွမ်း (T.V. Soong) တို့ လေးဦးသားသည် ဝါရှင်တန်မြို့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြ၏။ ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်၏။ ထိုကြေညာချက်တွင် 'ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ' (United Nations) ဟူသော အမည်နာမကို စတင် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရ၏။ သမ္မတ ရုစဗဲ့သည် သူ၏ အိမ်ဖြူတော်တွင် ရောက်ရှိ တည်းခိုနေသော ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီ၏ အိပ်ခန်း၌ အာလာပ သလ႞ာပစကား ပြောဆိုရင်း ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ဟူသော နာမည်ကို စိတ်ကူး ပေါက်ခဲ့သည်ဟု သူကိုယ်တိုင် ထိုစဉ်က အမေရိကန် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အက်ဒွပ် စတက်တင်နီယပ်အား ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးသည့် နေ့၏ နောက်တနေ့ ဖြစ်သော ၁၉၄၂၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်တွင် နောက်ထပ် နိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံတို့က ဝါရှင်တန် ကြေညာချက်ကို ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးကြ ပြန်၏။ နောက်ထပ် တဖန် ကျန်သော အခြားနိုင်ငံ ၂၁ နိုင်ငံတို့ကလည်း တဖြည်းဖြည်း အသီးသီး ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးကြလေ၏ သို့ဖြင့် ဝါရှင်တန် ကြေညာချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးသည့် နိုင်ငံအရေ အတွက်မှာ ၄၇ နိုင်ငံ အထိ တိုးသွား၏။ ယင်းတို့သည် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂကို စတင် တည်ထောင်သော အခါ၌ နောက်ထပ် ဖြည့်စွက် ပါဝင်လာမည့် အဖွဲ့ဝင် ၄ နိုင်ငံနှင့် အတူ ကုလသမဂ္ဂ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် မူလ အဖွဲ့ဝင် ၅၁ နိုင်ငံ (Founding Members) အဖြစ် ပါဝင်လာကြပေ၏။
ဝါရှင်တန် ကြေညာချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးသော နိုင်ငံ ၄၇ နိုင်ငံတို့မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု - မူလကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံများ
၂။ ဗြိတိန် - ။
၃။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု - ။
၄။ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ - ။
၅။ သြစတြေးလျ - ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး နောက်တနေ့တွင် ပါဝင် လက်မှတ်ထိုးသည့် နိုင်ငံများ
၆။ ဘယ်လ်ဂျီယံ - ။
၇။ ကနေဒါ - ။
၈။ ကော်စတာရီကာ - ။
၉။ ကျူးဘား - ။
၁ဝ။ ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယား - ။
၁၁။ အယ်ဆာဗေဒိုး - ။
၁၂။ ဂရိ - ။
၁၃။ ဂွါတီမာလာ - ။
၁၄။ ဟေတီ - ။
၁၅။ ဟွန်ဒူရပ်စ် - ။
၁၆။ အိန္ဒိယ - ။
၁၇။ လူဇင်ဘတ် - ။
၁၈။ ဟော်လန် - ။
၁၉။ နယူးဇီလန် - ။
၂ဝ။ နီကာရာဂွာ - ။
၂၁။ နော်ဝေ - ။
၂၂။ ပနားမား - ။
၂၃။ ပိုလန် - ။
၂၄။ တောင်အာဖရိက - ။
၂၅။ ယူဂိုစလားဗီးယား - ။
၂၆။ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ - ။
၂၇။ မက်ဆီကို - တဖြည်းဖြည်းဆက်၍ လက်မှတ်ထိုးသည့် နိုင်ငံများ
၂၈။ ဖိလစ်ပိုင် - ။
၂၉။ အီသီယိုပီယား - ။
၃ဝ။ အီရတ် - ။
၃၁။ ဘရာဇီး - ။
၃၂။ ဘိုလီဗီးယား - ။
၃၃။ အီရန် - ။
၃၄။ ကိုလံဗီယာ - ။
၃၅။ လိုင်ဘေးရီးယား - ။
၃၆။ ပြင်သစ် - ။
၃၇။ အီကွေဒေါ - ။
၃၈။ ပီရူး - ။
၃၉။ ချီလီ - ။
၄ဝ။ ပါရာဂွေး - ။
၄၁။ ဗင်နီဇွဲလား - ။
၄၂။ ဥရုဂွေး - ။
၄၃။ တူရကီ - ။
၄၄။ အီဂျစ် - ။
၄၅။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား - ။
၄၆။ ဆီးရီးယား - ။
၄၇။ လက်ဘနွန် - ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မီးတောက်ကြီး အရှိန် တက်နေသည့် နေ့ရက်များ၌ပင် ထိုစဉ်က အရှေ့အနောက် နိုင်ငံကြီးငယ်တို့၏ ခေါင်းဆောင်များသည် ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့အား စစ်ရေးအရ မည်သို့ အလဲ ထိုးရမည်ကိုလည်း စဉ်းစားရ၏။ စစ်အောင်နိုင် ပြီးသည့်နောက် မည်သို့သော သဘောလက္ခဏာ ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အပြည်ပြည် ဆက်ဆံရေး စနစ်မျိုး တည်ဆောက်ကြမည် ကိုလည်း တင်ကြို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် ကြရ၏။ လက်တွေ့၌ကား စစ်အောင်နိုင်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးလျက် အိတ်သွန်ဖာမှောက်၊ အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း နေရသောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်ပင် သာယာဝပြောရေးနှင့် အပြည်ပြည် ဆက်ဆံရေး ယန္ဈရားသစ် တည်ဆောက်ရေးမှာ ဝါရှင်တန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် အချိန်အထိ ထိထိရောက်ရောက် အကြောင်အထည် မပေါ်ခဲ့ပေ။
မဟာမိတ် နိုင်ငံများ ဘက်မှ စက်မှု အင်အားကြီး နိုင်ငံ တခုဖြစ်သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကလည်း ပါဝင်လာပြီ။ ထိုစဉ်က တက်သစ်စ ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံတခု ဖြစ်သော ဆိုဗီယက် ဆိုရှယ်လစ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံကလည်း မဟာမိတ် နိုင်ငံများနှင့် လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လာသည်နှင့် အမျှ ဝင်ရိုးတန်း ဖက်ဆစ် နိုင်ငံတို့သည် စက်မျက်နှာ အရပ်ရပ်၌ အထိ နာလာသည်။ အကျအဆုံး များလာသည်။ အင်အားချည့်နဲ့ ယုတ်လျော့လာသည်။ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက် အသီးသီးရှိ စစ်မျက်နှာ အရပ်ရပ်၌ပင် ဖက်ဆစ် ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့ အရေးနိမ့်စ ပြုလာတော့၏။
မဟာမိတ်တို့ အရေး သာလာသည်နှင့် အမျှ စစ်ကြီး ပြီးဆုံးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန်နှင့် သာယာဝပြော၍ တရားမျှသော လူ့ဘောင်ကို ဖန်တီးရန် အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး တည်ဆောက်ရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် ပို၍ အခွင့်သာလာ၏။ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်နှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုတို့သည် ရရှိသော အခွင့်အရေးကို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် အပိုင်ယူရန် လက်မနှေးခဲ့ချေ။ သွက်သွက်ကြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ၏။
မော်စကို ကြေညာချက် (၃ဝ၊ ၁ဝ၊ ၁၉၄၃)
၁၉၄၃ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်တွင် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု မော်စကိုမြို့တော်မှ အရေးပါသော ကြေညာချက် တစောင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ယင်းကြေညာချက်ကို ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုလိုတော့ (V. Molotov)၊ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အီဒင် (Anthonny Eden)၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကော်ဒယ်ဟား (Cordell Hull) နှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး ဖူပင်ယှောင် (Foo Ping Sheung) တို့ လက်မှတ် ရေးထိုးကြသည်။
မော်စကို ကြေညာချက်၏ အပိုဒ် (၄) မှာ နောင်များ မကြာမီ တည်ထောင် လတ္တံ့သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုသည်ကို တွေ့ရ၏။
"(၄) ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အလို့ငှာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး တခုကို လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ တည်ထောင် လတ္တံ့သော ယင်းအဖွဲ့ကြီးတွင် ကြီးငယ် မဟူ နိုင်ငံ အားလုံး ပါဝင်စေရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရာ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသော နိုင်ငံများ အားလုံးသည် အချုပ်အခြာ အာဏာ ပိုင်မှုအရာ၌ တန်းတူ ညီမျှမှု ရှိသည် ဟူသော အခြေခံမူ တရပ်ကိုလည်း ချမှတ် ထားသင့်ကြောင်းကို လည်းကောင်း က္ဆွန်ုပ်တို့ (လက်မှတ် ရေးထိုးသူ နိုင်ငံများ) အားလုံးက လက်ခံ အသိအမှတ် ပြုကြကြောင်း"
၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ကုန်ခါနီးလောက်၌မူ မဟာမိတ်တို့သည် စစ်မျက်နှာ အရပ်ရပ်တွင် အောင်ပွဲခံစ ပြုနေပေပြီ။ နောင်အခါတွင် ဒီ-ဒေး (Day of Debarquement) ဟု တွင်မည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နော်မန်ဒီ ကမ်းခြေ (Normandy) ကို မဟာမိတ် တပ်များ အလုံးအရင်းဖြင့် တက်ရောက် တိုက်ခိုက်သည့် နေ့သည်ပင် နီးကပ်လာလေပြီ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးသည့် ကာလ၌ နောက်ထပ်တကြိမ် ကမ္ဘာ စစ်မီးကြီး မတောက်ရလေအောင် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ငန်းများမှာလည်း သွက်လက် အရှိန်ရလျက် ရှိပေပြီ။
တီဟီရန် ကြေညာချက် (၁၊ ၁၂၊ ၁၉၄၃)
မော်စကို ကြေညာချက် ထွက်ပြီး ပူပူနွေးနွေး အချိန်ပင် ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဗဲ့၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီနှင့် ဆိုဗီယက် ခေါင်းဆောင် မာရှယ် စတာလင် (Marshal Joseph V. Stalin) တို့သည် အီရန်နိုင်ငံ၊ တီဟီရန်မြို့တွင် တွေ့၍ ခေါင်းချင်းရိုက် ဆွေးနွေးကြပြန်၏။ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့၏။ ကြေညာချက်၏ အပိုဒ် (၅) တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြပါရှိ၏။
"(၅) ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆိုရသော် က္ဆွန်ုပ်တို့၏ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု အင်အားကြောင့် အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မုချဆတ်ဆတ် ရရှိ စေနိုင်လိမ့်မည်။ ဤအချက်ကို က္ဆွန်ုပ်တို့၌ ဒွိဟ သံသယ စိုးစဉ်းမျှ မရှိ။ ကမ္ဘာ့လူသား တရပ်လုံး သားစဉ် မြေးဆက် စစ်အန္ဈရာယ်မှ လွတ်ကင်းရလေအောင် ကမ္ဘာ့ ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးက ယုံကြည် နှစ်ခြိုက် ကျေနပ်စွာ လက်ခံမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကို တည်ဆောက်ရန်မှာ မိမိတို့ (ဆွေးနွေးကြသူများ) အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံ အားလုံး၏ မဟာတာဝန်ကြီး ဖြစ်ကြောင်းကို က္ဆွန်ုပ်တို့ ကောင်းစွာ နှလုံးပိုက် သတိမူမိကြပေကြောင်း"
တီဟီရန် ညီလာခံ၌ ကမ္ဘာ့ အရှေ့အနောက် ခေါင်းဆောင်ကြီး သုံးဦးတို့ ဆွေးနွေး နေကြစဉ်တွင် ကမ္ဘာ့မြို့တော် အသီးသီးရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန အသီးသီး၌၊ အထူးသဖြင့် ဝါရှင်တန်၊ လန်ဒန်နှင့် မော်စကိုမြို့တို့တွင် အသစ် ဖွဲ့စည်းမည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၏ ရုပ်လုံးကို ဖော်ရန် လိုအပ်သော အခြေခံမူများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားများ၊ ဥပဒေကြမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမှာစာများနှင့် အဆိုမူကြမ်း အမျိုးမျိုးတို့ကို ရေးဆွဲ နေကြပေပြီ။ နိုင်ငံ ကြီးငယ်များ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ထမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆိုင်သော ဌာနခွဲ၊ ဌာနစိတ်နှင့် ဝါဒရေးရာ စီမံကိန်းနှင့် သုတေသန (Policy Planning and Research Division) ဌာနခွဲ တာဝန်ခံတို့မှာ ပျားပန်းခပ်မျှ အလုပ်များ နေကြမည်မှာ မလွဲပေ။
လွယ်ကူသော ကိစ္စကား အလျှင်း မဟုတ်ချေ။
အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မည်သည့်နိုင်ငံမျှ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံလိုကြ။ မဟာမိတ် နိုင်ငံများမှာလည်း ဖက်ဆစ်ဘီလူးနှင့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့၊ ဘီလူးတွေ့ ပက်ပင်း ရင်ဆိုင် နေကြရသည်။ စစ်အောင်နိုင်ရေး ဟူသော ပဓာန အကျိုးတူ ရည်ရွယ်ချက်က ဂဟေဆက် ပေးထားသဖြင့်သာ မဟာမိတ် ဖြစ်နေကြရသည်။ လုံးလုံးလျားလျားကြီး အသွင်တူကြသည် မဟုတ်။ ယင်းနိုင်ငံ အသီးသီး၏ ပြည်တွင်းရေးနှင့် ပြည်ပရေးရာ ဝါဒတို့မှာ အထွေအထွေ အပြားပြား ရှိကြ၏။ လွတ်လပ်ရေး၊ တရားမျှတရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး ဟူသော စကားလုံးများကိုပင် အတူတူ တွဲ၍ သုံးလို့သာ သုံးနေရသည်။ အနက်အဓိပ္ပာယ် နားလည်မှုနှင့် ခံယူပုံချင်း မတူ။ တကျောင်း တဂါထာစီ ဖြစ်ကြ၏။ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး တခု တည်ထောင်ရန် စိုင်းပြင်းကြရာတွင် နိုင်ငံ အသီးသီးရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနများမှ ဝါဒရေးရာ စီမံကိန်းနှင့် သုသေသန ဌာနခွဲ အသီးသီးက ထွက်ပေါ်လာသည့် သောင်းပြောင်းရောရာ အဆိုမူကြမ်း အရပ်ရပ် ဟင်းလေးအိုးကြီးထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်ထုတ်နုတ် ဆက်စပ် ညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံအားလုံး လက်ခံနိုင်သည့် တခုတည်းသော ဘုံ မူကြမ်းကို မွေးထုတ်ပေးရန်မှာ တော်ရုံတန်ရုံ လက်သည် ကောင်းကာမျှဖြင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် မရှိပေ။
ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ကြေညာချက် (၂၁၊ ၈၊ ၁၉၄၄ မှ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၉၄၄)
လန်ဒန်မြို့ စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက်နှင့် အတ္တလန်တိတ် စာချုပ်မှ စ၍ ဝါရှင်တန်၊ မော်စကိုနှင့် တီဟီရန် ကြေညာချက်တို့ အထိ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များ အချင်းချင်း အကြိမ်ကြိမ်တွေ့၊ အထပ်ထပ် ဆွေးနွေး၊ သဘောမတူနိုင်သည့် အချက်တွေကို ချေဖျက်၊ သဘောတူညီချက်တွေကို ဖော်ထုတ်၊ ကြေညာချက် အတန်တန် ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် တိုင်အောင် နောက်ထပ်၍ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ နှစ်ကြိမ် ကျင်းပကြရသေးသည်။ တကြိမ်မှာ ဝါရှင်တန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရှိ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ (Dumbarton Oaks Mansion) ၌ ဖြစ်၏။ ကျန်တကြိမ်မှာ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ကရိမီယံ က္ဆွန်းဆွယ် (Crimea Peninsula) ရှိ ယော်လ်တာမြို့ (Yalta) တွင် ဖြစ်၏။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးကို မည်သည့်မူ၊ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ မည်သည့် ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်နည်း။ ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီး ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်က တည်ထောင် ခဲ့ကြသော နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးကိုပင် ပြန်လည် အသက်သွင်းမည်လော။ ယင်းအဖွဲ့ကြီးမှာ ဖက်ဆစ်ဝါဒနှင့် နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ ထိုးနှက်မှုကို အလူးအလဲ ခံလိုက်ရသဖြင့် ဘုံးဘုံးမလဲရုံ တမည်မျှသာ ကျန်ကာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြာပုံအောက်တွင် နစ်မြုပ် သွားခဲ့ရသည်။ မည်သို့ ဖြစ်စေ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်း၏ ကောင်းသော အစဉ်အလာနှင့် အဆက်အစပ် မပြတ်ရေးကို တန်ဖိုးထား သူများလည်း ရှိသည်။ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကို တားဆီးခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ခဲ့လင့် ကစား နိုင်ငံ အချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးတွင် ကောင်းသော နမူနာ အပေါင်းလက္ခဏာ အချို့ မရှိသည်ကား မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် အချို့က နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကိုပင် ပြန်လည် အသက်သွင်း လိုကြသည်။ အချို့ကမူ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး ပုံစံသစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မည့် အဖွဲ့အစည်း အသစ်စက်စက်ကို တည်ထောင် လိုကြသည်။
နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီး၏ အဖွဲ့ဝင် စာရင်းကို ကြည့်သည် ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတို့ကို ကြည့်သည် ဖြစ်စေ ဥရောပ နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပ၏ အရေးအခင်း ပြဿနာတို့သာ လွှမ်းမိုး နေခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ်တို့သာ ခြယ်လှယ်နေသော ခြေသည်း လက်သည်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဥရောပ အစည်းအရုံး တခုသက်သက်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥရောပကလပ် (European Club) ဟုပင် အချို့ လေ့လာသူများက ကင်ပွန်း တပ်ကြသည်။ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ အီတလီတို့၏ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၊ နယ်ချဲ့ဝါဒကို တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိပုံကိုလည်း ထင်ရှားစွာ တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ဖင်လန်နိုင်ငံကို ဝင်တိုက်မိသဖြင့် အဖွဲ့ကြီးမှ ရှုတ်ချပြစ်တင် ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံထားရသော ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုကလည်း နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကို မကြည်ဖြူလှ။
နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်း တည်ထောင်စဉ်က ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက် ပြုခဲ့သော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် မရသောကြောင့် ကိုယ်တိုင် မွေးထုတ် ပေးခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့သဖြင့် သမ္မတ ဝီဒရောင်း ဝီလဆင် (W00drow Wilson) မျက်နှာမလှ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ်တဖန် ထပ်မံ၍ မျက်နှာ မပျက်လို။ ယခု တကြိမ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကလည်း ပါဝင်လိုသည်။ ကျန်နိုင်ငံများကလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပါဝင်နိုင်အောင် အခြေအနေ ဖန်တီး ပေးလိုကြသည်။
ဆိုခဲ့သော အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အဟောင်း (နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်း) ကိုပင် ပြန်လည် အသက်သွင်းမည်လော။ အသစ်စက်စက်ကိုပင် ဖွဲ့စည်းမည်လော ဟူသော ပြဿနာသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တို့အား ထိုအချိန်က အကြီးအကျယ် ခေါင်းခဲစေခဲ့၏။ နောက်ဆုံး၌မူ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်း၏ အတွေ့အကြုံတို့မှ သင်ခန်းစာယူ အခြေခံထားလျက် အသစ်ဖြစ်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ ဤကိစ္စတွင် ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ဆွေးနွေးပွဲသည် အခရာ ဖြစ်၏။
ဒန်ဗာတန်အုပ် ဂေဟာ ဆွေးနွေးပွဲကို နှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ ကျင်းပသည်။ ၁၉၄၄ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် အထိ တပိုင်း ဖြစ်၏။ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် အထိ ဒုတိယပိုင်း ဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းတွင် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုတို့ ပါဝင်သည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် တရုတ်သမ္မတ နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ ဗြိတိန်၏ ကိုယ်စား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အယ်လက်ဇန္ဒား ကာဒိုဂန် (Sir Alexander Cardogan)၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ကိုယ်စား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အက်ဒွပ်စတက်တင် နီယပ် (Edward R. Stettinius, Jr)၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ ကိုယ်စား ဝါရှင်တန်မြို့ရှိ ဆိုဗီယက် သံအမတ်ကြီး ဂရိုမီကို (Andrei A. Gromyko)၊ တရုတ်သမ္မတ နိုင်ငံကိုယ်စား သံအမတ်ကြီး ဒေါက်တာ ဝယ်လင်တန်ခူး (Dr. Wellington Koo) တို့ အသီးသီး ပါဝင် ဆွေးနွေးကြသည်။ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အဆိုပြုချက် (မူကြမ်း) များ ပါဝင်သော ကြေညာချက် တရပ်ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့၏။
ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရလဒ်အချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ တည်ထောင် လတ္တံ့သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားတွင် အထွေထွေ လွှတ်တော် (General Assembly) တခု ထားရှိရန်။ ယင်းအထွေထွေ လွှတ်တော်တွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတိုင်းအား ပါဝင် တက်ရောက်ခွင့် ပြုရန်။
၂။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသော အခြေခံ အဖွဲ့ တခု အဖြစ် လုံခြုံရေး ကောင်စီ (Security Council) ဖွဲ့စည်းထားရှိရန်။ ထို့အပြင် ကြီးငါးကြီး နိုင်ငံ အားလုံးကို လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် အမြဲတမ်း ပါဝင်စေပြီး ကျန်အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးကို မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရန်။ တကြိမ် အရွေးခံရလျှင် သက်တမ်း ၂ နှစ် တည်စေရန်။
၃။ တရားစီရင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ တရားရုံးချုပ် (International Court of Justice) ကိုလည်း အခြေခံ အဖွဲ့ တခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားရှိရန်။
၄။ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ကောင်စီ (Economic and Social Council) ကို အခြေခံ အဖွဲ့ တခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန်။
၅။ အုပ်ချုပ် စီမံ ခန့်ခွဲရေးနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး (Secretariat) ကိုလည်း အခြေခံ အဖွဲ့ တရပ် အဖြစ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းရန်။
အချုပ် ဆိုရသော် ယနေ့ တွေ့မြင် နေရသော ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အသွင်သဏ္ဍာန် ကြန်အင် လက္ခဏာ အတော်များများမှာ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ဆွေးနွေးပွဲ၏ လက်ရာများ ဖြစ်ကြ၏။ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ဆွေးနွေးပွဲ၌ အရာရာကို အလွယ်တကူ သဘောတူညီချက် ရရှိနိုင်ခဲ့သည်ကား မဟုတ်။ အမှန်စင်စစ် အောက်ပါ ကိစ္စရပ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောတူညီချက် မရနိုင်ခဲ့။
၁။ လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီနိုင်ငံများ (Colonial Territories) နှင့် ယခင် နိုင်ငံပေါင်းချုပ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ မလွတ်လပ်သေးသော နိုင်ငံများ (Colonial Territories and Territories under League of Nations Mandate)
ရှင်းလင်းချက်။ ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် အများဆုံး၊ အကျယ်ဆုံး ကိုလိုနီနိုင်ငံများကို သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ထားသည့် နိုင်ငံကြီး ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ ခေါင်းဆောင် ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီကား "က္ဆွန်ုပ်သည် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာကြီး ဖြိုခွဲရေးကို ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ မဟုတ်" (I Become Prime Minister not to Preside over the Liquidation of the British Empire) ဟု အတိအလင်း ပြောခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ၎င်းကိုယ်တိုင် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီဘဝမှ လွတ်မြောက်လာသူ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အတွင်း ပစိဖိတ် စစ်မျက်နှာတွင် အဓိက တာဝန်ယူ တိုက်ခုက်နေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် စစ်ကြီး အပြီးတွင် ဂျပန် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်လာမည့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာရှိ က္ဆွန်းနိုင်ငံ အချို့ကို အမွေ ဆက်ခံရဖို့ရန် အလားအလာက ရှိနေပြန်သည်။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု အဖို့မှာ ထိုအချိန်က ကိုလိုနီ ဟူ၍ တလက်မမျှ မရှိ။ ယင်းအခြေအနေမျိုးတွင် ဗြိတိန်နှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုတို့ သဘောထားချင်း ရင်ကြားစေ့၍ မရကြချေ။
၂။ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် ပြဿနာ အရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဲပေး ဆုံးဖြတ်ရေး ကိစ္စ။
ရှင်းလင်းချက်။ ။ ထိုအချိန်က ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တခုတည်းသော ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အကျိုးတူ၊ ဘဝတူ၊ စနစ်တူ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ မဟာမိတ် အင်အားစု ဟူ၍ မရှိသေးချေ။ ပြေးကြည့်၍ ရေတွက်လိုက်လျှင် ဘုန်းမောင် တယောက်တည်းသာ ဖြစ်နေသော ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုသည် ကျန်သော အနောက်နိုင်ငံများက မဲအင်အားဖြင့် ဖိ၍ အနိုင်ကျင့် သွားမည်ကို အထူး စိုးရိမ်သည်။ စိုးရိမ်စရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် 'ဗီတိုပါဝါ' ဟု လူအများက ခေါ်နေကြသော [မိမိ မကြိုက်လျှင် မိမိ တမဲတည်းဖြင့် မဲအများစုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်] အာဏာကို အရအမိ ယူထားလိုသည်။ ထိုစဉ်က အကျိုးတူ မဟာမိတ် အင်အား တောင့်တင်းနေသော ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က အင်တင်တင် ဖြစ်နေသည်။ အနည်းစုက အများစု၏ ဆန္ဒကို လိုက်လျော လက်ခံရသည့် ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာကို ထောက်ပြကြသည်။ ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ထိုစဉ်က ကမ္ဘာ့ အနေအထား အရ ဆိုဗီယက်က မဲများရာဖြင့် ဖိပြီး အနိုင်ယူသွားခံရဖို့ အန္ဈရာယ်ကလည်း မရှိ။ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်က ဗီတိုပါဝါ ရရှိရန် အလေးမထားကြ။ သို့နှင့် သဘောချင်း ညှိ၍ မရ။
၃။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုက ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ် ၁၆ ခု (Sixteen Autonomous Republics) အား ဖွဲ့လတ္တံ့သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးတွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အဖြစ် သီးခြားစီ ဝင်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုသည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ။ မဲများရာဖြင့် ဖိ၍ အနိုင်ကျင့် ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဗီတိုပါဝါကို မရမက တောင်းဆိုနေသော ဆိုဗီယက်တို့သည် မဲအရေအတွက် များစေခြင်းငှာ တနည်းတဖုံ အကြံထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ် (Autonomous Republics) တဆယ့်ခြောက်ခု (အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများ မဟုတ်) ကို အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးတွင် သီးခြား လွတ်လပ်သော၊ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ဝင်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုသည်။ ဒိုမီနီယန် အဆင့် (Dominion Status) မျှသာ ရှိသေးသော သြစတြေးလျနှင့် ကနေဒါတို့ကို လည်းကောင်း၊ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး မဆိုထားဘိ၊ ဒိုမီနီယန် အဆင့်ကိုပင် မရသေးသော ဗြိတိသျှ လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီနိုင်ငံ တခုမျှသာ ဖြစ်သော အိန္ဒိယကို လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်စေလိုသော အာသီသမျိုး ဗြိတိန်၌ ရှိနေသည်။ ဤအခြင်းအရာကို ဆိုဗီယက် ခေါင်းဆောင်တို့ကလည်း ကောင်းစွာ ရိပ်စားမိသည်။ ထို့ကြောင့် ရဲရဲတင်းတင်းပင် သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ၁၆ မဲရရန် ဆိုဗီယက်တို့က အကြံပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
ထိုသို့ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေသော ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ မည်သို့မျှ သဘောတူညီချက် မရနိုင်တော့ သဖြင့် ၁၉၄၅ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျင်းပမည့် ယော်လ်တာမြို့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတွင်မှ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ကြရတော့၏။
ယော်လ်တာ ဆွေးနွေးပွဲ (၁၁၊ ၂၊ ၁၉၄၅)
၁၉၄၅ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဆိုဗီယက် ဝန်ကြီးချုပ် စတာလင်၊ အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဗဲ့နှင့် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့သည် ယော်လ်တာမြို့တွင် ဆွေးနွေးကြသည်။ ဒန်ဘာတန်အုပ်တွင် လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေသည့် အချက်သုံးချက် အနက်၊ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် မဲပေးပုံ ပေးနည်း ကိစ္စနှင့် ဆိုဗီယက်ပြည်နယ် အချို့ကို အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဝင်ခွင့်ပြုရေး ကိစ္စတို့တွင် အကြမ်းအားဖြင့် သဘောတူညီချက် ရကြသည်။ အရှေ့ အနောက် ခေါင်းဆောင် သုံးဦးသည် ၁၉၄၅ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်တွင် ယော်လ်တာမှ အောက်ပါ အတိုင်း ကြေညာနိုင်ခဲ့၏။
"က္ဆွန်ုပ်တို့သည် က္ဆွန်ုပ်တို့၏ မဟာမိတ်များနှင့် အတူ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် လိုအပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန် သန္နိဋ္ဌာန် ပြုကြသည်။"
"ညီညွတ် စည်းလုံးသော မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၏ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံကြီး တခုကို ၁၉၄၅ ခု၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် လည်းကောင်း၊ ယင်းညီလာခံ၌ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာ ကြေညာချက်နှင့် အညီ တည်ထောင် လတ္တံ့သော ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့၏ ပဋိညာဉ်စာတမ်း (ဝါ) စာချုပ်ကြီးကို ရေးဆွဲရန် လည်းကောင်း က္ဆွန်ုပ်တို့ သဘောတူကြသည်။"
စစ်ဦး ဘီလူး ကာလဟု ဆိုရမည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး စခါစ အချိန် ဖြစ်သော ၁၉၄၁ ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စိန့်ဂျိမ်းနန်းတော် ကြေညာချက်မှ အစပြုကာ ဝါရှင်တန်၊ မော်စကိုနှင့် တီဟီရန် အလယ်၊ ဒန်ဘာတန်အုပ်နှင့် ယော်လ်တာ အဆုံး ရှိသော ကြေညာချက် အရပ်ရပ်တွင် ဖွဲ့စည်းအံ့သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၏ ရုပ်လုံးပုံ သဏ္ဍာန်သည် တစတစ ပိုမိုပီပြင် ထင်ရှားလာပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် လက်တဖက်မှ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မီးတောက်ကြီးကို ငြိမ်းသတ် နေရင်း၌ပင် အခြား တဖက်မှ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ အခြေခံမူများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ နိုင်ငံအများက နှစ်ခြိုက် ကျေနပ်စွာ လက်ခံနိုင်မည့် ပဋိညာဉ် စာတမ်း (ဝါ) စာချုပ်ကြီးကို ရေးဆွဲ ခဲ့ကြရသည်။ ယင်းသို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ညှိနှိုင်း သဘောတူညီချက် ရယူထားပြီးသော မူကြမ်းတို့ကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အစိုးရ အသီးသီးမှ အထူးအာဏာလွှဲ စာခ္ဆွန် (Full Powers) ပေးအပ်ခြင်း ခံရသော ကိုယ်စားလှယ်များ စုံညီစွာ တက်ရောက်သည့် ညီလာခံကြီးက တစ်ခဲနက် လက်ခံလိုက်သော အခါတွင် ဖက်ဆစ်ဝါဒနှင့် နယ်ချဲ့ဝါဒ အောက်တွင် ပြားပြားဝပ် နေကြသော ကမ္ဘာ့ လူထုကြီး အတွက် ၎င်းတို့ မျှော်လင့် တောင့်တအပ်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးသည် အကောင်အထည် ပေါ်လာတော့၏။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြာပုံ အတွင်းမှ လူးကာလွန့်ကာ တရိပ်ရိပ် ခေါင်းထောင် ထလာသယောင်ပင် ထင်မြင်ရလေ၏။ ထိုစဉ်က ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများ အားလုံး ဖက်ဆစ်ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့၏ ရန်ကို ပူးပေါင်း ကာကွယ် တိုက်ဖျက် ခဲ့ကြသည်မှာ အားရဖွယ်ရာ ကောင်းသလောက် ဖက်ဆစ် အာဏာရှင် စနစ်များ ဘုံးဘုံးလဲကျ ရှုံးနိမ့် သွားပြီးသည့် နောက်၌ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြသည်မှာလည်း အတော်ကြီး လက်ညီတက်ညီ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ယော်လ်တာ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူထားပြီးသည်နှင့် အညီ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်မှုများကို သွက်သွက်ကြီး ပြုလုပ်ကြ၏။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်နှင့် တရုတ် သမ္မတနိုင်ငံတို့က ကမကထ ပြုသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံအား ဖော်ပြပါ ကြီးလေးကြီး နိုင်ငံများ နည်းတူ ပါဝင်လျက် ကမကထ ပြုရန် ချဉ်းကပ် ခဲ့သေးသော်လည်း ပြင်သစ်က ကမကထ ပြုသူ (Cosponsor) အဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံ ကျင်းပရာ၌ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ ဖြစ်သော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကြီးလေးကြီး နိုင်ငံတို့၏ ကိုယ်စား ဖိတ်စာများကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရ အသီးသီးသို့ ပို့ခဲ့၏။
၁၉၄၂ ခုနှစ်ဆန်းတွင် ဝါရှင်တန်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ ကြေညာချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် နိုင်ငံ ၄၇ နိုင်ငံ၏ အစိုးရများ အားလုံး ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသည်။ ယင်းတို့အပြင် အာဂျင်တီးတား၊ ဒင်းမတ်၊ ဘိုင်လို ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့ကို ဖြည့်စွက် ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ ညီလာခံ ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၅၁ နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
၁၉၄၅ ခု၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိ အော်ပရာ ဇာတ်ရုံကြီး၌ ညီလာခံ စဖွင့်သည်။ ဒန်ဘာတန်အုပ် ဂေဟာတွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် မူများနှင့် ယော်လ်တာ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖြည့်စွက် ထည့်သွင်းခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်တို့မှာ ညီလာခံ ဆွေးနွေးပွဲ၏ အခြေခံများ ဖြစ်ကြ၏။ ညီလာခံ မစမီကပင် ကျယ်ပြန့်နိုင်သမျှ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေ ဆွေးနွေး ထားကြပြီး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို စသည်တို့ကလည်း မရပ်မနား သတင်း ဖြန့်ချိ ခဲ့ကြသည်။ ညီလာခံကြီး ကျင်းပသော အခါ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ သတင်းထောက် ဦးရေ ၂,၆၃၆ ယောက်တို့သည် ညီလာခံ ခန်းမကြီးမှ နေ့စဉ် သတင်းတို့ကို သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် အရယူလျက် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်သို့ ဖြန့်ချိ ခဲ့ကြ၏။
ညီလာခံ တက်ရောက်သူ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေမှာ ၂၈၂ ယောက် ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အသီးသီး၏ ရုံးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များကိုပါ ထည့်သွင်း ရေတွက်သော် ညီလာခံ တက်ရောက်သူပေါင်း ၁,၇၆၂ ယောက် ရှိ၏။ ညီလာခံ အတွင်း နေ့စဉ် ရိုက်နှိပ် ဖြန့်ဝေရသော စာရွက်စာတမ်းများမှာ ပျမ်းမျှ ရွက်ရေ ငါးသိန်းခန့် ရှိလျက် စာရွက်စာတမ်းများ၏ အလေးချိန်မှာ ၇၈ တန်မျှ ရှိသော ဟူ၏။ ထိုအချိန် အထိ ၂ဝ ရာစုနှစ် အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ညီလာခံများ အနက် ဆန်ဖရန်စ္စကို ညီလာခံသည် ထင်ပေါ် ကျော်ကြား လူသိ အများဆုံး ဖြစ်၏။
စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော် ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့် ၁၉၄၁ ခု၊ ဇန်နဝါလီမှ စ၍ ငါးနှစ်နီးပါး ကြာမျှပင် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံကြီးဆီသို့ ရှေးရှုအားထုတ် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြ၏။ သမ္မတ ရုစဗဲ့နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့ မြောက်အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ တခုသော နေရာတွင် ကျောက်ချထားသည့် စစ်သင်္ဘောပေါ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမှ စ၍ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ယော်လ်တာမြို့ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်အောင် ကမ္ဘာတွင် တာဝန် အရှိဆုံး စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ သြဇာတိက္ကမ အကြီးမားဆုံး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ၏။
ဤသို့ဆို၍ ဆန်ဖရန်စ္စကို ညီလာခံသည် လေစု ရေစုန်တွင် ရွက်ကုန်လွှင့် ဘိသကဲ့သို့ ချောမော ပြေပြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆလျှင်ကား ထိုထက်မှားသော အမှား မရှိနိုင်ရာချေ။ တံဆိပ်တုံး ခတ်ရုံ၊ လက်မှတ်ထိုးရုံ၊ ဆွေးနွေးဘက်ချင်း အပြန်အလှန် ချီးကျူးစကား ဆို၍ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရုံမျှဖြင့် ပြီးသော ညီလာခံကား အလျှင်းမဟုတ်။ သောင်တွေ၊ စည်းတွေ၊ ကျောက်ဆောင်တွေ အကြိမ်ကြိမ် တိုးခဲ့ရသဖြင့် ခရီးဆုံး ပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းမှ လှမ်းနိုင်ပါမည်လောဟု ရင်တမမ ဖြစ်ခဲ့ကြရ၏။ ခေတ်သစ် စနစ်သစ် စာမျက်နှာသစ် ဖွင့်မည့် သမိုင်းဝင် ညီလာခံကြီး ဖြစ်၏။
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ စတက်တင်နီယပ်က လည်းကောင်း၊ ဆိုဗီယက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာမိုလိုတော့က လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အီဒင်က လည်းကောင်း၊ တရုတ် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာဆွမ်းက လည်းကောင်း အသီးသီး ခေါင်းဆောင်ပြုပြီး ပြင်သစ် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဘီဒေါ့ (Mr. George Bidalt) က ခေါင်းဆောင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မေလလယ်ခန့်တွင် ဥရောပ၌ စစ်အခြေအနေသည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာသောကြောင့် ဖော်ပြပါ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ငါးဦး အနက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးမှ အပ ကျန်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဝန်ကြီးတို့သည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ လုပ်ငန်းများကို ထားခဲ့၍ မိမိနိုင်ငံ မြို့တော် အသီးသီးသို့ ပြန်သွားကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များကို ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် အသီးသီးက ဆက်လက် ခေါင်းဆောင် တက်ရောက်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဗြိတိန်မှ လော့ဒ် ဟယ်လီဖက် (Lord Halifax)၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုမှ ဂရိုမီကို၊ တရုတ် သမ္မနိုင်ငံမှ ဝယ်လင်တန်ခူးနှင့် ပြင်သစ်မှ ဂျိုးဇက်ပေါလ်ဘန်းကူး (Josef Paul Bancour) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ပဲ့ကိုင် ကော်မတီ (Steering Committee)
ညီလာခံ တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံ အားလုံး ပါဝင်သော ပဲ့ကိုင် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ပဲ့ကိုင် ကော်မတီ၏ သဘာပတိ အဖြစ် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ စတက်တင်နီယပ်အား တင်မြှောက် လိုက်ကြ၏။
အမှုဆောင် ကော်မတီ (Executive Committee)
၁၃ နိုင်ငံ ပါဝင်သော အမှုဆောင် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် အိမ်ရှင်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ စတက်တင် နီယပ်ကိုပင် တင်မြှောက်သည်။
ကော်မရှင် လေးခုနှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခု ဖွဲ့ခြင်း
ညီလာခံ၏ အောက်ခြေသိမ်း လုပ်ငန်း အဝဝကို အသီးသီး တာဝန် ခွဲဝေ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဓိက ကော်မရှင် လေးခုနှင့် အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခုကို ဖွဲ့စည်းသည်။ အဖွဲ့ငယ် အသီးသီးသည် အဓိက ကော်မရှင် လေးခုနှင့် အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခုကို ဖွဲ့စည်းသည်။ အဖွဲ့ငယ် အသီးသီးသည် အဓိက ကော်မရှင် လေးခု အနက်မှ သက်ဆိုင်ရာ တခုခု၏ ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲမှု ခံယူ၍ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ယင်းကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ငယ်တို့သည် တည်ထောင် လတ္တံ့သော ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်း ဖြစ်ရမည့် စာချုပ် (ဝါ) ပဋိညာဉ် စာတမ်း မူကြမ်းကို ကဏ္ဍ အသီးသီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ရေးဆွဲ တင်ပြရန် တာဝန် ယူကြရသည်။
ကော်မရှင် လေးခုနှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခုတို့ လုပ်ငန်းတာဝန် ခွဲဝေ ဆောင်ရွက်ကြပုံကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါ လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မည်မျှ ကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ ကြီး ငယ် လတ် အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုး ခဲ့ကြပုံကို လည်းကောင်း ထင်းရှားစွာ တွေ့ရသည်။ အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခုက မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ အပိုင်း အတွက် စာပိုဒ် မူကြမ်းများကို ရေးဆွဲ၍ ဆိုင်ရာ အဓိက ကော်မရှင်သို့ တင်ပြကြရသည်။ ဆိုင်ရာ ကော်မရှင် အသီးသီးက အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီနှင့် ပဲ့ကိုင် ကော်မတီသို့ ဆက်လက် တင်ပြကြသည်။ နောက်ဆုံး အဆင့်တွင် ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး ပါဝင်သော မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို တင်ပြ၍ ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုသည်။
အထက် ဖော်ပြပါ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး၊ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီ၊ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့၊ အဓိက ကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ငယ်များ အပြင် အရေးပါသော အဖွဲ့ငယ် နှစ်ခု ကျန်ရှိသေး၏။
ညှိနှိုင်း ဆက်စပ်ရေး ကော်မတီ
ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်များမှာ အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ကော်မတီ အဖွဲ့ငယ် ၁၂ ခုနှင့် ကော်မရှင် ၄ ခုတို့ အသီးသီးက တင်ပြသော ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ် စာပိုဒ်မူကြမ်း အသီးသီးကို ပူးပေါင်း ဆက်စပ်လျက် စကား အသုံးအနှုန်း၊ ရှေ့နောက် အထားအသို၊ ပုဒ်၊ ပါဒ၊ ဝါကျ၊ စာသွား စာလာ ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ၊ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ မှန် မမှန် စိစစ် ညှိနှိုင်းသည်။ ကော်မရှင် အသီးသီးက တင်ပြသော စာမူကြမ်း၏ အနက် အဓိပ္ပာယ် အနှစ်သာရကို ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိပေ။
ဥပဒေ အကြံပေး ကော်မတီ (Advisory Committee of Jurists)
အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ မက္ကဆီကို၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဗြိတိန်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤကော်မတီမှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၌ ညီလာခံ၏ တရားဝင် ဘာသာစကား ငါးမျိုးကို ပြောသော နိုင်ငံများ ပါဝင် ဖွဲ့စည်း ထားသည်။ ဥပဒေ အကြံပေး ကော်မတီ၏ တာဝန်မှာ ညှိနှိုင်း စိစစ်ရေး ကော်မတီအား ကူညီရန်သာ ဖြစ်သည်။
ညှိနှိုင်း စိစစ်ရေး ကော်မတီနှင့် ဥပဒေ အကြံပေး ကော်မတီတို့မှာ လုပ်ငန်း သဘာဝ အားဖြင့် ကျန် အခြားသော ကော်မရှင် စသည်တို့နှင့် မတူပေ။ ထိုကော်မတီ နှစ်ခုတွင် ပါဝင် ဆွေးနွေးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြခြင်း မဟုတ်၊ ပုဂ္ဂလိက က္ဆွမ်းကျင်သူများ အဖြစ် ပါဝင်ကြခြင်း ဖြစ်၏။
(က) သဘာပတိ ရွေးချယ်ရေး ကိစ္စ
အထက် တနေရာတွင် ဖော်ပြပြီးခဲ့သည့် အတိုင်း ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံ၏ လုပ်ငန်းတို့မှာ ရာနှုန်းပြည့် ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူး ရှိခဲ့သည် မဟုတ်။ ညီလာခံ မစမီ ညီလာခံ သဘာပတိ ရွေးချယ်ကြတော့မည် ဆိုသည်နှင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာတော့သည်။ ကမ္ဘာ့ အစဉ်အလာ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် အရမှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာ နိုင်ငံ၏ အိမ်ရှင် အစိုးရကို ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အား သဘာပတိ အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်မြဲ ဖြစ်၏။ ယခု ကိစ္စတွင် အစဉ်အလာကို ဆိုဗီယက် ကိုယ်စားလှယ်က လက်မခံ သဖြင့် စကတည်းက ယဉ်ပေသကို ဖြစ်ခဲ့သည်။
အစဉ်အလာကိုပင် လိုက်မည်လော၊ ဆိုဗီယက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က တင်ပြသကဲ့သို့ ညီလာခံကြီးကို ကမကထ ပြုကြသည့် နိုင်ငံကြီး လေးနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုပင် ပူးတွဲ သဘာပတိ အဖြစ် တင်မြှောက်မည်လော၊ သို့တည်း မဟုတ် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ အီဒင် အကြံပေး သကဲ့သို့ ကမကထပြုသူ နိုင်ငံကြီး လေးနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်တို့က တလှည့်စီ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်လော၊ ညီလာခံ မစနိုင်မီ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးကြရ၏။ နောက်ဆုံး၌ ရှေးရိုးစဉ်အလာ အတိုင်း အိမ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်ကို ဦးစားပေးခြင်းလည်း မဟုတ်၊ ဆိုဗီယက် ဆန္ဒ အတိုင်းလည်း မကျသော ဗြိတိသျှ၏ အကြံပေးချက်ကို လက်ခံ၍ အလှည့်ကျ သဘာပတိ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
(ခ) ဘာသာစကား ကိစ္စ
ပဲ့ကိုင် ကော်မတီ၏ ပထမ အစည်းအဝေးတွင် အလှည့်ကျ သဘာပတိ ဖြစ်သူ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဖွင့် မိန့်ခွန်းစကား စတင် ပြောကြားသည်။ ဤတွင် ပြဿနာ တမှောင့် ပေါ်ရပြန်သည်။ သဘာပတိ၏ မိန့်ခွန်းကို ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် တပါတည်း ပြန်ဆိုပေးပါရန် ပြင်သစ် ကိုယ်စားလှယ်က ထ၍ တောင်းဆိုသည်။ သို့ဖြင့် ညီလာခံ၏ တရားဝင် ဘာသာစကား သတ်မှတ်ရေး ပြဿနာ ပေါ်ပေါက် လာရပြန်၏။ ထို့နောက် အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာကို ညီလာခံ၏ အစည်းအဝေးတိုင်း အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ဘာသာစကား (Working Languages) အဖြစ် ဆက်လက် အသုံးပြုသွားရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြရ၏။ ထို့ပြင် ညီလာခံ၏ မှတ်တမ်းများကို အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ တရုတ်နှင့် စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေ သွားရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ထိုဘာသာစကား ငါးမျိုးကို ညီလာခံ၏ တရားဝင် ဘာသာ စကားများ (Official Languages) အဖြစ် တပါတည်း သတ်မှတ်ရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။
(ဂ) ဆိုဗီယက်ပြည်နယ် နှစ်ခုကို ဖိတ်ကြားရေး ကိစ္စ
ယော်လ်တာ ဆွေးနွေးပွဲ စသည်တို့တွင် သဘောတူညီခဲ့ပြီးသော ကိစ္စ အချို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်း နားလည် သဘောပေါက်ပုံချင်း ကွာခြားချက် ရှိသောကြောင့် အခက်အခဲ အချို့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သေး၏။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ် နှစ်ခုအား ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံသို့ ဖိတ်ကြား တက်ရောက်စေရန် ယော်လ်တာတွင် ဆွေးနွေးစဉ်က ရုစဗဲ့နှင့် ချာချီတို့က သဘောတူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု စတာလင်က သဘောပေါက်ထားသည်။ ရုစဗဲ့နှင့် ချာချီက ထိုသို့ အပြီးအပိုင် နားလည် လက်ခံခြင်း မရှိ။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ် ၁၆ ခုအနက် နှစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း လတ္တံ့သော ကမႝာ့အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွင် ဝင်ခွင့်ပြုရန် အဆို တင်သွင်းပါက ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ဗြိတိသျှနှင့် အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်တို့က ယူဆသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံသို့ ဆိုဗီယက် ပြည်နယ် နှစ်ခုအား ဖိတ်ပါမည်ဟူ၍ ဖြစ်စေ၊ မဖိတ်နိုင်ဟူ၍ ဖြစ်စေ၊ တစုံတရာ ကတိပြုခဲ့ခြင်း မရှိဟု ချာချီနှင့် ရုစဗဲ့တို့က ဆိုသည်။
နောက်ဆုံး၌မူ အာဂျင်တီးနားကို ဖြည့်စွက် ဖိတ်ကြားလိုက်သော တောင်အမေရိကန် နိုင်ငံတို့က ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီ အဆင့်မျှသာ ရှိသေးသော အိန္ဒိယနှင့် ဒိုမီနီယန် အဆင့်မျှသာ ရှိသေးသော ကနေဒါနှင့် သြစတြေးလျကို ဖိတ်ကြားရန် အားသန်နေ သဖြင့် လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မဟာမိတ်နိုင်ငံများနှင့် လိုက်လျော ညီထွေပြုသည့် အနေဖြင့် လည်းကောင်း ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ အဆိုကို လက်ခံလိုက်လေ၏။ ဤနည်းဖြင့် ဘိုင်လိုရုရှား (Byelorussian Soviet Socialist Republic) နှင့် ယူကရိန်း (Ukrainian Soviet Socialist Republic) တို့ကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံသို့ ဖြည့်စွက် ဖိတ်ကြား ခဲ့ကြရလေသည်။ ယခုအခါ ဘိုလိုရုရှားသည် ဘီလာရု အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယူကရိန်း ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံသည် ယူကရိန်း အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း သီးခြား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများ အဖြစ် ရှိနေကြလေ၏။
(ဃ) အခြား အခက်အခဲများ
ဆိုခဲ့သော အခက်အခဲတို့မှာ အနည်းငယ်သော သာဓကမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ညီလာခံတွင် မဲပေးပုံ စနစ် ကိစ္စ၊ ကိုလိုနီနိုင်ငံများ လွတ်မြောက်ရေး ကိစ္စ၊ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် နိုင်ငံကြီး ငါးနိုင်ငံတို့အား ဗီတိုပါဝါ ခေါ် တချက်လွှတ် ပယ်ချနိုင်ခွင့် အာဏာ ပေးသင့် မပေးသင့် ကိစ္စ၊ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး အတွက် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂမှ တပါး အခြားသော အသင်းအဖွဲ့ (Regional Organizations) ဖွဲ့ခွင့် ပေးထိုက် မပေးထိုက် ကိစ္စ၊ ကုလသမဂ္ဂကို အသုံးပြု အကာအကွယ် ယူပြီး နိုင်ငံ တနိုင်ငံက အခြား တနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ပါဝင် စွက်ဖက်ခြင်း မပြုနိုင်အောင် တားဆီးရေး ကိစ္စ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ တရားစီရင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အာဏာသည် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ အားလုံး အပေါ်၌ အလိုအလျောက် လွှမ်းမိုး စေသင့်သလော၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ အသီးသီး၏ ဆန္ဒ အလျောက် ကိစ္စ တခုချင်း အလိုက်သာလျှင် ရွေးချယ် လက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိစေသင့်သလော ဆိုသည့် မြားမြောင်လှသော ပြဿနာတို့ဖြင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၏။ ဤကိစ္စများသည် ကုလသမဂ္ဂ သက်တမ်း တလျှောက်လုံးတွင် အငြင်းပွား၍ မဆုံးခဲ့ချေ။
နိုင်ငံကြီးတွေက ဗီတိုပါဝါကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး နိုင်ငံငယ်ကလေးများကို အနိုင်ကျင့်လေမည်လောဟု နိုင်ငံငယ်တွေက စိုးရိမ်ကြသည်။ နိုင်ငံငယ်ကလေးများက တနိုင်ငံလျှင် တမဲ ပေးခွင့် စနစ်ကို အားကိုးပြုကာ မဲအရေအတွက် များအောင် စုပေါင်း၍ မဲအင်အားဖြင့် ဖိလျက် တာဝန်မဲ့ ဆောင်ရွက် သွားမည်လောဟု နိုင်ငံကြီးတွေ ဘက်ကလည်း လန့်ကြသည်။
ဆိုခဲ့သော အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ကျော်လွှားရန် အတန်ပင် ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြရသောကြောင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံကြီးကို အောင်မြင်စွာ မရုပ်သိမ်းနိုင်မီ ၁၉၄၅ ခု၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၆ ရက်အထိ နှစ်လတင်းတင်းမျှ ကာလ အတွင်း၌ သောင်တွေ၊ စည်းတွေ၊ ကျောက်ဆောင်တွေနှင့် လေဝဲ ရေဝဲ လေကြမ်း ရေကြမ်း အတန်တန် ရှောင်ကွင်း လှော်ခတ် ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ပဋိညာဉ်စာတမ်း (ဝါ) စာချုပ်ကြီး အတည်ဖြစ်ခြင်း
၁၉၄၅ ခု၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်း ဖြစ်သော ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ် (ဝါ) ပဋိညာဉ် စာတမ်း မူကြမ်းကို ညီလာခံကြီးက တခဲနက် အတည်ပြုကြသည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိ စစ်သည်တော်များ အထိမ်းအမှတ် ခန်းမကြီးတွင် ညီလာခံ တက်ရောက်သော နိုင်ငံပေါင်း ၅ဝ မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အသီးသီးတို့သည် ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်ကို တယောက်ပြီး တယောက် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ပိုလန်နိုင်ငံ အစိုးရမှာ ၎င်း၏ ပြည်တွင်းရေး ရှုပ်ထွေး နေသောကြောင့် အများနည်းတူ တပြိုင်တည်း လက်မှတ် မထိုးနိုင်ခဲ့။ နောက်မှ သီးခြား လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
ညီလာခံကြီးက လက်ခံ အတည်ပြု၍ ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီး လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးကာမျှဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ် တရားဝင် အတည်ဖြစ်ခြင်း မရှိသေးချေ။ တရားဝင် အတည်ဖြစ်ရန် မည်သည့် အခြေအနေဖြင့် ပြည့်စုံရမည်ကို ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်၏ သက်ဆိုင်ရာ စာပိုဒ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ စည်းကမ်းချက် နှစ်ချက်ဖြင့် ပြည့်စုံရန် လိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးကြသော နိုင်ငံများ အနက် အများစုကြီးက အတည်ပြု စာခ္ဆွန် (Instrument of Ratification) ပေးအပ်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပြီးသော နိုင်ငံ အများစုတွင် ကြီးငါးကြီးဟု ယခု အခါ၌ အသိအမှတ် ပြုထားခြင်း ခံရသည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၊ ပြင်သစ်နှင့် တရုတ် သမ္မတနိုင်ငံတို့လည်း အပါအဝင် ဖြစ်စေရမည်။ ထိုလိုအပ်ချက် နှစ်ရပ် ပြည့်စုံသော နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ် တရားဝင် အတည် ဖြစ်ရမည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ စည်းကမ်း အတိုင်း ၁၉၄၅ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်တွင် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့သောကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်သည် ထိုနေ့မှ စ၍ တရားဝင် အတည် ဖြစ်လေတော့၏။
ထို့ကြောင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ညီလာခံ၌ ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရက်မှစ၍ ရေတွက်သော် ၁၉၉၅ ခု၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၅ဝ) ပြည့်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်သည် တရားဝင် အတည်ဖြစ်လျက် အသစ် ဖွဲ့စည်းအပ်သော ကမ္ဘာ့ အပြည်အပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှားသည့် ရက်မှစ၍ တွက်သော် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်တွင် နှစ်ပေါင်း (၅ဝ) တင်းတင်းပြည့်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ ဇာတိချက်ွေ့က ဖြစ်သော ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ ဌာနချုပ်တည်ရာ ဖြစ်သော နယူးယောက်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဥရောပ ဌာနချုပ် တည်ရာ ဂျီနီဗာမြို့ ကြီးများနှင့် တကွ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် မြို့တော် အသီးသီး မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင်တွင် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ရွှေရတုသဘင် ပွဲများကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် အတွင်း၌ ဝှဲချီး ဆင်ယင် ကျင်းပခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မနည်းလှသော အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားလျက် နိုင်ငံအများ သဘောတူ လက်ခံနိုင်သည့် တခုတည်းသော မူကြမ်းကို ရေးဆွဲ အတည်ပြု နိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ မသေးငယ်လှသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဗဲ့၊ ဆိုဗီယက် ဝန်ကြီးချုပ် စတာလင်၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီ စသည်တို့၏ စိတ်ရှည်မှု၊ ဇွဲကောင်းမှု၊ အမြော်အမြင် ကြီးမားမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံငယ်ကလေး များစွာမှ ခေါင်းဆောင်များ၏ တာဝန်သိစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ဖက်ဆစ် ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့အား တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်၍ ဘုံးဘုံးလဲသည် အထိ ထိုးနှက် ချေမှုန်းရာ၌ ညီညွတ် စည်းလုံးခဲ့၊ သတ္တိ ပြောင်ခဲ့သလောက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ထိန်းသိမ်းရန် စုပေါင်း ကြိုးပမ်းကြရာတွင်လည်း ဇွဲကောင်းကောင်း၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိရှိ၊ အမြော်အမြင် ကြီးကြီး၊ သူရသတ္တိ ပြည့်ပြည့်ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြသည်ကို နှစ်ထောင်း အားရဖွယ်ရာ တွေ့ရပေသည်။
ထိုစဉ်က ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် အချင်းချင်း အကြား တဦးနှင့် တဦး အွ့ကင်းမဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိကြသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာစစ်ပြီး ပြဿနာတို့ကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရာ၌ အပေးအယူ မျှတ ခင်မင် ရင်းနှီးခဲ့ကြပုံမှာ မှတ်သားလောက် ပါသည်။ အမေရိကန်က ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုအား ဖက်ဆစ် နာဇီရန်ကို တွန်းလှန်ရန် အတွက် ကူညီသည့် အနေဖြင့် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသော တိုက်သင်္ဘော၊ ဖျက်သင်္ဘော၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ်၊ တိုက်လေယာဉ်နှင့် တင့်ကားမှ အစ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ် မျိုးစုံကို ပေးခဲ့သည်။ ငတ်မွတ်ခြင်း ဘေးမှ ကာကွယ်ရန် ဂျုံ စသည့် စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန်ပေါင်း အမြောက်အမြားကိုလည်း သက်စွန့်ဆံဖျား ရန်သူ အနှောင့်အယှက် မျိုးစုံအကြားမှ ခက်ခက်ခဲခဲ ဝေးဝေးလံလံ ပေးပို့ ခဲ့ရသည်။ ရုရှား ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ လက်ခံယူသည်။ အမေရိကန် လက်နက်ကိုင် တပ်များကို အမေရိကန် တပ်မှူးများ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲပြီး ဆိုဗီယက် မြေပေါ်တွင် ကြိုက်သည့် နေရာ ကြိုက်သည့် စစ်မျက်နှာ၌ ပါဝင် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါသည်ဟုပင် ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင် စတာလင် ကိုယ်တိုင်က ပြောခဲ့ဖူး၏။
ကွန်မြူနစ် ဆိုဗီယက် ရုရှားမှ ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များနှင့် အမေရိကန် ဗြိတိသျှ စသည့် ထိပ်တန်း အရင်းရှင်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ၊ တီဟီရန် ၊ ကိုင်ရို၊ ပို့စဒမ် စသည့် တတိယနိုင်ငံ မြို့အသီးသီးတွင် လည်းကောင်း၊ မော်စကို၊ လန်ဒန်နှင့် ဝါရှင်တန်မြို့တော် အသီးသီးတွင် လည်းကောင်း ညဉ့်ဦးယံမှ လင်းအားကြီး အထိ အရေးကြီးလျှင် ကြီးသလို ဆွေးနွေးကြရ၏။ မော်စကိုမြို့ ကရင်မလင် နန်းတော်ရှိ ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင် စတာလင်၏ ရုံးခန်းနှင့် နေအိမ် ဧည့်ခန်းတို့တွင် ဆွေးနွေး ကြသည်များလည်း ရှိ၏။ ဝါရှင်တန်မြို့ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ရှိ ရုံးခန်း၊ စာကြည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းတို့တွင် ဆွေးနွေး ကြရသည်လည်း ရှိခဲ့၏။ လန်ဒန်မြို့ရှိ ချာချီ၏ ရုံးခန်း၊ အနားယူ စခန်းနှင့် ဗုံးခိုကျင်းထဲတွင် ဆွေးနွေးရသည့် အကြိမ်များလည်း ရှိခဲ့၏။
ကွန်မြူနစ် ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင် မိုလိုတော့၊ ဝါရှင်တန်ရောက်သည့် အခါတွင် သမ္မတ ရုစဗဲ့၏ အိမ်ဖြူတော်၌ပင် တည်းခိုခဲ့ဖူးသည်။ တနေကုန် တနေခန်း ညဉ့်နက်သန်းခေါင် လင်းအားကြီး အထိ ဆွေးနွေး၍ မဆုံးနိုင် ရှိတတ်သည်။ ဆွေးနွေးကြရသည့် ကမ္ဘာ့စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့မှာ သေရေးရှင်ရေးပင် ဖြစ်သောကြောင့်လည်း မမောနိုင် မပန်းနိုင် စိတ်ဝင်စားကြသည်။ တစတစနှင့် ခေါင်းဆောင် အချင်းချင်း တဦးနှင့် တဦး ပိုမို ရင်းနှီးလာသော အခါ ခင်မင်ရာ ခင်မင်ကြောင်း အာလာပသလ႞ာပ စကားများ၊ ရယ်စရာ မောစရာ ပျော်စရာ ပြက်စရာများ၊ တယောက်နှင့် တယောက် ကလိကြ၊ ရိကြ၊ ထေ့ကြ၊ ငေါ့ကြ၊ ရံဖန်ရံခါ က္ဆွဲမြီးတိုကြ၊ လူကြီးချင်း သိမ်မွေ့စွာ ရန်ဖြစ်ကြ၊ ပရိယာယ်ဝေဝုစ် ထုတ်ကြပုံများကို အချို့ မှတ်တမ်းများနှင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သူ သံတမန်ကြီးများ ပြုစုသည့် ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်းများတွင် ဖတ်ရှုရသည်မှာ ဗဟုသုတလည်း ပွား၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုရေး အတွေ့အကြုံတွေလည်း လက်ဆင့် ကမ်းရသည့် အပြင် အပျင်းလည်း ပြေလှပေ၏။ ရောဘတ်၊ အီး၊ ရှားဝုဒ် (Robert E.Sherwood) ရေး နယူးယောက်မြို့၊ ဘင်တန် ထုတ်ဝေရေး (Bantam Books Inc) နှင့် ဟာပါနှင့် ညီအစ်ကိုများ (Harper & Brothers) မှ ထုတ်သော ရုစဗဲ့နှင့် ဟော့(ပ)ကင် (Roosevelt and Hopkins) အတွဲ ၁ နှင့် ၂ မှာ ဆယ်ကြိမ်မက ရိုက်နှိပ်ရပြီး စာပေဆု ဒါဇင်ဝက်မျှလောက် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသော လူကြိုက်များသည့် စာအုပ်ဖြစ်၏။
ရုစဗဲ့နှင့် ထရူးမင်းတို့ လက်ထက် သမ္မတ နှစ်ဦး၏ ရုရှားဘာသာ စကားပြန် အဖြစ် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းတွင် နွှဲခဲ့ရပြီး နောင်အခါတွင် အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး တဦး ဖြစ်လာလျက် ရုရှားနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပါရဂူ အဖြစ် လေးစားခြင်း ခံရသူ ချားလ်စ်ဘိုလင် (Charles Bohlen) ရေးသားသည့် 'သမိုင်းသက်သေ' (Witness to History) အမည်ရှိ စာအုပ်မှာလည်း စာအုပ်ကောင်း တအုပ် ဖြစ်၏။
အမေရိကန် သမ္မတ ရုစဗဲ့နှင့် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့ ရင်းနှီးပုံမှာ အထူးပြောဖွယ်ရာ မရှိ။ ချာချီ အတွက် အမေရိကန် သမ္မတ၏ အိမ်ဖြူတော်မှာ စားအိမ်သောက်အိမ် တည်းခိုအိမ် ဖြစ်သည်။ ရုစဗဲ့က တနေကုန် တနေခန်း ကျုံး၍ အလုပ်လုပ်ပြီး တညလုံး အားရပါးရ အိပ်လေ့ရှိသည်။ ရုစဗဲ့မှာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းလှသူ မဟုတ်ဘဲ ပိုလီယို ရောဂါသည် တဦး ဖြစ်ကာ အိမ်ထဲ၌ပင် လက်တွန်းလှည်းဖြင့် လှုပ်ရှား သွားလာရသည်။ ချာချီက ညဉ့်နက်သန်းခေါင် လင်းအားကြီး အထိ လောဘတကြီး အလုပ်လုပ်၍ နေမြင့်အောင် အိပ်တတ်သည်။ နေ့လယ်စာ အပြီးတွင်လည်း တမှေး မှေးလေ့ရှိသည်။
တနေ့သော နေ့လယ်တွင် အိမ်ဖြူတော်၌ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတည်း ခိုနေရာ အိပ်ခန်းသို့ စကားစမြည် ပြောရန် ရုစဗဲ့က သူ၏ လက်တွန်းလှည်း ပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း ကိုယ်တိုင် တွန်း၍ ဝင်လိုက်သည်။ နေ့ခင်း နေ့လယ်တွင် သူ့ထုံးစံ အတိုင်း တမှေး မှေးစက်ရာမှ အထိ ရေချိုးခန်းတွင် ကိုယ်လက် သန့်စင် အပြီး မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ပြန်ထွက်လာသော ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီနှင့် သမ္မတ ရုစဗဲ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်မိကြ၏။ ရုစဗဲ့က အားတုံ့ အားနာဖြင့် လက်တွန်းလှည်းကို တွန်း၍ ပြန်လှည့်ထွက်ရန် ဟန်ပြင်လေရာ ချာချီက သမ္မတကြီးအား လှမ်းပြောလိုက်သည်မှာ -
"သမ္မတကြီး ခင်ဗျာ၊ ပြန်ထွက် မသွားပါနဲ့၊ ရှောင်သွားဖို့ မလိုပါဘူး၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် တယောက်အဖို့ အမေရိကန် သမ္မတကြီး မတွေ့ မမြင်ရအောင် ဖုံးကွယ် လျှို့ဝှက်ထားစရာ ဆိုလို့ ဘာတခုမှ မရှိပါဘူး" ဟု ပြောခဲ့သော ဟူ၏။ (The prime minister of Great Britain has nothing to conceal from the president of the United States.)
တကမ္ဘာလုံးကို ရန်ပြုနေသော လူသား အားလုံး၏ ဘုံရန်သူ ဖြစ်သော ဝင်ရိုးတန်း နိုင်ငံတို့၏ ဖက်ဆစ်ဘီလူး အာဏာရှင်ဝါဒနှင့် ပက်ပင်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် အချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ အရှေ့အနောက် ခေါင်းဆောင်များနှင့် တကွ ကွန်မြူနစ်ရော အရင်းရှင်ပါ၊ ဘုရင်ရော သမ္မတပါ၊ သူဌေးရော ဆင်းရဲသားပါ နိုင်ငံကြီးငယ်လတ် အားလုံး ညီညွတ် ခဲ့ကြသည်မှာ အံ့မခန်း ရှိလှ၏။ ထိုသို့ ပလဲနံပ သင့်မြတ် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာ ယှဉ်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသော 'ဟန်းနီးမွန်း' ပျားရည်ဆမ်း ကာလ မည်မျှ ကြာမည်နည်း။ ဤမေးခွန်းသည် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှား၍မှ မကြာသေးမီ လေ့လာသူတို့အား အမြဲ ခေါင်းခဲ စေခဲ့လေ၏။
မြန်မာ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့
နည်းပညာနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ရက် မော်ကွန်းတိုက်
စာပေ၊ သတင်းနည်းပညာနှင့် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံတော် ....... မှတင်ဆက်သည်။ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/02/20090အကြံပြုခြင်း
မပြိုမှီနှင့်ပြိုအောင်ဆွဲချနေသော KK & Daugthers Demolition Co.Ltd
Publish at Scribd or explore others: literature Literature-Essays
Yettaw တည်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ Church ရဲ့လိပ်စာက ကြံ့ဖွံ့ရုံးရဲ့လိပ်စာကြီးဖြစ်နေပါတယ်
Address of The Church of The Latter Day Saints ( Yattaw's Church) in Yangon:
No: 146 (A),Pyi Road, 8 1/2 miles, Mayangon Township.Yangon,Myanmar.
(In front of Aung Myay Bon San,Shan monastery, near A1 Film Compound)
Credit to ခင်မင်းဇော် & မျိုးချစ်မြန်မာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချလျှင် ရွေးကောက်ပွဲပျက်နိုင်ဟု ဦးဝင်းတင်ပြော
Tuesday, 02 June 2009 19:19 ကြည်ဝေ
လူထု ခေါင်းဆောင် လည်းဖြစ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ထောင်ချလိုက်လျှင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်သည်အထိ အကျိုးသက်ရောက် သွားနိုင်ကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုသည်။“ဒေါ်စုကိုသာ ထောင်ချမယ်ဆိုရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ တရားဝင်မှု၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အခြေအနေ ပြည်သူက ဆန္ဒ ဖော်ပြဖို့ဆိုတဲ့ အလားအလာတွေက အကုန်လုံး မှေးမှိန် ကွယ်ပျောက်သွားမှာပဲ၊ ဒေါ်စုကို ထောင်ချခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲကို တရားခွင်တင်တာနဲ့ အတူတူ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်မယ်လို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ထောင်ချခဲ့ပါက NLD အနေနှင့် တခုခု တုံ့ပြန်သင့်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဆက်ပြောသည်။“ဒေါ်စု ထောင်ကျခဲ့ရင် NLD က တခုခု လုပ်ရမယ်၊ ဒါခေါင်းဆောင်ဗျ။ ဒေါ်စုဟာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒါ ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်ဖို့ မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုခေါင်းဆောင် တယောက်လုံးကို အိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားရာကနေ ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ တရားခွင်ပို့၊ ထောင် ချမယ် ဆိုရင်တော့ NLD က တခုခု တော့ ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်၊ ဒီကိစ္စက ပြောဖို့ လိုအပ်တဲ့ကိစ္စ၊ ပြောရမှာပဲ၊ ပြောလည်း ပြောလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သက်ရောက် သွားနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အပါအ၀င် လူထုကပါ ထိုရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့်အခြေအနေထိ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသမားဟောင်း တဦးကလည်း ပြောသည်။“NLD မပါရင်၊ ဒေါ်စု ထောင်ချ ခံရရင်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ပျက်မှာပဲ၊ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်သူကမှ ယုံကြည်မှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပွဲလိုပဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်” ဟု အဆိုပါ နိုင်ငံရေးသမား ဟောင်းက ဆိုသည်။NLD အနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ထောင်ချပါက မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်မည် ဆိုသည်ကို ကြိုတင်ပြောဆိုခြင်း မရှိသော်လည်း တခုခုတုံ့ပြန်မည် ဆိုသည်ကိုမူ ခန့်မှန်းသိရကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ပါတီ၏ တုံ့ပြန်မှုကို စစ်အစိုးရအနေနှင့် ဂရုစိုက်မည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာကြောင်း သူက သုံးသပ်သည်။လက်ရှိ NLD အဖွဲ့အနေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိသေးကြောင်း၊ NLD ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရေးနှင့် နိုင်ငံတကာကြီးကြပ်မှု ပါသည့် သန့်ရှင်းသော ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးရေးတို့ကို တောင်းဆိုထားကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ သိရှိရသည်။“ပါတီက ကြေညာချက်တွေ ထုတ်နေတာပဲ၊ ဒါကို စစ်အစိုးရက ဘာလုပ်သလဲ၊ ပါတီ တောင်းဆိုထားတဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဆိုတာကို ဂရုမစိုက်လို့ ဒေါ်စုကို ဖမ်းပြီး ထောင်ထဲ ပို့တာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။NLD ၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားရာမှ အမေရိကန် နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထော အား နေအိမ်အတွင်း လက်ခံမှု၊ တွေ့ဆုံမှုဖြင့် အင်းစိန်ထောင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းထားလိုက်ပြီး တရားစွဲဆို အမှုဖွင့်ကာ ထောင်ချရန် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အမှုကို စီရင်မည့် တရားသူကြီးနှင့် နီးစပ်သူ တဦးထံမှာ သိရှိရသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောင်ချခံခဲ့ရပါက NLD အနေနှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်၊ စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဆိုသည်တို့ကို လူထုက စိတ်ဝင်စားနေကြကြောင်း ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် တခု၏ အမှုဆောင်အရာရှိ တဦးက ပြောဆိုသည်။ “မနှစ်က မေ မှာ လုပ်သွားတဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပွဲ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ နိုင်ငံတကာက ကြီးကြပ်မှု ပါလို့ ၁၉၉၀ တုန်းကလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ NLD ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုရင် NLD က ဒုတိယအကြိမ် ထပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်တင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချမည် ဆိုပါက NLD တင်မက တခြားသော နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တသီးပုဂ္ဂလများလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် စဉ်စားကြဖို့ လိုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။“ဒီလို ပက်ပက်စက်စက်ကြံရင်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ၀င်သင့်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုး မဟုတ်ဘူး၊ ၀င်လို့လည်း ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ၀င်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ဘာအဖြေမှ ထွက်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဟာ ပြည်သူရဲ့ အဆုံးအဖြတ်၊ ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒ ဖော်ပြရာရောက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်တင်က ဆိုသည်။
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 19:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အယ်ဒီတာခင်ဗျား … ပဲခူးတိုင်း သနပ္ပင်မြို့နယ် ‘မင်းရွာကျောင်းစု’ ကျေးရွာမှာ ဒီနှစ် လယ်သမားတွေရဲ့ အခြေအနေက ရာသီဥတုက ဖောက်ပြန်၊ ပိုးကလည်းကျ၊ သီးနှံတွေက ဆုတ်ယုတ်ဆိုတော့ လယ်သမားတွေက အကြွေးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေပါတယ်။လယ်သမား သုံးပုံပုံ တပုံလောက်တောင် ထယ်ထိုးဖို့ စားရိတ်မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ ရယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းလှက အကြွေးရှင်နဲ့ ပေါင်း၊ အာဏာပြပြီးတော့ မဖြစ်မနေဆိုပြီး ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေဆီကို လယ်ကို အပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကြွေးရှင်လက်ထဲမှာ လယ်သမားရဲ့ လယ်က ရောက်သွားပါတယ်။ ကြွေးရှင်က နာမည်အားဖြင့် သူ့ လယ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ လယ်သမားက တဧကကို စပါးတင်း ၂ဝ နှုန်းနဲ့ ပြန်ဆပ်ရတယ်။ လယ်ရှင်တွေကနေ လယ်ယာမဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ လယ်ကိုအပ်ခိုင်းပြီးတော့ နာမည်ပြောင်းစရိတ် ကျတော့လည်း လယ်သမားဆီကပဲ တဧကကို တသောင်းယူ၊ ငါးထောင် ယူပါတယ်။ လယ်သမားက နှစ်ဖက်နာပါတယ်။ ဧက ၃ဝဝ ကျော် နာမည်အလွှဲအပြောင်းမှာ သူ့ (ဥက္ကဋ္ဌ) အတွက် သိန်း (၃ဝ-၄ဝ) လောက် ကိုယ်ကျိုးရသွားတာပေါ့။အကြွေးရှင်တွေကလည်း ကျနော်တို့ ‘မင်းရွာကျောင်းစု’ ရွာထဲကပါပဲ။ သူတို့လည်း လယ်သမားပါပဲ။ သူတို့ကတော့ ငွေကြေး ပြည့်စုံတော့ ပေးကမ်းထားတဲ့ အရှိန်ရှိတာပေါ့။ အားနည်းတဲ့ လယ်သမားတွေက ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ လယ်ရှင်တွေဆီ ရောက်သွားတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ရွာအုပ်စုက အိမ်ခြေ ၅၇ဝ လောက် ရှိပါတယ်။ လယ်သမားဦးရေက ၃၃ဝ လောက်ပါ။ တဝက်လောက်ဟာ လယ်ယာမဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။ နောက်ပြီးတော့ ကြွေးသိမ်းတဲ့အတွက် မတန်ရေ တန်ရေနဲ့ လယ်သမားတွေက အကုန်လုံး နွားတွေကို ထိုးပြီးတော့ အကြွေးရှင်ကို ဆပ်ရတာပါ။ အကြွေးရှင်က လယ်သမားပြောတဲ့ ၂ သိန်းတန်တယ်ဆိုတဲ့ နွားတွေ ကျွဲတွေကို သိမ်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သားသတ်ရုံကို ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းပစ်တာ။ အဲဒီတော့ လယ်လည်း မရှိ၊ နွားလည်း မရှိ ဖြစ်ကုန်တော့တယ်။ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့ဆီမှာ လယ်သမားတွေက ကျပ်တည်းနေတဲ့ကြားက သီးစားကို ဥက္ကဋ္ဌက အမြန်ခေါ်လိုက်တာပါ။ လယ်တဧကကို ၂ဝဝ ကျပ်နှုန်းနဲ့ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကွင်းမှာ ဧက ၅ ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။ သူ (ဥက္ကဋ္ဌ) က ငွေ ၁ဝ သိန်းကျော်လောက် ရပြန်ပါတယ်။ သီးစားတင်ခ ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ လယ်သမားတယောက်ကို လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခွင့် သီးစားကဒ်လေးတွေ ချပေးပါတယ်။ လယ်ယာမြေကို ကျနော်တို့က နိုင်ငံတော်မှာ အခွန်ချိန်ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခု ပေါင်းပြီးတော့ တဧကကို ၂ဝဝ ယူပါတယ်။ အမှန်ကျတာက ဧက ၅ ထောင်ကျော်မှာ တသိန်း ၆ သောင်းလောက်ပဲ သွင်းရတာပေါ့လေ၊ နိုင်ငံတော်ကို။ သူက ကောက်ထားတာ ၁ဝ သိန်းကျော် ကောက်ထားပါတယ်။ ဒါတောင် စိုက်ပျိုးစားရိတ်က မချေးသေးပါဘူး။ ချေးရင် သူက ဖြတ်ဦးမှာ။ နောက်တခုက ရွာရုံးကနေပြီးတော့ ရန်ပုံငွေရှာထားပါတယ်။ ရွာလမ်းခင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ ငွေ ၄၅ သိန်းကောက်တာပါ။ ဒီငွေကိုလည်း သူ့ကိုယ်ကျိုးပဲ သုံးထားပါတယ်။မနှစ်ကတုန်းက စပါးဈေးကကျတော့ ကျနော်တို့က မြေဆီသြဇာလည်း ပြည့်ဝအောင် မထည့်နိုင်ပါဘူးလေ။ မထည့်နိုင်တော့ လယ်တွေက စပါးအထွက်နှုန်းတွေ ဆုတ်ကုန်တာပေါ့။ ရာသီဥတုကလည်း ဖောက်ပြန်ပါတယ်။ ပိုးတွေကလည်း ကျပါတယ်။ ဘက်ပေါင်းစုံကပါပဲ။ ဒီနေ့ လယ်သမားဘဝကတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ အဲဒီအကြွေးတွေနဲ့ ပဲခူးခရိုင် တရားရုံးမှာ ရောက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ကျနော်တို့က ဖြစ်စေချင်တာက ကြွေးရှင်တွေက လယ်သမားပေါ်မှာရှိတဲ့ အကြွေးကို ဒီတနှစ်လောက်တော့ အတိုးမယူဘဲနဲ့ ရပ်ထားစေချင်တာပေါ့လေ။ လယ်သမားတွေက ဒီတနှစ် အတိုးလွတ်လေး လုပ်လိုက်ရင် သူ့အကြွေးလည်း လာမယ့်နှစ် ဆပ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အဲဒီလို မစောင့်နိုင်ပါဘူး။ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပေါင်းပြီး လယ်ကို ဒီနှစ် ချက်ချင်း အကုန်နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ အပိုင်ယူပစ်လိုက်တာပါ။ ၁၉၅၃ ခုနှစ် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတာကလည်း လယ်ယာမြေကို လွဲပြောင်းရောင်းချတာ၊ အကြွေးသိမ်းတာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လယ်သမားဆီက အကြွေးလိုချင်တော့ ကျေးရွာ ရယက အာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီး ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်လုပ်တော့ လယ်သမားက ကြောက်တော့ လယ်ကို ထိုးအပ်ရတာပေါ့။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ သားသမီးတွေလည်း အများစုက ဒီနှစ် ကျောင်းမအပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မင်းရွာကျောင်းစု အထကကျောင်းဆိုရင် သုံးပုံမှာ နှစ်ပုံလောက် ကျောင်းသား လျော့သွားပါတယ်။ မနေ့ကဆိုရင်လည်း ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းအပ်ဖို့ ဓာတ်စက်ကြီးနဲ့ လိုက်အော်ရတယ်။ မိဘတွေ ဘဝပျက်နေလို့ သားသမီးတွေ ကျောင်းမထားနိုင်တော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ကျေးရွာဖြစ်နေတာက မြင်မကောင်း ရှုမကောင်းအောင် ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့လည်း မခံနိုင်ဘဲ ကျနော်တို့ဘက်က မြို့နယ်တို့ ဘာတို့မှာ တိုင်ပြန်တော့လည်း တိုင်တဲ့လူပေါ်မှာပဲ အပြစ်က ကျကျလာလို့ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကို တိုက်ရိုက် မပြောရဲတော့ဘဲ ဒီ (မဇ္ဈိမ) ကနေတဆင့် ပြောရတာပါ။
NEJ / ၂ ဇွန် ၂၀၀၉
မြန်မာစစ်အစိုးရ ကာကွယ်ရေးဒု-၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က မေ (၃၁) ရက်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သော အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေး တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလောနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်၏ ပြောကြားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုလိုက်ရှေ့နေတဦးလည်းဖြစ် အန်အယ်လ်ဒီ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါသည်။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝင်းအတွင်း မစ္စယက်တော ၀င်ရောက်မှုကို လျှို့ဝှက် ၀င်ရောက်တယ်လို့ပြောပြီး မေ (၆) ရက် မနက် ပြန်အထွက်ကျမှ အင်လျားကန်အတွင်း မစ္စတာယက်တော ရေကူးနေတာကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တွေ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အ၀င်တုန်းက မတွေ့ဘဲ အထွက်ကျမှ လုံခြုံရေးတွေက တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်ရဲ့ ပြောဆိုချက်အပေါ် ဘယ်လို တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုအဖြစ်အပျက်ဟာ လုံခြုံရေးချို့ယွင်းလို့။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ချို့ယွင်းလဲတော့ သူမသိဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တစုံတရာအရေးမယူဘဲနဲ့ သူ့အပေါ်မှာ အရေးယူတာဟာ ဘက်လိုက်ဆောင်ရွက်မှုလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီအတိုင်းတင်ပြထားပါတယ်။
မေး။ ။ နောက်တခု ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က ပြောပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးမယူလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ချိုးဖောက်မှုများ ရှိလာမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အန်ကယ်ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ သူက ခြုံပြီးပြောတာ။ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ဒီနေ့ထိတော့ အရေးယူတာ ကျနော်တို့မတွေ့သေးဘူး။
မေး။ ။ တရားရုံးက အမိန့်တစုံတရာမချမှတ်သေးဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူလို့ ပြောဆိုသုံးနှုန်းလို့ရပါသလား။
ဖြေ။ ။ တကယ်တော့ ဒီလိုပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှုတောင် မြောက်ပါတယ်။ တရားရုံးက ဘာမှမဆုံးဖြတ်သေးခင် အာဏာရှိတဲ့လူတွေက ဒီလိုပြောတာကတော့ တရားရုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုဟာ တကယ်ရှိရဲ့လားဆိုတာကို ဒီဟာက မီးမောင်းထိုးပြတာပဲ။
မေး။ ။ အခုလို မစ္စတာယက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ခြံအတွင်း ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့တာကို အကြောင်း မကြားလို့ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဟာ တကယ်ပဲ ပြစ်မှုမြောက်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ အခုလို တရားစွဲဆိုထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘာပြစ်မှုမှ မမြောက်ဘူး။ သူတို့ဘက်က ထွက်ချက်တွေအရကိုပဲ ကျနော်တို့အမြင်က ပြစ်မှုမမြောက်ဘူး။ အဲတော့ ပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ တာဝန်ရှိတဲ့သူက ပြောရင် သူက တရားရုံးကို လွှမ်းမိုးပြီးတော့ ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ တရားရုံးရဲ့လွတ်လပ်မှု ထိခိုက်စေတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဥပေဒေရဲ့အထက်မှာ မည်သူမျှမရှိရဆိုတဲ့ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံမူကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကျင့်သုံးနိုင်မှ သာလျှင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမယ်လို့လည်း ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က ပြောပါတယ်။ တကယ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရော တကယ်ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ခွန်ထွန်းဦးတို့၊ မင်းကိုနိုင်တို့ကအစ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အထိ ဘယ်မှာ တရားမျှတမှုရှိမလဲ။ တရားရုံးတရုံးက ဥပမာတခု ကျနော်ပြောမယ်၊ ထောင်ဒဏ် (၁) ရက်ကနေ (၁၀) နှစ်ဆိုရင် (၁) ရက်ကနေ (၁၀) နှစ်ကြားထဲမှာ တရားရုံးက အမှုတခုချင်းအလိုက် သူရဲ့ဆင်ခြင်တုံနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရတာ။ အခုနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေအားလုံးက အမြင့်ဆုံးကြီးပဲပေးတယ်။ အဲတော့ တရားရုံး ဆင်ခြင်တုံဆိုတာ ဒီမှာအသုံးကို မပြုဘူး။ အဲဒါကိုက တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့ နမူနာတခုအနေနဲ့ ပြောချင်တယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မမျှမတ လုပ်တာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်ကယ်တို့ ရှေ့နေတွေ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲလိုတွေ့ဆုံမှုဟာ လုံလောက်တဲ့အချိန်ရော ရရှိပါလား။
ဖြေ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့စနေ မေ (၃၀) က တွေ့ခွင့်ရတယ်။ စနေနေ့တုန်းကတော့ တွေ့ခွင့်အချိန် လုံလုံလောက်လောက်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုတွေ့ဆုံခွင့်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ခုခံခွင့်ကို မစခင်မှာရဖို့ ကျနော်တို့တောင်းလာတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကို စစ်ပြီးတော့မှပဲ ကျနော်တို့ တွေ့ခွင့်ရတယ်။ ဒါကလည်း မမှန်ကန်ဘူးပေါ့။ မိမိခုခံရေးလမ်းကြောင်းကို ရှေ့နေနဲ့ လုံလုံလောက်လောက် တိုင်ပင်ခွင့် မရခဲ့ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ အခုအမှုမှာ တရားလို့ဘက်က သက်သေ (၁၅) ဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကကျ သက်သေ (၁) ဦး သာ ထွက်ဆိုချက်ရတဲ့အပေါ်မှာပဲ အမှုကိုကြားနာပြီး အမိန့်ချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီတရားစီရင်မှုအပေါ်မှာ အန်ကယ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ အမြင်အရကို ပေါ်လွင်ပါတယ်။ နောက် ဥပဒေအရလည်း မှန်ကန်တယ်လို့ ကျနော်တို့ မယူဆဘူး။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အန်ကယ်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုမှုတွေ ရှိပါသလား အန်ကယ်။
ဖြေ။ ။ အများကြီးရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ကျနော်တို့ကို သူ့လက်ရေးနဲ့ ရေးပေးလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့၊ ဥပဒေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးရေးနေပါတယ်။ ရုံးမှာတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခုလာမယ့် ဇွန် (၅) ရက် ရုံးချိန်းမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လျှောက်လွှဲချက်ကို အပြီးသတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လို့ရပါသလား။
ဖြေ။ ။ လုပ်ခွင့်တော့ရှိတယ်၊ တရားရုံးပေါ်မှာပဲ တည်ပါတယ်။
မေး။ ။ အမှုအပေါ်မှာ အလားအလာနဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အမှုအပေါ်မှာ အလားအလားက သူတို့အပေါ်မှာပဲတည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဥပဒေအမြင်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အပြစ်မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့သုံးသပ်တာက ဒီအမှုဟာ စကတည်းကိုက မစွဲသင့်တဲ့အမှု။ အစိုးရဘက်ကပြောသလို ဥပဒေဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ ကျနော်တို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့လည်း မကိုက်ညီပါဘူး။ စကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘာပြစ်မှုမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့မြင်ပါတယ်။
မေး။ ။ တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို တရားခွင်မှာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ရှေ့ဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ လုပ်မှာပါ။ ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ရုံးကို တင်ပြတာမျိုးတွေ ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှုး အပါအ၀င် စစ်တိုင်းမှုးများအပြောင်းအလဲလုပ်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
June 2, 2009 ·
၂ ဇွန် ရန်ကုန်၊ ၊တင်ကျော်ကျော်စိုး
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရဲများအကြောင်းမဲ့ ကြီးစိုးနေသည်ကို မကျေနပ်သဖြင့် လေးလပတ်အစည်းအဝေးတစ်ခု တွင် ထုတ်ပြောမိသော ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုးဗိုလ်မှုးချုပ်ဝင်းမြင့် အား လက်ရှိရာထူးနေရာမှဗိုလ် သန်းရွှေ အမိန့့်ဖြင့်အနားပေးတော့မည်ဟုသတင်းထွက်ပေါ်နေသည်။စစ်ဖက်သတင်းရပ်ကွက်များနှင့်နီးစပ်သူများ ၏ အဆိုအရ အနားပေးရန် စီစဉ်ခြင်းမှာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် တည်ထားသည့် ဓနုတ် စေတီတော် ပြိုကျမှု တွင် တာဝန်ရှိသောကြောင့် ဟုဆိုသည်။
ထိုသတင်းရပ်ကွက်များနှင့် နီးစပ်သူများ၏ အဆိုအရ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် နှင့် ရဲချုပ်ခင်ရီတို့နှစ်ဦးရန်ကုန် တွင်တစ်ဗိုလ်တစ်မင်း ဖြစ်နေမှု ကို သူကမကျေနပ် ဟုဆိုသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေရာအနှံ မိုးရွာရေကြီးမှုများတွင် စည်ပင်က တာဝန်ရှိ သော်လည်း ရေကြီးသည့် အခါတိုင်း တိုင်းလက်အောက်ခံတပ်မှ တပ်သားများက လုပ်အားပေးနေရသည့် အတွက် ရန်ကုန် တိုင်းအတွင်းရှိ တပ်မှုး၊တပ်ရင်းမှုးများကလည်း စည်ပင်ကို အပြစ်ဖို့ ကြသည် ဟုဆိုသည်။
စစ်တိုင်းမှုးနှင့် ၀န်ကြီးအချို့ ကိုအနားပေးတော့မည် ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသည်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားမတရားဖမ်းဆီးတရားစွဲ ဆိုထားခြင်း၏ ကျယ်ပြန့် လာသောဂယက် တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သူများက ပြောသည်။
အနားပေးခံရတော့မည် ဟုသတင်းထွက်ပေါ်နေသော သူများတွင် တောင်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ်လှမင်း နှင့် ဟိုတယ်/ခရီး မှ ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးချုပ် အေးမြင့်ကြူလည်း ပါဝင်သည် ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသည်။ရန်ကုန် တိုင်း ဒုတိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း မှာ မူ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်သန်းရွှေ ၏ မိသားစု နှင့် ရင်းနှီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ် ထိပ်တန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းများနှင့် နီးစပ်သူများ၏အဆိုအရ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်သန်းရွှေ၏အာဏာတည်မြဲမှု မှာလည်းခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည် ဟု အမည် မဖေါ်လိုသော စစ်တပ်အရာရှိ တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။ရန်ကုန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် မြို့ တော်ဝန်တို့ ၏အာဏာပြိုင် ဆိုင်မှု မှာလည်း တနေ့ တခြားကြီးထွားလာသည် ဟုသိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားမတရားဖမ်းဆီးတရားစွဲ ဆိုထားသည့် ကိစ္စတွင် ဗိုလ် သန်းရွှေက ရဲများအား လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးအား ကိုးလွန်းသည် ကို စစ်ဗိုလ် ချုပ်များအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်မကျေနပ် ဟု သိရသည်။ဓနုတ် စေတီတော် ပြိုကျရာတွင် ရေတပ်သား နှစ်ဦးထက် မနည်းသေဆုံးပြီး အပျက် အစည်းများကို ရှင်းလင်းရန် ရန်ကုန်တိုင်း လက်အောက်ခံတပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ မှ စစ်သားများက ပင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။
ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူများက အစုအဖွဲ့ ငယ်များအလိုက်လှုပ်ရှားလာ
၂ မေ ရန်ကုန်၊ ၊ဟိန်းခိုင်ထွန်း
“မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်ရှေ့က ရုံးတံခါးမှာ Free Aung San Suu Kyi ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုမှုတ်ဆေးအ၀ါ တွေ နဲ့ သုတ်သွားတာတွေ့ တယ် ဟုပြောသူမှာ ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတား မြို့ နယ်မှအိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။သူမက ဆက်ပြီး ခဏနေ တော့ အဲဒီစာသားကို ရဲ နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလာဖျက်သွား တယ် ။အစိုးရရုံးက အရာရှိနော် သူ့ ကိုလည်း ရုံးတံခါးမှာ ဒီဆေးမှုတ်သွား လားဆိုတာ မသိရကောင်းမှန်း ဆို ပြီး ထောက်လှမ်းရေးက ကော သွားတယ် ။ညဦးပိုင်းကမရှိသေးဘူး ညနက် မှ လုပ် သွားကြတာ ထင်တယ် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန် မြို့ တွင် လူငယ်များ လှုပ်ရှားပုံ နှင့် ပတ်သက်၍ သူကFreedom News Group သို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ် မြောက်ရေးအတွက် ပြည်သူများ စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုများမှာ တင်းကျပ်လွန်းလှသ ဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒမပြ နိုင်သေးသော် လည်း မိမိ တို့ တတ် နိုင်ရာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကို အစုအဖွဲ့ ငယ်များဖြင့် ဆောင်ရွက် နေကြသည်။
ပုဇွန်တောင် ဈေးအနီးတွင် မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကမူ နအဖ သတင်းစာများကို ပလစ်စတစ် အိတ်များတွင် ထည့်၍ အီးကုန်းစက္ကူလိုသလောက်ရမည် ဟု ရေးထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အာဏာဖီဆန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွေ့ရှိလျှင် ရဲက ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ ရဲ နှင့် ကြံ့ဖွတ်များကို ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားရမည် ဟု မှာကြားထားသော် လည်း ၂၅ နှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်ရှိ ရ၀တ ရုံးတွင် စတစ်ကာ ဖြင့် ကပ်ထားသော ဒေါ်စု ပုံကို ရ၀တ ဥက္ကဌက ချဲလောင်းကြေးငွေများ လိုက်လံသိမ်းဆည်း ရသဖြင့် ခရီးသွားတို့ ဝိုင်းအုံ ကြည့်ရှုကာမှ သိ၍ ဖြုတ်လိုက်ရသည်ဟုဆိုသည်။
ကုန်းဈေးတန်းလမ်း အတွင်းရှိ ပန်းဘဲတမ်းမြို့ နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲသားတစ်ဦးက မူ “တစ်ယောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ် အဖွဲ နဲ့ လုပ်ကြတာထင်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ ချဲမပေါက်လို့ ဒီနေ့ညစ်နေတာ စခန်းထဲမှာတော့ ဒေါ်စု ပိုစတာ ငါးခုလောက်တွေ့ လို့ သိမ်းထားတာရှိတယ်”ဟုပြောသည်။
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ဒလမြို့နယ် ဓနုတ်ကျေးရွာရှိ ဓနုတ်စေတီတော်မြတ်ကြီး ပြိုကျပြီးသည့်နောက် နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဘုရားမုခ်ဦးအ၀င်ဝမှ ဘုရားတန်ဆောင်းအထိ မည်သူတဦး တယောက်မျှ မ၀င်ရဟု ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဧရာဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးက ပြောသည်။“အခု ဘုရားကို ၀င်တဲ့ ၀င်ပေါက်မုခ်ဦးကနေပြီးတော့ ရှေ့ကို တည့်တည့်လျှောက်ပြီး ဘုရားကြီးအုတ်တံတိုင်း ထိကို သွားခွင့်မပေးတော့တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ ပြောဖို့ခက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အမိန့်ပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။စေတီပြိုကျရာတွင် ပါဝင်သူများ၏ မိသားစုဝင်များကိုပါ မ၀င်ရန်တားမြစ်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့အား ခြွင်းချက် အနေဖြင့် နေရာလွှဲ၍ ၀င်ခွင့်ပေးထားရကြောင်း အဆိုပါ ဗိုလ်မှူးကြီးက ပြောသည်။ဓနုတ်စေတီတော်ပြိုကျသည့်နေ့ကစ၍ ဘုရားသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုကြသော ဘာသာမျိုးစုံ လူပရိသတ်များ စေတီတော်အနီးတ၀ိုက်တွင် အနည်းဆုံး (၅၀) ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟု ဒလမြို့ခံ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတဦးက ပြောသည်။“တချို့က လာကြည့်တာ သက်သက်ဆိုတော့ အနီးကပ်ကြည့်ချင်ကြတယ်လေ။ စဖြစ်တဲ့နေ့ပြီးတော့ နောက်တနေ့မှာ ၀င်လို့ရသေးတယ်။ ကြည့်ရင် အုတ်တံတိုင်းနားထိကပ်ပြီး ကြည့်လို့ရသေးတယ်။ ဒီနေ့မှ မရတော့တာဗျ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ယနေ့ထိ သေဆုံးသူအရေအတွက်ကို တိတိကျကျ မသိရသော်လည်း မျက်မြင်များပြောပြချက်အရ ဘုရားပြိုကျသည့် နေ့တွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသူ (၅) ဦးနှင့် မေ (၃၁) ရက်၌ မြေကြီးအောက်မှ အလောင်း (၂ ) လောင်း တူးဖော်ရရှိ ကြောင်း သိရသည်။ဓနုတ်စေတီပြိုကျရာ နေရာအနီး တတိယနေ့ဖြစ်သည့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အသက် (၄၀) ကျော် အမျိုးသမီးတဦးက သစ်သားစင်ပေါ်တွင် အ၀တ်ဖြူစ ဖုံးအုပ်ထားသည့်အလောင်းအနီး ကိုက် (၃၀) ခန့်အကွာမှ “အမလေး သားကြီးရယ်၊ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ၊ အသေဆိုးနဲ့ သေရတဲ့ ဘ၀ပါလားနော်၊ အမလေး သားမျက်နှာကိုလည်း အမေ မတွေ့ရတော့ ဘူး” ဟု ရင်ဘတ်စည်တီးကာ ငိုကြွေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။“အခုပဲ ဖော်လို့ရတဲ့အလောင်းပါ။ ဒီကလေးက အသက် (၂၀) ကျော်ပဲ ရှိသေးတာလေ။ သူ့အဖေက ဘုရားကို ငြမ်းဆင်တဲ့အဖွဲ့မှာ ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ အခုငိုနေတာ သေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ အမေပါ။ အလောင်းကို ကြည့်ဖို့ မကောင်းတော့ဘူးလေ။ အပုပ်နံ့တွေ နံစော်နေတာ။ အခုချက်ချင်း သရဏဂုံတင်မှာ။ ဟိုမှာတွေ့လား၊ ဘုန်းကြီးတွေ စောင့်နေကြတယ်” ဟု စေတီတော်အနီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နောက်ဘက် အလောင်းစင်အနီးက မြင်ကွင်းကို တပ်မ (၃၆) တပ်မတော် (ရေ) မှ တပ်သားတဦးက ပြောပြသည်။မြေကြီးပိ၍ ပျောက်ဆုံးနေသူများကို စာရင်းများအရ ယနေ့ညနေပိုင်းအထိ ဆက်လက် ရှာဖွေနေသော်လည်း ကျန်နေသူများ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါတပ်သားက ပြောသည်။၎င်းက “စာရင်းတိတိကျတော့ ကျနော်တို့လည်း မသိရဘူး။ ကျနော်တို့လည်း အပြင်က လူတွေနဲ့ သိပ်စကား မပြောရဲဘူးဗျ” ဟု ပြောသည်။စေတီအနီးတွင် ကရိန်း အသေး (၁) ခုနှင့် အကြီးစား (၁) ခုရှိပြီး ကရိန်းအသေးက ရပ်ထားကာ အကြီးတခုတည်းဖြင့် မောင်းနှင်၍ မြေကြီးများဖော်နေသည်ဟု ယနေ့မျက်မြင်တွေ့သူက ပြောပြသည်။
အက်ဖ်အီးစီ (၅၀) တန်ဖိုးရှိ ကမ်းရိုးတန်း ဖုန်းကတ်များကို ဆက်သွယ်ရေးက ယနေ့ ဇွန်လ (၂) ရက်နေ့တွင် ရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း အနော်ရထာလမ်းမပေါ်ရှိ ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တဆိုင်မှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။“အခု ရောင်းတဲ့ ဖုန်းကတ်က ဟမ်းဆက်ရွေးတယ်။ CDMA ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းကတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် CDMA 450 HMz ဟမ်းဆက်အမျိုးအစား တခုတည်းမှာပဲ ထည့်သုံးလို့ရမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းဖြစ်သည့်အတွက် CDMA 450 HMz ကွန်ရက်ရှိသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင် ပြောဆိုနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ အကြီးတန်း အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။တနိုင်ငံလုံးအတွက် ရောင်းချခွင့်ပါမစ်ကို စင်ထရာယ် မားကက်တင်းကုမ္ပဏီက ရရှိထားပြီး ယခုရောင်းချသော အက်ဖ်အီးစီ (၅၀) ပေးရသော ဖုန်းကတ်များကို စတင်အသုံးပြုနေသည့် နေ့မှစ၍ (၂) လအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု သိရသည်။အဆိုပါ ဖုန်းကတ်ကိုသုံးရန် သီးသန့်ဟမ်းဆက်ကို ၀ယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမှာ အနည်းဆုံး (၁) သိန်းကျော်ရှိကြောင်း၊ ကတ်က အက်ဖ်အီးစီ (၅၀) ကျသဖြင့် လောလောဆယ် ရင်းနှီးရမည့်ငွေပမာဏ မနည်းသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ စီးပွားရေးမကောင်းသည့်အချိန်တွင် ၀ယ်ယူမည့်သူ သိပ်များလိမ့်မယ်ဟု မထင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ တယ်လီဖုန်းပွဲစားတဦးက ပြောသည်။“အရင်က ရန်ကုန်မှာ အက်ဖ်အီးစီ (၅၀) တန် ဖုန်းကတ်တွေ ရောင်းမယ်။ ငွေကုန်ရင် သက်တမ်းတိုးလို့ရမယ်။ ပုံသေနံပါတ် တခုရမယ်ဆိုပြီးတော့ လူတွေက မျှော်လင့်နေကြတယ်။ အခုကတော့ သက်တမ်းတိုးလို့ မရဘူးဆိုတော့ ဒါဟာ လုပ်စားတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ယခုလောလောဆယ်တွင် အက်ဖ်အီးစီ (၂၀) GSM ဖုန်းကတ်များ အ၀ယ်လိုက်နေသော်လည်း CDMA ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းကတ်များ၏ အားသာချက်မှာ နယ်ခရီးထွက်ပါက အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်ဟု သိရသည်။“GSM က ဟမ်းဆက်မရွေးဘူး။ ဈေးအနည်းဆုံး (၅၀,၀၀၀) တန် ဟမ်းဆက်လောက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အ၀င် call ကိုပဲ အသုံးပြုရင် တကတ်ကို တလတော့ ပြောရတယ်ဗျ” ဟု ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။ယနေ့ စတင်ရောင်းချသည့် CDMA ဖုန်းကတ်နံပါတ်များမှာ 09-477…….၊ 09-488……ဖြင့် ဂဏန်း (၈) လုံးပါမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအသုံးပြုနေသော GSM ဖုန်းကတ်နံပါတ်များမှာ 09-444......၊ 09-433…… စသည်ဖြင့် ဂဏန်း (၁၀) လုံး ပါကြောင်း သိရသည်။
ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA) က ငရုတ်သီးမှုန့်တံဆပ် (၆) မျိုး၊ ပဲခွဲဆံတံဆိပ် (၁) မျိုးနှင့် ဆီးယိုတံဆိပ် (၁) မျိုးတို့တွင် ဓာတုဗေဒဆိုးဆေးများ ပါဝင်နေကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်သည်။အဆိုပါ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ တံဆိပ် (၈) မျိုးကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ အနီရောင်ဆိုးဆေး (Rhodamine B) နှင့် လိမ္မော်ရောင်ဆိုးဆေး (Orange II) တို့ ပါဝင်သည်ဟု FDA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့ကို စားသုံးမိပါက အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဦးနှောက်အာရုံကြော ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေခြင်းနှင့် မျိုးရိုးဗီဇထိခိုက်စေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ဗဟိုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနအနေဖြင့် ယခင်က ဆီးယိုများတွင် ဓာတုဆိုးဆေးများပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် အစားအသောက်များထက် ဆေးဝါးများကိုသာ အဓိကထား စစ်ဆေးနေရာမှ ယခုနှစ်တွင် အစားအသောက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးလာခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာ့ရိုးရာစားသောက်ကုန်တခုဖြစ်သည့် လက်ဖက်တွင် ဓာတုဆိုးဆေး (Auramine O) ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ လက်ဖက်အမျိုးအစား (၁၀၀) ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂) ရက်နှင့် (၂၉) ရက်တို့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ တားမြစ်ခဲ့သည်။မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တားမြစ်ပြီး သိပ်မကြာ စင်ကာပူနိုင်ငံကလည်း မြန်မာလက်ဖက် အမျိုးအစား (၂၀) သည် တင်သွင်းစားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။စင်ကာပူနိုင်ငံက ကျန်းမာရေးအရ စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လက်ဖက်အမျိုးအစား (၂၀) တွင် မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုထားသည့် ယုဇနတံဆိပ် လက်ဖက် ပါဝင်သည်။ပြီးခဲ့သည့် မေလဆန်းပိုင်း၌လည်း ငါးပိအမျိုးအစား (၈၀) ခန့်တွင် ဓာတုဆိုးဆေး Rhodamine-B ပါဝင်နေကြောင်း FDA က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်များမှ သတင်းသမားများကို နအဖအာဏာပိုင်များက စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀န်းမှ သိရသည်။ပြီးခဲ့သည့် မေ (၂၈) တွင် True News ဂျာနယ်မှ သတင်းသမားတဦးကို ခေါ်ယူမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ကာ ယင်းသတင်း ဂျာနယ်တိုက်ကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ထိုသို့ ပိုမိုစောင့်ကြည့် အကဲခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ အရာရှိတဦး၏ ပြောပြချက်အရ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း သတင်းဂျာနယ်များပါ စာမူနှင့် သတင်းများအား ဂျာနယ်တိုက်ကို တာဝန်ယူခိုင်းကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းများအတွက် ပြောသူ အမည်၊ ရာထူးတို့ကို တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးရန် ထပ်မံ၍ တင်းကြပ်စွာတောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်မှ သတင်းဂျာနယ်တခု၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာတဦးက “ကျနော်တို့ သတင်းရေးချင်စိတ် ကုန်ခန်းလာတယ်။ သတင်းဂျာနယ်ဆိုတာမျိုးက သတင်းဦး၊ သတင်းထူးတွေကို စာဖတ်သူတွေအတွက် ဦးအောင်ရေးသားဖော်ပြ ရတာလေ။ အခုက သတင်းထူးရင် ဖော်ပြလို့မရတာနဲ့၊ တာဝန်ယူခိုင်းရတာနဲ့ဗျာ၊ ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။မေ ( ၃၀) ရက်၌ ဒလမြို့နယ်တွင်းမှ ပြိုကျသွားသော ဓနုတ် စေတီတော်ကြီးသို့ ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် အသီးသီးက သတင်းရယူရန် သွားရောက်ကြသည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်မှုများရှိကြောင်း ဘုရားသို့သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့သည့် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။“ကျနော်တို့ကတော့ သတင်းယူဖို့ သွားတယ်။ ရေးလို့ မရမှန်းသိလျက်နဲ့ သွားတာပါ။ ဒါက ရေးလို့မရလည်း မှတ်တမ်းပဲပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ သတင်းထောက် သက်တမ်းမှာ ကြုံခဲ့ရတာကို နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် တနေ့နေ့တော့ ရေးခွင့်ကြုံအုံးမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီခါ ရေးရအောင်လို့ သွားတာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ဘုရားပြိုသည့်နေရာသို့သတင်းရယူရန် သွားရောက်သော သတင်းသမားများမှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီး သတင်း ဂျာနယ်များမှဖြစ်ပြီး သတင်းမှန်များကို ရေးသားဖော်ပြလိုသူ လူငယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ထုတ် နအဖ သတင်းစာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းများပါက အရှုံးဖြင့်သာ ရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ဒု-၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်သီ၏ ပြောကြားချက်များကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ မေ (၂၉) ရက်ထုတ် ထိုင်းရတ် သတင်းစာက ရေးသားခဲ့သည်ကို နအဖသတင်းစာများက ပြန်လည်ကိုးကား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တင်းမာနေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆွန်သီက သတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းမများရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားမဟာဗျူဟာ၊ အမျိုးသားအကျိုး အမြတ်ကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် သယံဇာတပေါများသော နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်ဟုလည်း မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။မြန်မာနိုင်ငံသည် မည်သူနှင့်ဆက်ဆံသည်၊ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူရှိသည်၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုသည် မည်သူ့ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည် စသည့်အချက်များကို ကြည့်တတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်သီက ထည့်သွင်းပြောကြားသွားကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သယံဇာတများအကြောင်း ပြောရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်နိုင်သည့် သယံဇာတများ ရှိသည်ကို မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သိရှိရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုလည်း မြန်မာသတင်းစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဘီဆစ်ကမူ ယမန်နေ့က စတင်ကျင်းပနေသော တောင်ကိုရီးယားနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ အနှစ်နှစ်ဆယ် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ် အစည်းဝေးတွင် မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးပြောကြားသွား မည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ်ကလည်း အရှေ့တောင်အာရှဒေသ တည်ငြိမ်မှုရှိရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိနှိပ်သည့်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှု စနစ်သို့ မည်သည့်အတွက် မပြောင်းလဲနိုင်ရသလဲဆိုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုလည်း DPA သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 21:10 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာ့ဒိမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားခွင်ကို အာရုံစိုက်နေကြချိန်တွင်ပင်၊ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ဖိအားပေးကြပါရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမား တဦးက တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ဒီချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်နှင့် ဝါရင့် သတင်းစာဆရာ တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က အင်္ဂါနေ့က ဤသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားခွင်ကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် သူမ၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဖိအားပေးရန်မှာ အရေးကြီးသော်လည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့် ဦးတင်ဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးသင့်ကြောင်း သူက ပြောဆိုပါသည်။“ကျနော် အာဏာပိုင်တွေကို တိုက်တွန်းချင်တာ ၅ နှစ်လဲ ပြည့်ပြီမို့ သူ့ကို လွှတ်ပေးဘို့ပါဘဲ” ဟု ဦးဝင်းတင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။အငြိမ်စား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်သူ ဦးတင်ဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့က အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီပဲယင်းမြို့တွင် စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသော လူအုပ်က သူတို့၏ ကားတန်းကို ဝင်ရောက် ရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရအပြီး ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။သူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားတဦး ဖြစ်ခဲ့သူ ဦးဝင်းတင်က ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ၅ နှစ်ကြာ အကျဉ်းချခံရပြီး ဖြစ်သဖြင့် သူတို့ကို လွှတ်ပေးရန် အချိန်တန်ပြီဟု ပြောပါသည်။“သူတို့ကို လွှတ်ပေးဘို့ ပြောဆိုတာက လွဲလို့ ကျနော်တို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး” ဟု သူက ဆက်လက် ပြောဆိုပါသည်။ဒီပဲယင်းမြို့တွင် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဘက် တိုက်ခိုက်ခံရ အပြီးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ခေါ်ယူလာခြင်း ခံခဲ့ရပြီး သူ၏ နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်း ခံရသည်။ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀(က) အရ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤပုဒ်မအရ ထိန်းသိမ်းခံရသူကို အများဆုံး ၅ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ တရားဝင် စတင်ရေတွက်လျှင်ပင် သူ၏ အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းမှာ ၅ နှစ်ပြည့်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် သူ့ကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည်ဟု ဦးဝင်တင်က ပြောသည်။သို့သော် သူ့ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း နောက်ထပ်တနှစ် ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ဤသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးတင်ဦးတို့ကို ဆက်လက် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိကြောင်း ပြသနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ - မြန်မာပြည်ကို တည်ထောင်သူတဦးနှင့် တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုဘိုကြည်က အင်္ဂါနေ့က ပြောပါသည်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်း စစ်အစိုးရ ကာကွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီးဖြစ်သူက စင်္ကာပူတွင် ကျင်းပသော ဒေသတွင်း လုံခြုံရေး အစည်း အဝေးတွင် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေအတိုင်း ရုံးတင် စစ်ဆေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်၍ မည်သည့် နိုင်ငံကမျှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုသင့်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ဤတရားခွင်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ မူဝါဒတရပ်ဖြစ်သည့် တရားဥပဒေ၏ အထက်၌ မည်သူမျှမရှိ ဟူသောမူအရ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ “ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူကို အရေးယူခြင်း မပြုပါက မင်းမဲ့ဝါဒ လွှမ်းမိုးလာပြီး လုံခြုံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျိုးပေါက်စေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်” ဟု သူက ပြောပါသည်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ဦးတင်ဦးသည် စစ်သားများအကြား အထူး လေးစားခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ သူသည်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပြီး ဤပါတီသည် ၁၉၉ဝ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဤရလဒ်ကို စစ်အစိုးရက မည်သည့်အခါကမျှ လေးစား လိုက်နာခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်စာတင်
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 17:12 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလွင် ရာထူးမှ အနားယူရန် နုတ်ထွက်စာ တင်သွင်းပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဌာနတွင်း သတင်းရပ်ကွက် အပြောအရ သိရသည်။အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်မှာ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် နုတ်ထွက်စာ တင်သွင်းခဲ့သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း သူ၏ တာဝန်လုပ်ငန်းများ လွှဲပြောင်းပေးနေပြီဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။“ဆရာက ဒီမှာ မလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ နားသွားပါပြီ၊ ကျန်းမာရေး ကြောင့်ပါ ”ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားသည်။ဒေါက်တာထွန်းလွင်မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ခန့်မှသည် ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန်ယူထားသည့်တိုင် မိုးလေဝသ သတင်းကြေညာသူ အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီ အချိန်ထိ မိုးလေဝသ သတင်းအတွက် အားထားရသူတဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး သတင်းလောကတွင်လည်း သတင်း ထုတ်ပြန်ရန် ပွင့်လင်းသူ အဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ နာဂစ် မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများတွင် မိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းလွင်မှာ လူထု စိတ်ဝင်စားမှု ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။သီးခြား အတည်မပြုနိုင်သော အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရပ်ကွက်တခု အရမူ မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဦးထွန်းလွင်ကို ဖြုတ်ချရန် စစ်အစိုးရက စီစဉ်ခဲ့မှုရှိသော်လည်း ထူးခြားစွာပင် ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးအပ်လိုက်ရာ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ အငြိမ်းစား ဥပဒေအရ အသက် ၆၅နှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း ယခု အသက် ၆၁ နှစ် အရွယ်တွင် ရုတ်တရက် အငြိမ်းစား ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ငါန်းဇွန်းမြို့နယ် ကုလားကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ရူပဗေဒဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဖလောရီဒါ တက္ကသိုလ်မှ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဘာသာရပ်ကို သင်ယူခဲ့သည်။၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စက်မှုထူးချွန် ဒုတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရက ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။၂၀၀၆ တွင် နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ အသင်းကြီး၏ အမြဲတန်း အသင်းဝင်၊ ၂၀၀၇ တွင် အာရှဒေသ သဘာဝဘေးဒဏ် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြင်ဆင်ရေး ကောင်စီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။(စိန်ဝင်း ဖြည့်စွက် ရေးသားထားသည်။)<
အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဖယ်ရီကား တိမ်းမှောက်၊ လူတဦး သေဆုံး
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 15:57 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပဲခူးမြို့ရှိ မြန်စတား အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများအား ကြိုပို့လုပ်သည့် ကားတစီးသည် ယမန်နေ့ညက တိမ်းမှောက်ခဲ့ရာ အမျိုးသမီးတဦး သေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ဆေးရုံ၏ အပြောအရ သိရသည်။ ရွှေမင်းသားကားသည် ပဲခူးမြို့အနောက်ဘက် ၇ မိုင်ရှိ ဗန်ဒါကုန်းရွာအနီးမှ မြန်စတားစက်ရုံ အလုပ်သမား ၇၀ ခန့် တင်ဆောင်ပြီး ပဲခူးမြို့သို့ မောင်းဝင်လာကာ၊ ထိုမှတဆင့် ၁ဝ မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ဘုရားကြီးမြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာလာစဉ် လာကမို့ရွာအနီး၌ ဘီးပေါက်၍ ၁၀ ဘီးကားတစီးအား တိုက်မိရာမှ ယခုလို ထိခိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်သည်။“ပဲခူးမြို့ကနေ သွားနေတာ ပဲခူးကောလိပ်အနီးက လာကမို့ကျေးရွာနား ရောက်တော့ ဘီးပေါက်သွားပြီးတော့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရပ်ထားတဲ့ ၁၀ ဘီးကားနဲ့ ဝင်ဆောင့်တာ။ မအေးအေးမာက ခေါင်းနဲ့ မျက်နှာ ထိသွားတော့ ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွားတယ်” ဟု ပဲခူးမြို့ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။ အလုပ်သမားများသည် အများအားဖြင့် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အကြား အရွယ်များဖြစ်ကြပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးရေ ၄၀ ခန့်အနက် မသူဇာအောင်၊ မအိအိဖြိုး၊ မဥမ္မာလွင်၊ မသူဇာဝင်း၊ မအိ အပါအဝင် ၃၀ ခန့်မှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသနေရကာ မအေးအေးမာ (၂၅ နှစ်) သည် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အခြား မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ ၁၉ နှစ်အရွယ် မအိအိဖြိုးသည် ဦးခေါင်းကွဲရာ ၁၀ ချက်ချုပ်ရပြီး၊ မချမ်းမြေ့ဇောမှာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း လှုပ်ရှား၍ မရဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ပဲခူးမြို့ ဆေးရုံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာ ကားမှောက်သဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ ကုသနေကြောင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။ “ဟုတ်ပါတယ်။ ပဲခူးဆေးရုံ လူနာတွေကတော့ များတယ်။ အရေးပေါ်တင်ရမယ့် လူဆို တင်ထားတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာ မခန့်မှန်းတတ်ဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။ ဒုတိယမြို့ခံက “အဲဒီကားထဲမှာ လူအယောက် ၇၀ လောက်ကို ငါးပိသိပ်၊ ငါးချဉ်သိပ်ပြီး လိုက်ပို့တာလေ။ ကားကလည်း ဟောင်းပြီး စုတ်ပြတ်သပ်နေတာပဲ” ဟု ပြောသည်။ စက်ရုံ တာဝန်ရှိသူများက အလုပ်သမားများကို ခွင့်အဖြစ် တရက်သာပေးပြီး၊ အလုပ်ဆင်းကြရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
စာရေးဆရာ မောင်ဆုရှင် ကွယ်လွန်
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 15:41 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စာရေးဆရာ မောင်ဆုရှင်သည် အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် ယနေ့ နေ့လယ်က အဆုတ်အအေးမိ ရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ အဆုတ်အအေးမိ ရောဂါဖြင့် ၃ ရက်ခန့် ခံစားနေရရာမှ ရွှေဂုံတိုင်အထူးကု ဆေးကုခန်းတွင် တက်ရောက်ကုသနေရင်း ယနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်တွင် ဆုံးပါးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ “ဆရာ ဦးမျိုးသန့် (စာရေးဆရာ မောင်ဆုရှင်) ဟာ မြန်မာစာပေလောကမှာ သုတရော၊ ရသရော စွယ်စုံထူးချွန်တယ်။ စာပေပညာရှင် စာရေးဆရာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆရာကွယ်လွန်ခြင်းဟာ မြန်မာစာပေလောကအတွက် အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ဝေသူ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ဆရာမောင်ဆုရှင်သည် သုတပညာပေးစာပေ၊ သိပ္ပံပညာ ဆောင်းပါးများအပြင် ဝတ္တုအချို့လည်း ရေးသားခဲ့ရာ သုတ၊ ရသ စာအုပ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့တွင် အတွင်းရေးမှူး၊ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဗဟိုအမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာမောင်ဆုရှင်ကို ၁၉၃၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြောင်းမြမြို့၌ အဖ- ဦးချစ်ဖေနှင့် အမိ- ဒေါ်စိန်မြင့်က မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၅ ဦးအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ကာ၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်ကြားရေးဌာန၊ စာပေဗိမာန်တွင် စာပြုအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာရာကျု့စ် တက္ကသိုလ်နှင့် ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်မှ သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးပညာ ဒီပလိုမာများ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် မများသမိုင်း (ပ၊ဒု)ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယင်းစာအုပ်ဖြင့်ပင် အမျိုးသားစာပေ-သုတပဒေသာ (သိပ္ပံ)ဆု ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၇ မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေလုပ်သား အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ဟဲမင်းဝေး၏ ''ပင်လယ်ပြာနှင့် တံငါအို'' ကို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ရာ၊ ယင်းစာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသားစာပေ (ဘာသာပြန်-ရသ) ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်၊ ၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ စာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စာပေဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့အသံမှ ''သိပ္ပံပညာ သိကောင်းစရာ'' ကဏ္ဍကို အနှစ် ၄ဝ ကျော် အသံလွှင့်ဟောပြောခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတွင် ဟောပြောဆွေးနွေးရေး၊ စာပေထုတ်ဝေရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေက ရွှေအမြုတေ စာပေဆုပေးပွဲတွင် စာပေဆုများကို ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သေးသည်။ အမှတ် (၆၉) ရတနာကျွန်းရိပ်သာ (ဋ) တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ မ/ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ရခိုင်မှာ ဗုံးဖောက်ခွဲမှု တပ်လှန့်ထား
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 02 2009 14:19 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အစိုးရရုံးများကို ပြည်ပအခြေစိုက် စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း အာဏာပိုင်များက တပ်လှန့်ထားသည်။မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်အခြေစိုက် နယ်စပ်ဒေသ စစ်ဆေးရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာန - (နစက) က ခရိုင်-မြို့နယ် ကောင်စီ၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာန - လဝက၊ မြေစာရင်းဌာန၊ ကြေးနန်းရုံးနှင့် ဘဏ်များတွင် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုသော လုံခြုံရေးသတင်းများ ရသည်ဆိုကာ အစိုးရဝန်ထမ်းများ ကင်းစောင့်နေရသည်။“ကင်းစောင့်ခိုင်းတာက နစက ဌာနချုပ်က အမိန့်နဲ့ စောင့်ခိုင်းတာပါ။ သူတို့က မောင်တောနဲ့ ဘူးသီးတောင်မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရ အဆောက်အဦတွေကို ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေက ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ သတင်း ရထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်” ဟု မောင်တောမြို့နယ် မယက ရုံးစာရေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ရုံးများတွင် ညနေ ၆ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအထိ ၄ ယောက်တတွဲ စောင့်နေရပြီး၊ လဝက ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ် ရဲစခန်းမှူးနှင့် ဒေသအခြေစိုက် စစ်တပ်များက လှည့်လည်ကင်းစစ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် စစ်တပ်နှင့် ရဲများကလည်း လမ်းများပေါ်တွင် ကင်းလှည့်မှုများ များပြားလာသည်။ဘင်္ဂလား-မြန်မာနယ်တလျှောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေကြသည့် ချင်း အမျိုးသား တပ်ဦး - CNF ၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ - ALP နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ RSO နှင့် ARNO ပါတီတို့ လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။''ALP က ဗုံးထောင်တယ်ဆိုတာတော့ တခါမှ မလုပ်သေးဘူး။ အထူးသဖြင့် အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ထောင်တယ်၊ ခွဲတယ်ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ တကယ်တမ်း လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆောက်အဦ နေရာတွေ၊ စစ်တန်းလျားတွေ၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နေရာတွေကိုပဲ လုပ်မှာပါ။ အရပ်သားတွေကို ပက်သက်မှုမရှိအောင်၊ ကင်းကွာအောင်၊ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားတယ်'' ဟု ALP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရတရားစီရင်ရေး မျှတမှုမရှိဟု ရှေ့နေများ ဝေဖန်
Tuesday, 02 June 2009 20:10 ကိုစိုး
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးကို ထိန်းချုပ် တင်းကျပ်ထားသောကြောင့် လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အမှု အပေါ် တရားစီရင်နေမှုသည် လွတ်လပ်၍ မျှတမှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ဥပဒေ ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများကပြောသည်။
မကြာသေးခင်က စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ ပြောဆိုသွားသည့် အပေါ်တွင် ဥပဒေပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။“အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ တရားခံတဦးကို အပြစ်မပေးဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတွင်း လုံခြုံရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက် ပါလိမ့်မယ်”ဟု စစ်အစိုးရ ဒု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အေးမြင့်က လက်ရှိ အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူး တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရည်ညွှန်း၍ ပြောဆိုထားသည်။ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေအထက်၌ မည်သူမျှမရှိဘဲ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိသည်ဟုလည်း ပြော သည်။ ထိုသို့ ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်က စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၉ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော အာရှ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ညီလာခံ (Shangri-La Dialogue) တွင် ပြောကြားသည့် တရားရုံးမှ အမိန့်မချရသေးသော လူတဦးအား အပြစ်ကျူးလွန်သူဟု သုံးနှုန်းလိုက်ခြင်းသည် ဥပဒေဘောင်မဝင်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။“တရားရုံး တရုံးက အမိန့် မချသေးဘဲနဲ့ လူတယောက်ကို အစွပ်စွဲခံနေရဆဲမှာပဲ အပြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့ ၊ အပြစ် ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်တာဟာ ဥပဒေရေးရာမှာ တကယ့် စနစ်တကျ လေ့လာပြီးတော့ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ သဘော မဟုတ်ဘူး၊ တရားရုံးအပေါ်မှာ တနည်းအားဖြင့် ကြိုပြီးတော့ လွှမ်းမိုးသုံးသပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘော သက် ရောက် တယ်၊ အဲဒါ ဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ သုံးနှုန်းတဲ့စကား၊ တနည်းအားဖြင့် ပြောရင်လည်း ဒါဟာ လူ့အခွင့် အရေးကို စောစီးစွာကြိုတင် ချိုးဖောက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်”ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ပြောဆိုသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နဂိုကတည်း အပြစ်ပေးရန်အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်သိရှိထားသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ် အေးမြင့် က ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။“ဘာကြောင့် ပြောတယ်ဆိုတဲ့ သဘောအရ ပြောရင်တော့ သူတို့မှာ အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာကို သူသိနေလို့ ဖြစ်မှာပေါ့၊ အမှုအပေါ်မှာ ခန့်မှန်းမယ်ဆိုရင်၊ တရားမျှတမှု ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုပဲ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် အများပြည်သူ ကြားနာခွင့်မပေးနိုင်တဲ့ ကိစ္စဟာ အဓိက ဖြစ်နေတယ်”ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်၏ ပြောကြားချက်အပေါ် ဥပဒေဘောင်တွင်းမှ တရားရုံးတွင် အရေးဆိုလျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း တရားစီရင်ရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေး၏ လွှမ်းမိုးမှုရှိ၍ မထိရောက်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။“တရားစီရင်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာ အမှန်တကယ် သီးခြားစီ ရှိရိုးမှန်ရင် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေနဲ့ တရားရုံးကို လျှောက်ထားခွင့်ရှိပေမယ့် တရားရုံးတွေက လိုက်နာချင်မှ လိုက်နယ်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာက တရားစီရင်ရေးအပေါ်မှာ ဒီခေတ်တခေတ်လုံးမှာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့သဘောရှိတယ်၊ နောက် တချက်က လွတ်လပ်စွာခုခံချေပခွင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်မှာ စွပ်စွဲခံရသူများဘက်ကလည်း ပြည့်စုံ လုံလောက် တဲ့ သက်သေ ကို စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ပေးရမယ်၊ တင်ပြတဲ့ နေရာမှာ၊ တရားရုံးရဲ့ တရားစီရင်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သမားရိုးကျ သုံးလို့ မရဘူး၊ အဲဒါဟာ လုံလောက်မှု မရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားခွင် မှာ ခုခံ ချေပနေတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရင် တရားရုံးကတောင်မှ သက်သေဖြစ်ခေါ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်၊ တရားရုံးကတောင်မှ ဆင့်ခေါ်ပေးရမယ်”ဟုလည်း ဦးအောင်သိန်းက ပြောဆိုသည်။မြန်မာ ဒု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်ကလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ မေလ ၂၇ မှ ၂၈ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ -အီးယူ ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား တရားစီရင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအရလုပ်ဆောင်သည့် ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူ့အခွင့်ရေး ကိစ္စ မဟုတ်သောကြောင့် တခြားသောနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို မလိုလားကြောင်း ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းဦးကမူ“အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစီရင်ပုံက မြန်မာပြည်ရဲ့တရားစီရင်ရေးဟာ လွတ်လပ်မျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာပြနေတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ စစ်အစိုးရက တရားရုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ ဒါဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မျှတတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ခုခံချေပခွင့်လည်း မရှိဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂျွန် ၀ီလျံ ယက်ထော အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်များက မေလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အကျယ်ချုပ်ထားရာနေအိမ်မှ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ ပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့် တရား စွဲဆို လိုက်ပြီး မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့အထိ အစိုးရ တရားလိုပြသက်သေများကို ဆက် တိုက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မေလ ၂၆ နေ့တွင်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ပြစ်မှု ထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ ကျခံရနိုင် ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဂျွန် ၀ီလျံ ယက်ထော(Mr. John William Yettaw)သည် အင်းလျားကန်စောင်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ နေအိမ်သို့ ရေကူး၍သွားရောက်ကာ မေလ ၃ ရက် မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး မေလ ၆ ရက် နေ့တွင် အင်းလျားကန် အတွင်း ၌ ၎င်းအား တွေ့ရှိရသဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း မေလ ၇ ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းမများရန် ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သတိပေး
Tuesday, 02 June 2009 19:18 သန်းထိုက်ဦး
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းများခြင်း အားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသာ အရှုံးဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ထီ ဘွန်ရာ ရက်ကလင်က ပြောကြားသည်ဟု ယနေ့ထုတ် မြန်မာ စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ထီက ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာ ချီဝ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တင်းမာနေသော အနေအထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့ သည်ကို မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Thairath သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားရာ ၎င်းကို မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ကိုးကား ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်အတွင်း တရားရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် အာဆီယံအဖွဲ့ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ တာဝန် ယူထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံက မေလအတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယင်းကြေညာချက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် လူ သားချင်းစာနာပြီး ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ပြုမူဆက်ဆံရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန်စိုးရိမ်သောကြောင့် ၎င်းအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးရန် တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ထို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရက အာဆီယံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီသည့်အပြင် အကြောင်းအရာအားဖြင့် မှန်ကန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် အာဆီယံဥက္ကဌ တာဝန်ယူထားသော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကြေညာချက်ကို အလေး အနက်ကန့်ကွက်သည် ဟူ၍ တန်ပြန် ကြေညာခဲ့ရာ လက်ရှိအနေအထားအရ နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာမှုများ ရှိနေသည်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ထီက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်း မများရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် မည်သူနှင့် ဆက်ဆံနေသည်၊ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူရှိသည်၊ သဘောထားကွဲလွဲခြင်းအားဖြင့် မည်သူ့ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည် စသည့်အချက်များကို ကြည့်ရှုတတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်ဟု ၎င်း သတင်း၌ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းများခြင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသာ အရှုံးဖြင့်ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံသည် မြေပေါ် မြေအောက်၊ ရေပေါ် ရေအောက် သယံဇာတများ နှင့် ပြည့်စုံကြောင်း၊ ၎င်းအနက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် သယံဇာတများရှိသည် ကို မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် သိရှိရကြောင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ထီက ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ထီသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အာ ဏာသိမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ မေလ ၂၇ မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ -အီးယူ ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်ကလည်း တခြားသောနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို မလိုလားကြောင်း ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ထိုသို့ဖော်ပြရတွင် ဦးမောင်မြင့်က ထိုင်းနိုင်ငံသည်သာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အမျိုးသားညီလာခံ၌ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ဦးမောင်မြင့်၏ ရှင်းလင်းချက်ထဲ၌ “နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးသည် ကုလသမဂ္ဂ၊ အာယီယံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အခြေခံမူဝါဒဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက တခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုမပြု လုပ်သကဲ့သို့ တခြားနိုင်ငံများက မိမိတို့အပေါ် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု ကိုလည်း မလိုလားကြောင်း” ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် “မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက် အရေးကြီးသည့်အဆင့်နှင့် နောက်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်စဉ်ကို ရောက်ရှိနေပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အရေးကိစ္စသည် ယင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် လွှမ်းမိုးနေခြင်းမ ဖြစ်သင့်” ဟုလည်း ဦးမောင်မြင့်က ဆိုထားသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အတွက် DKBA တပ်သား စုဆောင်း
Tuesday, 02 June 2009 19:40 သန်းထိုက်ဦး
တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA) သည် ၎င်းထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေဒေသများ၌ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အတွက် တပ်သားသစ်များ စုဆောင်းနေ ကြောင်း သိရှိရသည်။ ရွှေ့ပြောင်း ကရင်ဒုက္ခသည်များ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ (CIDKP) မှ စောစတိဗ် က “ပြီးခဲ့တဲ့ လက တည်းက DKBA တွေက သထုံနဲ့ ဘားအံ ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ ဒေသခံရွာသားတွေကို အတင်းအဓမ္မ တပ်ထဲ ၀င်ဖို့ လိုက် စုဆောင်းနေတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ ၎င်းက ဆက်လက်၍ DKBA စစ်သားများက ငြင်းဆိုသည့် ရွာသားများကို ဖမ်းဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ စုစုပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့ကိုနယ်ခြား စောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲရန် မကြာသေးခင်က ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော DKBA သည် ယင်းတပ်သားစုဆောင်းမှုကို မေလတွင် စတင် ခဲ့ပြီး ၃ လခန့်ဆောင်ရွက်မည်ဟု DKBA နှင့် နီးစပ်သူ ကရင်အမျိုးသားတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ “စစ်ရေးသင်တန်းတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ယင်း တပ်သားစုဆောင်းမှုကြောင့် တချို့ရွာသားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြ ရကြောင်း ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်မြို့များတွင် နေထိုင်နေကြသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားတချို့က ပြောသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် DKBA ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအသစ်အရ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပြောကြားခဲ့ရာ DKBA က သဘောတူခဲ့သည်။ DKBA သည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး မူဝါဒကော်မတီ၊ အသွင်ကူး ပြောင်းရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေး တိုင်းအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းရန် ဝပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) အပါအ၀င် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၊ ကချင် ဒီမိုကရေစီ သစ်တပ်မတော် (NDA-K) ၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) (SSA-N) စသည်တို့ကို ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံကမ်းလှမ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရန်အတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တို့က လက်မခံကြောင်း သိရသည်။
FEC ၅၀ တန် ဖုန်းကတ်များ စတင်ရောင်းချ
Tuesday, 02 June 2009 16:34 ဟိန်းဇော်
FEC ၅၀ တန် CDMA 450 တခါသုံး ဖုန်းကတ်များကို ယနေ့၊ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ထူး ကုမ္ပဏီ၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော စင်ထရယ် မားကက်တင်းမှ စတင်ဖြန့်ချိ ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း စတင်ရောင်းချခဲ့သော FEC ၂၀ တန် GSM တခါသုံး ဖုန်းကတ်များ ထွက်ရှိပြီး ၆ လနီးပါးကြာမြင့်ချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ FEC ၅၀ တန် တခါသုံး ဖုန်းကတ်များ ရောင်းချပေးခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ ကတ်များကို စင်ထရယ်မားကက်တင်းက အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်လုပ် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုခများမှာ ပြည်တွင်းအထွက် တမိနစ်လျှင် ၀.၃၀ FEC ၊ အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ၀.၀၅ FEC ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ များသို့ ခေါ်ဆိုပါက ၀.၉ FEC ၊ တခြားနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုပါက ၁.၀၅ FEC နှင့် SMS ပို့ပါက ၀.၀၅ FEC ကုန်ကျ မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော FEC ၂၀ တန် ကတ်များ၏ ခေါ်ဆိုခအတိုင်းသာ သတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။ယခု ထွက်ရှိလာသော CDMA 450 တခါသုံးဖုန်းကတ်မှာ သက်တမ်းတိုး၍ မရဘဲ ပုံမှန်အသုံးပြုရန် နံပါတ် မရရှိနိုင်ကြောင်း စင်ထရယ် မားကတ်တင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ကပြောသည်။ထို FEC ၅၀ တန် CDMA တခါသုံး SIM ကတ်များမှာ CDMA 450 Support ဟန်းဆက်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဟန်းဆက် (CDMA တမျိုးတည်းသာ အသုံးပြု၍ ရသော ဟန်းဆက်) များဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး GSM ဟန်းဆက်များတွင်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပေ။ ထို့ပြင် Message ပို့ရာတွင်လည်း တခြားသော CDMA ဖုန်းများသို့သာ ပေးပို့နိုင်ပြီး စတင်သုံးစွဲသည့်နေ့မှ ရက် ၆၀ သာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဟုမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။CDMA 450 တခါသုံး SIM ကတ်၏ အားသာချက်မှာ မည်သည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့မဆို ယူဆောင်သွား နိုင်ပြီး ယခင်ရောင်းချခဲ့သည့် FEC ၂၀ တန် GSM တခါသုံး ကတ်ထက် လိုင်းပိုမို ကြည်လင်ကြောင်း သုံးစွဲဖူးသူ တဦးက ပြောသည်။သို့ရာတွင် သက်တမ်းတိုး၍မရဘဲ ပုံမှန်အသုံးပြုရန် နံပါတ် မရရှိနိုင်သဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲလိုသူများ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။“အခုရောင်းတဲ့ ကတ်တွေက သက်သက်လုပ်စားတာ။ ၂၀တန် ကတ် ၂ ကတ်နဲ့ ယှဉ်ရင် ဈေးပိုကြီးနေတယ်။ ၂၀ တန်ကတ်လောက် ရောင်းအားကောင်းဖို့မမျှော်လင့်ပါဘူး” ဟု ရန်ကင်းမြို့ နယ်မှ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖုန်းအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေသူတဦးက သုံးသပ်သည်။စင်ထရယ်မားကက်တင်းမှ FEC ၂၀ တန်ကတ် စတင်ရောင်းချစဉ်က ဝယ်လိုအား များပြားခဲ့သော်လည်း စီးပွားရေးလည်ပတ်မှု နှေးကွေးနေခြင်းကြောင့် ယခုနောက်ပိုင်း ဝယ်လိုအား သိသိသာလျော့နည်းသွားပြီး FEC ၅၀ တန်ကတ်များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမှာ စင်ထရယ်မားကက်တင်း ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးတို့ ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေး အမြတ်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဖုန်းဈေးကွက်အတွင်းမှ ပွဲစားတချို့ကသုံးသပ်ကြသည်။မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲနိူင်မှုမှာ စုစုပေါင်း လိုင်း ၄ သိန်းကျော် ဝန်းကျင်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရကို မဝေဖန်ရဟု ဝန်ထမ်းများကို သတိပေး
Tuesday, 02 June 2009 16:33 အောင်သက်ဝိုင်း
အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့် တပ်မတော်သားများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း မပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် မပါဝင်ကြရန်၊ မလိုက်နာပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ဌာနဆိုင်ရာ အပတ်စဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေးများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၊အာဆီယံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက ဖိအားပေး နေချိန် အစိုးရကို မဝေဖန်ကြရန် ၊ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ပါဝင်ခြင်းမပြုကြဘဲ ရှောင်ရှားကြရန် စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးများနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများက အောက်ခြေအဆင့် ၀န်ထမ်းများကို သတိပေးကြောင်း နေပြည်တော် အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ထိုသို့ သတိပေးရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိက္ခာချထားသော၊ မဟုတ်မှန်သည့်နောက်ကြောင်း ရာဇ၀င် များရေးသားထားသော ညွှန်ကြားလွှာများကို ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်ရှိ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေး မှူး တဦးက ပြောသည်။“မေလ လုပ်ငန်းညှိုနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာ ၀န်ကြီးက ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထမ်းတွေကို ဒေါ်စုအကြောင်းရေးထား တဲ့ ညွှန်ကြားလွှာကို ဖတ်ပြတယ်။ ဒေါ်စုကြည် အိန္ဒိယမှာ နေစဉ်တုန်းက မာလီကုလားနဲ့ဖောက်ပြားတယ်။ အင်္ဂလန် မှာ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်း မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့မယူခင် ဗမာတယောက်နဲ့ Living Together နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်လာဖို့ အစိုးရက စရိတ်ပေးပြီးခေါ်ခဲ့လို့ ရောက်လာတယ်”ဟု ညွှန်ကြားလွှာတွင် ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို NLD အဖွဲ့တွင် လူကြိုက်နည်းပါးလာကြောင်း၊ နိုင်ငံပျက်စီးရေး လုပ်ငန်း များ မပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ပေါင်းများစွာသတိပေးသော်လည်း မလိုက်နာကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိန်းသိမ်းလိုက်ရ ကြောင်း၊ ဒီမေလ ၂၇ ရက်နေတွင် ပြန်လွှတ်ပေးရန်စီစဉ်နေဏဉ် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောကို အိမ်ထဲ တွင် လက်ခံထားသောကြောင့် တရားဥပဒေအရ အရေးယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီပဲဃင်း အရေးအခင်းတွင် နိုင်ငံ တော် အစိုးရ က မပါခဲ့သောကြောင့် ယခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စတွင်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းများ လုံးဝ မပါဝင်ရကြောင်း ၎င်း ညွှန်ကြားစာတွင် ပါရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အနောက်အုပ်စု မျှော်ကိုးသူဖြစ်သောကြောင့် အနောက်အုပ်စုမှ ဖိအားများပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၀န်ထမ်းအားလုံး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်ရန်နှင့် မလိုက်နာပါက ရာထူးဖြုတ်အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားသည်ဟု အထက်ပါ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောသည်။စစ်အစိုးရသည် ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်ကို တရားစီရင်ပြီး အကျဉ်းချအရေးယူမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လှူံ့ဆော်မှု များ၊ ဆန္ဒပြမှုများမပေါ်ပေါက်စေရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန စသည့် ဝန်ကြီးဌာနများ လက်အောက်တွင်ရှိသော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ကျောင်း များရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများကို လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်မည့် အစီအမံများ ပြုလုပ်ခိုင်းသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။ “လုံခြုံရေးဆိုတာ တက္ကသိုလ်မှာ လုံထိန်းရဲ၊ စစ်သားတွေ လာထားတာမဟုတ်ဘူး၊ တက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံရေး လှုံ့ ဆော်တယ်၊ စည်းရုံးတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ့ရင် ပါမောက္ခချူပ်၊ မော်ကွန်းထိန်း၊ ပါမောက္ခတွေဆီ အဆင့်ဆင့် အရေးပေါ်ကိစ္စအဖြစ် တင်ပြဖို့မှာတာ”ဟု ရန်ကုန် ၀ိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ တဦး က ဆိုသည်။ထိုကဲ့သို့ စစ်အစိုးရက သတိပေးမှာကြားမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း ၀န်ထမ်းများအကြား၌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အမှုတွင် အစိုးရလုပ်ရပ်မှားလွန်းသည်ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိနေပြီး စစ်တပ်အတွင်းတွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထပ်မံအကျဉ်းချမည့် အရေး လက်မခံသည့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ရှိနေသည်ဟု လည်း နေပြည်တော် ၀န်ထမ်းသတင်းရပ်ကွက်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။၁၃ နှစ်ကျော်ကြာ နေအိမ်အကျယ်ချူပ်ကျခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အတွင်းသို့အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျွန်ဝီလျံယက်ထော ယခုလဆန်းက ၀င်ရောက်လာသည့်အတွက် အဆိုပါနိုင်ငံခြားသား လက်ခံမှုသည် တရားဥပဒေကို ချိူးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန် ထောင် သို့ ပို့ဆောင် တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး လာမည့် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် အမှုကို အပြီးသတ် ကြားနာစစ်ဆေး မည် ဖြစ်သည်။
သက်သေပယ်ချခံကိစ္စ ဒေါ်စု အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ တိုင်းတရားရုံး ပြင်ဆင်မှုဖွင့်
ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ခုခံချေပဖို့ တင်သွင်းတဲ့သက်သေတွေကို ရုံးတော်က လက်မခံ ပယ်ချခဲ့တာဟာ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တာမို့ ပြန်လည်သုံးသပ်လက်ခံဖို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တရားခွင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်တာတွေ မရှိဘူးလို့ဝေဖန်သံတွေ ထွက်နေတဲ့ကြားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက အခုလို ဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာပါ။ တရားခွင်အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တားဆီးကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်လို့စွပ်စွဲပြီး ကြားနာနေတဲ့ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းက တရားခွင်မှာ သူ့ဘက်က ခုခံထွက်ဆိုပေးဖို့ သက်သေ ၄ ယောက် တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒါကို တရားရုံးက လက်မခံဘဲတယောက်သာ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေကို ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက ပြန်ပြီးတင်ပြခဲ့တာပါ။ မူလက သက်သေ ၄ ယောက်အဖြစ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ပါတီက ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်၊ တောင်ကြီးမြို့က တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မို့မို့နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်ဝင်းတို့ကို တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်ဦးကြည်ဝင်း တဦးတည်းကိုသာ တရားရုံးက ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။
ဒီလို သက်သေအများစုကို ပယ်ချခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒါကို ရုံးတော်က ဥပဒေနဲ့အညီဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အခုလို ပြန်ပြီးတင်ပြရတာလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့သက်သေ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်ကို ငြင်းတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ ကျနော်တို့က ဒီနေ့ပဲ တိုင်းတရားရုံးမှာ ပြင်ဆင်မှုဖွင့်လိုက်တယ်။အကြောင်းပြချက် မပါဘဲနဲ့ အမိန့်ကို ကူးလို့ရတော့ အကြောင်းပြချက် မပါဘူး။ဥပဒေမှာက အကြောင်းပြချက် ရှိရမယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကိုလည်း ရေးထားရမယ်၊ Record ရှိရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးဆိုပြီးကျနော်တို့ အဲဒီပြင်ဆင်ချက်ကို တင်တာ။ မနေ့က အဲဒီစာရွက်ရတော့ ဒီနေ့တင်တာ။”
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ထဲတုန်းက သက်သေအဖြစ် ထွက်ဆိုတဲ့ခဲ့တဲ့ ဦးကြည်ဝင်းကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွပ်စွဲချက်တွေဟာ ခိုင်မာမှုမရှိသလို ဥပဒေကြောင်းနဲ့မညီကြောင်း ရုံးတော်ကို ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကသက်သေ ၁ ယောက်သာ တင်ပြထွက်ဆိုခွင့်ရပြီး တရားလိုအဖြစ် တရားစွဲဆိုထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ သက်သေ ၁၄ ယောက်အထိ ရုံးတော်မှာ ထွက်ဆိုခွင့်ရခဲ့တာမို့လည်း ဒါဟာ မျှတတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ရှေ့နေတွေက ပြောနေတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားခွင်မှာတင်ပြီး ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်တွေနဲ့ ခုခံကာကွယ်ခွင့်ပေးထားပေမယ့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ဟာ အစိုးရရဲ့အလိုကျ ဖြစ်နေတာမို့ ဒီတရားခွင်ကနေ တရားမျှတမှု ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေကတော့ နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာ တားဆီးကန့်သတ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး နေအိမ်ခြံဝင်းထဲတိတ်တဆိတ် ရေကူးဝင်လာသူတဦးကို လက်ခံခဲ့တာကြောင့် အရေးယူဖို့ ဖြစ်ရတာဆိုပြီး ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာပါ။
ဒါပေမယ့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆို ကြားနာနေတဲ့ တရားခွင်မှာတောင်အပြစ်ရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘဲ ဒီလိုပြောဆိုနေတာတွေဟာ တရားစီရင်ရေးစနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုအပေါ် သံသယတွေပွားစရာသာ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။
“အဲဒီလိုပြောဆိုနေတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောနေကြတာ၊ အဲဒါ တရားရုံးကိစ္စကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့သဘော။တရားရုံးက လုပ်ရမယ့်အလုပ်၊ အပြစ်ရှိတယ်၊ မရှိဘူး တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်မှု မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေပြောတာ လုံးဝမသင့်လျော်ဘူး။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်စရာတွေ ပိုပြီးတော့ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာတယ်။ တရားစီရင်ရေး လွတ်လပ်မှုရှိရဲ့လား၊ အာဏာပိုင်တွေက အပြစ်ရှိတယ် ဘာညာ ပြောနေရင်၊ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဗျ။ အဲတော့ တရားရုံးရဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့သဘောလိုဖြစ်နေတယ်။ တရားရုံးရဲ့ လွတ်လပ်မှု Independent ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်။”
တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) နဲ့ တခြားနိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက အခုအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတခုသာ ဖြစ်တာမို့ ၀င်ရောက် မစွက်ဖက်သင့်ဘူးဆိုပြီး တုံ့ပြန်သံတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းကတော့ ဒီလိုမယူဆနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ပြည်တွင်းရေးတော့ မှန်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား အိမ်နီးနားချင်း မိဘကသားသမီးကို သေလောက်အောင် ရိုက်နေရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ရပ်ကြည့်လို့ရမလား၊ ဒီလိုစဉ်းစားရမယ် ထင်ပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တားဆီးကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ကြားနာနေတဲ့ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းက တရားခွင်မှာ အခုလာမယ့် သောကြာနေ့ကျရင်နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တွေ တင်သွင်းဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေဘက်ကတော့ စွပ်စွဲထားသလို ချိုးဖောက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်း အလေးပေးလျှောက်လဲသွားဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျောက်ဆုံး ပြင်သစ်လေယာဉ်ကလို့ ယူဆရတဲ့ အပိုင်းအစတချို့ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာမှာ တွေ့ရှိ
အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ လေယာဉ်အပိုင်းအစများဟာ ဘရာဇီးအနောက်မြောက်ကမ်းလွန်မှာ တနင်္လာနေ့က ပျောက်သွားတဲ့ Air France ခရီးသည်လေယာဉ်က အပျက်တွေလားဆိုတာ ဘရာဇီးလေယာဉ်တွေက ကွက်ပြီးတော့ စူးစမ်းရှာဖွေ လေ့လာနေကြပါတယ်။
ကမ်းလွန် ကီလိုမီတာ ၆၅၀ အကွာမှာ လေယာဉ်ထိုင်ခုံတွေ၊ ဓာတ်ဆီစတွေနဲ့ သတ္တုပိုင်းအပိုင်းအစများကို ဘရာဇီးလေတပ်က အင်္ဂါနေ့မှာ တွေ့ရှိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်းအစတွေကို ရယူပြီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများက ပျောက်နေတဲ့လေယာဉ်ကအပိုင်းများဟုတ်မဟုတ် ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှာလို့ တာဝန်ခံများက ပြောကြားကြပါတယ်။
ဘရာဇီးစစ်သင်္ဘောတွေကတော့ အဲဒီဒေသကို အင်္ဂါနေ့ည သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိရောက်နိုင်ကြဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
လူ ၂၂၈ ယောက်တင်ဆောင်ပြီး တနင်္လာနေ့က ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ကနေပဲရစ်မြို့ကို ပျံသန်းသွားတဲ့ A-330 Air Bus လေယာဉ်ကြီးတက်သွားပြီး ၄ နာရီလောက်အကြာမှာ ပျောက်သွားတာပါ။
ဘရာဇီး၊ ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်နိုင်ငံတို့က အထူးကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လေယာဉ်တွေက အဲဒီ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီးရဲ့ ပျံသန်းမှု Recorder နဲ့ တခြားပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။
ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
အရှေ့တောင်အာရှဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကဆစ်ပီရွန် က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လုံခြုံရေးအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ အားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဆီ တရားဝင် ခရီးစဉ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ ဝန်ကြီး ကဆစ် က ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း DPA သတင်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ အရင်က အာဏာရှင် အစိုးရတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ဆီ အသွင်ကူးပြောင်း ခဲ့ကြပြီးဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘာကြောင့် မပြောင်းလဲနိုင်ရသလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ် နေပြီလို့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံရေး ဝန်ကြီး ကဆစ်ပီရွန် က ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက တရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထဲမှာ လက်ရှိအလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက တော်တော်လေး ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန်တာတွေ့ နေရပါတယ်။ လောလောဆယ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လုပ်နေတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံများရဲ့ အနှစ် ၂၀ မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ် စည်းဝေးပွဲမှာလည်း မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးပြောကြားမယ်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိက်ချာချီဝ က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်လေယာဉ် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်
ခရီးသည် ၂၂၈ ယောက်ပါတဲ့ ပြင်သစ်လေကြောင်းပိုင် Air France လေယာဉ်တစင်းဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ Rio de Janeiro မြို့ ကနေ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ဆီ ပျံသန်းလာစဉ် ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ မုန်တိုင်းမိပြီး အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာထဲကို ပျက် ကျသွားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ခရီးစဉ်နံပါတ် - ၄၄၇ နဲ့ လေယာဉ်ပျံဟာ ပျံတက်ပြီး အနည်းဆုံး ၄ နာရီအထိတော့ ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဘရာဇီး မှာရှိတဲ့ မြေပြင်ထိန်းချုပ်မှု စခန်းရဲ့ ရေဒါ ကနေ ပျောက်သွားတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ Airbus 330 လေယာဉ်ဟာ ရာသီဥတုဆိုးရွားပြီး အင်အားပြင်းတဲ့ လေကြီးမိုးကြီး ကျတတ်တဲ့ အီကွေတာနားက မုတ်သုန် ရာသီဇုန်ကို ဖြတ်သန်းသွားပုံ ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လောက်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ အလိုအလျောက် သတင်းပို့စက်ကနေ သတင်းပြန်ပို့ပါတယ်။
လေကြီးမိုးကြီးနဲ့အတူ မိုးကြိုးပစ်မှုတွေကြောင့် လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့နိုင်တယ်လို့ ပြင်သစ်လေကြောင်း ပြောခွင့်ရသူက ပြော ပါတယ်။ လေယာဉ်တွေကို မိုးကြိုးပစ်တာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ အဲဒါတခုတည်းကြောင့် လေယာဉ်ပျက်ကျတယ်လို့တော့ ပြောဖို့ ခက်တယ်လို့ လေကြောင်းပျံသန်းမှု ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ သတင်းထူးသိရဖို့ Charles de Gaulle လေဆိပ်မှာ စောင့်နေကြတဲ့ ခရီးသည် မိသားစုတွေကို ပြင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က သွားရောက် နှစ်သိမ့် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ အသက်ရှင်ကျန်နေသူတွေကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးတယ်လို့လည်း သမ္မတ Sarkozy က သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြားချက် NLD ကန့်ကွက်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်လို့ အရေးယူရတာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားခွင်မှာ ကန့်ကွက်ကြောင်း တင်ပြမယ်လို့ သူမရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အဲန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ တရားခွင်မှာ အပြစ်ရှိမရှိ ဆိုတာတောင် မဆုံးဖြတ်ရသေးခင် အခုလို မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုလိုက်တာဟာ တရားဥပဒေကို ကျော်လွန်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် အဲန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက အခုလို တုံ့ပြန်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ တရားခွင်ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က အကြောင်းစုံကို တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အပြစ်ကျူးလွန်သူ တဦးဖြစ်တာမို့ အရေးယူဖို့လုပ်ရတာလို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ အရာရှိတဦးက ပြောတဲ့အပေါ် ကန့်ကွက်မယ်ဆိုပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အဲန်အယ်လ်ဒီ) က ပြောလိုက်တာပါ။ တားဆီး ကန့်သတ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး နေအိမ်ခြံဝန်းထဲ တိတ်တဆိတ် ရေကူးဝင်လာသူ တဦးကို လက်ခံခဲ့တယ်၊ အဖြစ်မှန်ကို လည်း ထိမ်ချန်ထားတာမို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် အရေးယူရုံက လွဲလို့ ရွေးစရာလမ်း မရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့် က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ရှန်ဂရီလာ အာရှဒေသ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး အတွင်း တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက မှတ်ချက်ပေး ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တရားစွဲဆို ကြားနာနေတဲ့ တရားခွင်မှာတောင် အပြစ်ရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်ရသေးခင် ဒီလိုမှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုတာဟာ ဥပဒေကို ကျော်လွန်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တာာမို့ ကန့်ကွက်ဖို့ ဖြစ်လာရတာလို့ အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီ အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းတင် က ပြောပါတယ်။
“ဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီးတခုလုံးက ပျက်နေတာပဲဟာ။ အဲဒီတော့ ဒေါ်စုအမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျနော်တို့က စပြီးတော့ ကန့်ကွက်နေတဲ့ကိစ္စက - ဥပမာ၊ တရားခံလို့ ပြောတယ်ဗျာ။ သူတို့တရားခွင်မှာ တရားမစွဲခင်ကတည်းက တရားစွဲတင်မှု မလုပ်ခင်ကတည်းက သူတို့က တရားခံလို့ သုံးတယ်။ ဒီလိုပဲ တရားဥပဒေရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေရော၊ အသုံးအနှုန်းတွေရော သဘောထားတွေရော သဘောတရားတွေရော အကုန်လုံးကို ဖောက်ဖျက်နေတာဗျ။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စမှာလည်း ဒီ ကာကွယ်ရေးဌာနက ဒုတိယ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောတဲ့စကားက ဒေါ်စုကို တရားတောင်မချရသေးဘူး။ သူက အပြစ် ရှိတယ်လို့ ပြောနေပြီ။ အဲဒါ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ တရားစီရင်ရေးကို ဖောက်ဖျက်နေတာပဲ။ သူတို့ ဒါမျိုးပြောဖို့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်တာလည်း များပြီ။ ဒေါ်စုအမှုနဲ့ကို ပြောနေရတာ။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်ဘူး။ ဒါလည်း ကျနော်တို့ လျှောက်လဲချက် ပေးတဲ့အခါ ကျတော့ ဒါကို တရားတင်တာကိုပြောခိုင်းဖို့ ကျနော်တို့ သဘောထားရှိတယ်ဗျ။”
ဒီလို စစ်အစိုးရ ရဲ့ အဆင့်မြင့်အရာရှိ် တဦးကမှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုတာတွေ ထွက်ပေါ်မလာခင် ကတည်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကြားနာနေတဲ့ တရားခွင်ဟာ မျှမျှတတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖွယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ သံသယတွေ ၀င်နေ ကြတာပါ။ ဒီကြားထဲကမှ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာဟာ အာဏာပိုင်တွေဖက်က ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပိုပြီး ထင်ထင် ရှားရှား မြင်သာလာစေတယ်လို့လည်း ဦးဝင်းတင် က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ လူတိုင်းက အရပ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအမှုဟာပေါ့ဗျာ။ ဇာတ်သိမ်းခံသိနေတဲ့ ၀တ္ထုလို ဖြစ်နေတယ်၊ အပြင်မှာပြောတဲ့စကားက ဘာလဲဆိုရင် ဘာပဲပြောပြော စီရင်ချက်ဆိုတာ ကလပ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ စာအိတ်ဖောက် လိုက် ရုံပဲ။ တရားသူကြီးက ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူး။ ဆိုတော့ ဒီသဘောထားတွေကို အရပ်သုံးစကားတွေ ကျနော်တို့တွေ ပြောတဲ့ စကားတွေနဲ့ကို တသားတည်းကျနေတဲ့ဟာကို သူတို့က ထုတ်ပြီးတော့ ၀န်ခံနေသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဆိုလိုတာ ကတော့ ကျနော်တို့က မစွပ်စွဲရသေးဘူး။ မပြောရသေးဘူး။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ ဇာတိရုပ်ကို ဖော်ပြနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲတော့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားတွေ သတ်မှတ်ချက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာ ပေါ်နေပြီလို့ အဲဒီလိုပဲ ပြောရ တော့မှာပဲဗျ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အခုလို တရားစွဲဆို အရေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေလို့ နိုင်ငံတကာကဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေချိန် မြန်မာစစ်အစိုးရဖက်ကတော့ ဒါဟာ ပြည်တွင်းရေးရာ ကိစ္စတခုအဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွေအဖြစ် ကာကွယ် ပြောဆိုနေတာပါ။ နိုင်ငံတကာက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက အစည်းအဝေးမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ် အေးမြင့် က ဒါဟာ နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဥပဒေ အထက် ဘယ်သူမှ မရှိဘဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဦးဝင်းတင် ကတော့ ဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတဲ့ သာဓကတွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း အခုလို ဆိုပါတယ်။
“တရားစီရင်ရေးအထက်မှာ မရှိဘူးရှိတယ် ဆိုတဲ့ဟာတွေက ကျနော် ပြောချင်တာကတော့ - နောက်ကြောင်း အဝေးကြီး ဟာတွေကို ထားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ ဆိုပါတော့ဗျာ ဥပမာဆိုတော့ ဒီပဲယင်းအမှုလိုဟာမျိုး။ ကျနော်တို့ ဒေါ်စုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စ။ ဒီပဲယင်းအမှုလိုဟာမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဟာက ဘာပဲပြောပြော အနည်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ရှေးခေတ်တွေမှာ သပိတ်မှောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှု တွေဖြစ်ဖြစ်၊ မဆလ လက်ထက်တုန်းကဆိုရင် အလုပ်သမား အရေးအခင်းတွေ ပေါတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးတွေ လုပ်ရတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေကနေပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့တွေကို အစီရင်ခံစာ တင်ရ တယ်။ အဲဒီမှာလည်း ကောက်ချက်တွေ ဖော်ပြရတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို ကိစ္စမျိုးမှာ၊ ဒီပဲယင်းလို ကိစ္စမျိုးမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလိုဟာမျိုး လုံးဝမရှိဘူး။ အဲဒါက ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အထက်မှာ လူတွေရှိနေတယ်။ သို့မဟုတ်ရင်လည်း တရားဥပဒေရဲ့ လက်လှမ်းမမီတဲ့ လူတွေ ရှိနေတယ်။ အကြောင်းအရာတွေ ကိစ္စ တွေရှိတယ် ဆိုတာကို ပြောနေတာပဲဗျ။”
အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင် ပါ။ တားဆီးကန့်သတ်ထားတဲ့ အမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ကြားနာ နေတဲ့ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းက တရားခွင်မှာ၊ အခုလာမယ့် သောကြာနေ့ကျရင် နှစ်ဖက် ရှေ့နေတွေ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တွေ တင်သွင်းဖို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖက်က ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်တွေဘက်ကတော့ စွပ်စွဲခံထားရသလို ချိုးဖောက်မှု မရှိတဲ့ အကြောင်း အလေးပေး လျှောက်လဲသွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားနာမှုတွေတလျှောက် တရားခွင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ မျှတမှု မရှိတာတွေ တွေ့ရတဲ့အကြောင်းလည်း ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက ပြောနေကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ထဲတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တရားခွင်မှာ ခုခံချေပတဲ့ နေရာမှာလည်း၊ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းနဲ့ တကယ်တမ်း ဒီကိစ္စမှာ တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပျက်ကွက်မှုအတွက်ကို အရေးတယူလုပ်တာမျိုး မရှိတာဟာလည်း ဘက်လိုက်ရာ ရောက်နေတယ် ဆိုပြီးတော့ ရုံးတော်ကို ပြောဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်း-မလေးရှား နယ်စပ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသား တဦး အသတ်ခံရ
မောင်အေး(နိရဉ္စရာ) မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ရခိုင်အမျိုးသားတဦး ရခိုင်သို့ အပြန်တွင် လက်သေမပေါ်ဘဲ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ထိုင်း မလေးနယ်စပ်တွင် အသတ်ခံခဲ့ရသည်။အသတ်ခံရသူမှာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ကျော်ဇံကျေးရွာမှ ဦးရွှေသိန်း ( ၃၀ နှစ်) ဖြစ်ပြီး မိဘများမှာ အဖ ဦးစံလှဖော် အမိဒေါ် ရွှေယဉ်နုတို့ ဖြစ်သည်။ထိုင်း- မလေးနယ်စပ်မှ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် တဦးက “သူ ဘာကြောင့် အခုလို သေဆုံး သွားရတယ်ဆိုတာကို အတိ အကျ မသိရသေးပါဘူး။ မတော်တဆ သေဆုံးတာလား။ အများကတော့ ပွဲစား သတ်တယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ပွဲစားက မှတ်ပုံတင်ကို သိမ်းထားတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့ အတွက် မှတ်ပုံတင် သွားအယူမှာ အခုလို အသတ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ဦးရွှေသိန်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလက မလေးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပြီး ရခိုင်ဒုက္ခသည်ကဒ် ကိုင်ဆောင်ကာ ပရိဘောက လုပ်ငန်း တခုတွင် ၉ လခန့်ကြာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေပြီးနောက် အိမ်အပြန်တွင် ယခုကဲ့သို့ အသတ်ခံ ရခြင်း ဖြစ်သည်။တခြား လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက် တဦးမှလည်း “ကျွန်တော်တို့ အထင်က ပွဲစား သတ်လိုက်တာလို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ပွဲစားက ခေါ်လို့ သူသွားတာပါ။ သူအိမ်ပြန်လို့ ၁၀ ရက်လောက်ကြာမှ သူ့ဇနီးဆီက သူ မရောက်ကြောင်း ဖုန်းလာမှ သိရတာပါ။ သူဆီမှာ မလေးငွေ ၁၁၅၀ လည်း ပါသွားတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ သူ့အလောင်းရှိတဲ့ နေရာကို သွားနေပါတယ်။ ရောက်မှဘဲ အတိအကျ ပြောနိုင်မယ်။”ဟု ပြောသည်။ဦးရွှေသိန်းအား ခေါ်ဆောင်သည့် လူပွဲစားမှာ ပုဏ္ဍားကျွန်း မြို့နယ် တန်းခိုး ကျေးရွာမှ ဦးတင်ထွန်း ဆိုသူဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဟယိုင်းမြို့တွင် နေထိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ယခုအခါ ဦးရွှေသိန်းအလောင်းကို ထိုင်း-မလေးနယ်စပ်ရှိ SP ဆေးရုံတွင်ထားရှိပြီး မနက်ဖန် သဂြိုလ်နိုင်ရန်အတွက် ယခုအခါ သူ့အပေါင်းသင်းများက အလောင်းရှိရာ နေရာသို့ သွားနေကြသည်ဟု သူ့အပေါင်း အသင်း တဦးက ပြောသည်။ဦးရွှေသိန်းသေဆုံးချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ မဆန်းမျှနှင့်် တနှစ်အရွယ်သမီးတယောက် ကျန်ရှိ ခဲ့သည်။
မောင်တောမြို့နယ်သို့ နတလ စံပြကျေးရွာသား ၃၀၀ ထပ်မံရောက်ရှိ
မင်းဆက်ခိုင်(နိရဉ္စရာ) ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ်တွင် တည်ဆောက် နေသော နတလ စံပြ ကျေးရွာများတွင် အခြေချ နေထိုင်ရန် အတွက် ရန်ကုန်မှ စံပြကျေးရွာသား ၃၀၀ သည် မောင်တောသို့ ယနေ့ နံနက်က ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသည်။ရောက်ရှိလာသူများ အထဲတွင် အမျိုးသား ၁၇၉ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၁၂၁ ဦးတို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ယခင် တည်ဆောက်ထားသော နတလ စံပြကျေးရွာ (၄) တွင် နေရာချ ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။ “သူတို့ကို အိမ်တွေ လစ်လပ်နေတဲ့ စံပြကျေးရွာတွေ ဖြစ်တဲ့ တောင်ပြို(၀ဲ)၊ လောင်းတုံ၊ အောင်သာယာနဲ့ ခရေမြိုင်တွေမှာ နေရာချပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အခုဘဲ သူတို့ အေးဒီရွာတွေကို ထွက်ခွာသွားပါပြီ။” အဆိုပါ စံပြကျေးရွာသားများမှာ ရန်ကုန်မှ စစ်တွေကို သင်္ဘောကြီးများ လာရောက်ခဲ့ကြပြီး စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်ကို သင်္ဘောဖြင့်၎င်း၊ ဘူးသီးတောင်မှ မောင်တောကို ကားဖြင့်၎င်း လာရောက်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နယ်စပ်တွင် စံပြကျေးရွာပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိပြီး မောင်တောမြို့နယ်တွင်၂၉ ရွာ ရှိသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် လူဦးရေ တသောင်းကျော် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် စောစောပိုင်းကလည်း စံပြကျေးရွာသား (၅၀၀) ရန်ကုန်မှ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ယခင်က စံပြကျေးရွာ တည်ဆောက်ရေး စီမံက်ိန်းကို ဘူးသီးတောင် ဗျူဟာမှ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရသည်။ အမည် မဖေါ်လိုသူ ရယက ဥက္ကဌ တဦးက “ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထဲရေး ဌာနကကို လွဲလိုက်တော့ ပိုက်ဆံ အကောက် အပြုက လွတ်မလာလို့ စိတ်ကထင်နေတာ။ ခုက ပိုပြီး ဆိုးသွားတယ်။ မောင်တော မယကမှ ရပ်ကွက် ကျေးရွာ တခုစီကို သူတို့ကို မီးဖိုဆောင်သုံး ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀၀ စီကောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရယကတွေလည်း ငွေကောက်အားကြီးလို့ ရွာသား ဆဲဆိုတာကိုခံနည်းရတာလည်း မနည်းတော့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ထူထောင်သည့် ၃၅ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ကျင်းပ
မောင်ရမ္မာ (နိရဉ္စရာ) ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ထူထောင်သည့် ၃၅- နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား တရပ်ကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာတွင် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ရခိုင်ပြည် လွှတ်မြှောက်ရေး ပါတီ (အရှေ့ဘက်ဒေသ ဌာနခွဲ)မှ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၃၅ နှစ်မြှောက်နေ့၌ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားသို့ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီနှင့် တပ်မတော်မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲဆောက် ဌာနခွဲရုံး ရခိုင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲဆောက်ရှိ ရခိုင် အလုပ်သမားများ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း အင်အား ၆၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ပါတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်နှင့် ဗဟိုကော်မီတီ အဖွဲ့ဝင် ခိုင်နီလင်းတို့မှ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ခိုင်လင်းခိုင်မှ အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ထူထောင် ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒု ဥက္ကဌ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။ “ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီအနေနဲ့ လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေး တပ်မတော်တရပ် ဖွဲ့စည်း ထူထောင် ဖို့အတွက် ပါတီ ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ ပါတီဝင် တချို့ကို ဗမာ့ တပ်မတော်ထဲ ၀င်ရောက် စေပြီးတော့ စစ်ပညာ သင်ကြားဖို့ တာဝန် ပေးခဲ့ရတယ်။ အခြား တဘက်မှာလည်း KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး နဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ အပြန် အလှန် ကူညီမှုတွေ အပေါ်မှာ မဟာမိတ် ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ALA ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် နိုင်ခဲ့ကြတယ်”ဟု ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်အမျိုးသား လွတ်မြှောက်ရေး တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ပါတီ ဥက္ကဌကြီး ခိုင်မိုးလင်းမှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်မှ ရခိုင်သို့ ရဲဘော် တရာ ကျော် ဖြင့် မိုင်ပေါင်း (၂၀၀၀) ဖြတ်ကျော်ပြီး ချီတက်စဉ် ချင်းပြည်နယ် တနေရာတွင် ဗမာစစ်တပ်နှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲပေါင်း များစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် လွတ်လမ်း မမြင်သဖြင့် မိမိတွင် ပါလာသော ပစ္စတိုနှင့် အာဇာနည်ပီသစွာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် သွားခဲ့သည်။ အခမ်းအနားကို နံနက် ၈ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၀ နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
အမည်မသိ ကင်းထောက်လေယဉ်တစီးမှ ဘူးသီးတောင် တပ်နယ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသွား
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အနီးတည်ရှိသော ဘူးသီးတောင်မြို့ တပ်နယ်မှ စစ်တပ် တပ်ရင်းများကို အမည်မသိ လေယဉ် တစီးက လွန်ခဲ့သော အပတ်က လျှပ်တပြက် ၀င်ရောက်လာပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသွားခဲ့သည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦး ပြောသည်။“အဲသလို ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အထက်က သတိပေးထားပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ဘူးသီးတောင် တပ်နယ်ကို အမိန့်ချထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။” ၀င်ရောက်ပျံသန်းလာသော လေယဉ်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်မှ နေပြီး မြောက်ဘက် စူးစူးသို့ ပျံသန်းသွားသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။“တပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရဲဘော်တွေ အကုန်လုံး တောင်ဘက်ကနေ ၀င်ရောက်လာပြီး မြောက်ဘက်ကို ဖြတ်ပျံသွားတာကို မြင်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကင်းထောက်လေယဉ်၊ အမေရိကန် လေတပ်က ဆိုပြီး အထက်အာဏာပိုင်တွေက ပြောတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မကြားရသေးပါဘူး။” ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ်တွင် အကြီးမားဆုံး စစ်တပ် အခြေစိုက်ရာ တပ်နယ် တခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တပ် တပ်ရင်း ၁၅ ခုကို တိုးချဲ့ ချထားသည်။ ၎င်းအပြင် ဘူးသီးတောင်တွင် စကခ ၁၅၊ ဗျူဟာ ၂ နှင့် အမြှောက်တပ်ရင်း တခုကိုလည်း အခြေစိုက်ထားသည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ အနောက်ဘက် နယ်စပ်တွင် စစ်ရေး အင်အားကို ဖြည့်တင်းနေသည်ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အမည်မသိ လေယဉ် တစီးမှ ၀င်ရောက်လာပြီး ဘူးသီးတောင် တပ်နယ်မှ အဆောက်အဦးများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ယခုအခါ အဆိုပါ သတင်းကို နေပြည်တော် ကကကြည်းမှ သိရှိသွားပြီး လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိ တချို့ကို အဆိုပါ လေယဉ်ဝင်ရောက်မူကို စစ်ဆေးရန် စေလွှတ်ထားသည်ဟု ခိုင်လုံသော သတင်းအရ သိရသည်။
စစ်အုပ်စုဖက်က စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးနှင့် လုံခြုံရေးများ အရှိန်မြှင့် ပြင်ဆင်နေ
ဇွန်လ ပထမပတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားရုံးချိန်မထုတ်မီအတွင်း စစ်အုပ်စု၏ စစ်နှင့် ရဲထောက်လှမ်းရေးများ၊ အရပ်ဝတ်အကြမ်းဖက်များသည် အထူးစစ်ဆင်ရေးသဖွယ် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ပြင်ဆင်မှုများ၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ဟု မျက်မြင်တို့က ပြောသည်။
ယခင်အပတ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တဦးတည်းဆန္ဒပြသဖြင့် အဖမ်းဆီးခံရသူ ဦးဇော်ညွန့်ကို အင်းစိန်ထောင်၊ တိုက်တခုတွင် ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ ရိုက်နှိက်နှိပ်စက်မှုများ ရှိကြောင်းကို အင်းစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းတချို့ကတဆင့် ကြားသိရသည်။
မြို့နယ်အချို့က ကြံဖွတ်များ၊ စွမ်းအားရှင်များနှင့် စစ်အုပ်စုသတင်းပေးများကို အရပ်ဝတ်အကြမ်းဖက်သမားများဟု မြို့နေလူထုက အမည်ပေးထားပြီး ၎င်းတို့က ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ မိသားစုများနှင့် အန်အယ်ဒီပါတီဝင်များကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆဲရေးခြင်း၊ ရန်စခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြသည်ဟု မိုးမခသို့ ပြောကြားသည်။
“သောကြာနေ့ပြီးရင် မင်းတို့တတွေ အလှည့်ပဲ …” ဟု ပြောကြောင်း အန်အယ်ဒီပါတီထောက်ခံသူ လူငယ်တဦးကို ကြံ့ဖွတ် ရပ်ကွက်လူကြီးတဦးက ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
“လူထုက ပိုပြီး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ ပါတီဝင်တွေ၊ ပါတီဝင်ဟောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ အကျဉ်းသားဟောင်းတွေတင်သာမက အခု မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေကပါ အခုအရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာကြတယ်။ အကြမ်းဖက်ခံထားရတဲ့ အတွေ့အကြုံက လူတွေဆီမှာ ရှိပြီးသားဆိုတော့ စစ်သားတွေ ကြံဖွတ်တွေ အကြမ်းဖက်လာတာကို ငုံခံနေဖို့တော့ အစီအစဉ်မရှိဘူး”
ဟု အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ ဆန္ဒပြုလှုပ်ရှားမှုများတွက် မပျက်မကွက်သွားရောက်သူတဦးက ပြောကြားသည်။
ဇွန် ၂ရက်၊ ၂၀၀၉
နအဖ အစိုးရ၏ အာဏာတည်မြဲစေအောင် အထောက် အကူပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ကို လာမည့် ၂၀၁၀ တွင်ကျင်းပမည် ဆိုသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင် စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ယခုလက်ရှိ အစိုးရ ၀န်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တွင်လည်း အရေးပါသည့် ရာထူးတာဝန်ယူထားသူ များကို မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်မည့် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ စည်းဝေးတွင် အစိုးရ၀န်ထမ်း မဟုတ်သူများနှင့် အစားထိုးလဲလှယ် လိမ့်မည်ဟု အမျိုးသမီး ဌါနဆိုင်ရာ အရာရှိ ၀န်ထမ်း တဦးကပြောဆိုသည်။
အစိုးရ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီတခုခုတွင် ၀င်ရောက် လှုပ်ရှားခွင့် မရှိသည့် အတွက် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပြီး၊ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကိုမူ ပါတီအသွင် ပြောင်းမည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိသေးပဲ ယခင်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု လည်းသိရှိရသည်။
လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဆိုသည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ကြေညာ အသိပေးခြင်း မရှိသေးသော်လည်း နအဖ၏ လက်ခွဲ ပါတီများ ဖြစ်လာမည့်ုအမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ကဲ့သို့သော အင်အားစုများကိုမူ လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ သည်ကိုတွေ့ရသည်။
အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ကို ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဖြုတ်ချခြင်း ခံခဲ့ရသည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေက တလျှောက်လုံး ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် ထိုစဉ်က ၀န်ကြီးချုပ် ရာထူး ဆက်ခံသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ဇနီးကို လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေး အပ်ခဲ့သည်။
နအဖ စစ်အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည့် ကံကြမ္မာမျိုးနှင့် ထပ်မံ မကြုံတွေ့ရစေရန် လူထုအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လက်ခွဲ ပါတီငယ် အများအပြားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်း၊ စစ်တပ်မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်မှု မလုပ်နိုင်စေရန် အချိန်နီးကပ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ကြေညာမည့် လက္ခဏာတို့ ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
စီရင်ချက်မချမီ ဥပဒေချိုးဖောက်ကြောင်း ပြောဆိုမှုမှာ တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင်ပြုရာရောက်2009-06-02
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှုမပြီးပြတ်ခင် သူ့ကို ဥပဒေချိုးဖောက်သူလို့ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုတာဟာ တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင် လုပ်ရာရောက်တယ်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃၁ရက်တုန်းက စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးမှာ ကာကွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အေးမြင့်က နိုင်ငံခြားသားတယောက် အိမ်ထဲဝင်လာတာကို ထိန်ချန်ထားတဲ့အမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုတာလို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥပဒေချိုးဖောက်တယ် မချိုးဖောက်ဘူးဆိုတာ တရားရုံးက အဆုံးအဖြတ်ပေးရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဦးကြည်ဝင်း။ ။ 'သူက ကြေညာပြောတဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဒီတိုင်း သူပြောတဲ့ဟာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ တရားဝင်အစည်းအဝေးတို့ ဘာတို့မှာ ပြောရင်တော့ ဒါက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ it is contempt of court ဆိုတာ တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင် လုပ်ရာရောက်တယ်။'
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲကို ဝင်ရောက်တဲ့ ဂ္ဆွန် ဝီလီယမ် ယက်တောဟာ ၂ဝဝ၈ခု နိုဝင်ဘာလတုန်း ခုလိုပဲ တကြိမ် ဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး ဒီအကြောင်းကို မိသားစုဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက တဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
စစ်အစိုးရက တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုအပေါ်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အဆိုပြုထားတဲ့ သက်သေလေးဦးထဲက တဦးကိုပဲ လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့တာဟာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေက ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ ညနေ ၄နာရီက အမှုဖွင့် လျှောက်လဲတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေနေတဦးဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ 'က္ဆွန်တော်တို့ တင်တဲ့ လျှောက်လဲတဲ့ ပြင်ဆင်မှုပေါ့၊ ဒါ က္ဆွန်တော်တို့ revisional case ခေါ်တယ်။ ဒီပြင်ဆင်မှုကို တရားရုံးက လက်ခံတယ်၊ လက်မခံဘူး သူက အမိန့်ချမှတ်မယ်။ လက်ခံခဲ့ရင်တော့ နောက်ထပ် နှစ်ဖက်ပေါ့၊ အစိုးရဘက်ရော၊ က္ဆွန်တော်တို့ဘက်ရော လျှောက်လဲချက်ပေးရမယ်။ လက်မခံရင်တော့ က္ဆွန်တော်တို့ အမှုကို ပယ်ချခံရတာပေါ့။'
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ပယ်ချခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သက်သေသုံးဦးကတော့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ တောင်ကြီးမြို့က ဒေါ်ခင်မိုးမိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၅ရက် လာမဲ့ သောကြာနေ့ အမှုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း စီရင်ချက်ကို အပြီးချနိုင်သလို တရားရုံးဘက်က ရက်ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့လည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသွားပါတယ်။
ကမႝာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကူညီမှု မှတ်တမ်းထုတ်ဝေ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကမႝာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) က မြန်မာ နာဂစ် မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် လူသားချင်းစာနာကူညီမှု လုပ်ငန်းတွေကို မှတ်တမ်းတင် ပြုစုထားတဲ့ စာအုပ် ထုတ်ဝေလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗန်ကောက်မြို့က နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်းခန်းမမှာ ဇွန်လ ၁ရက် မနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ ဒွန်မောင်း လေဆိပ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ကမႝာ့ စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်၏ လေယာဉ်ပေါ်သို့ မေလ ၂၄ရက်နေ့က တင်ဆောင်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းပြီးပြီးချင်း လိုအပ်နေတဲ့ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို WFP အနေနဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ကြုံတွေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဒီစာအုပ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ WFP ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခရစ်စ် ကေး က RFA ကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့ အရေးပေါ် အကူအညီတွေနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို WFP အနေနဲ့ ဘယ်လို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါအပြင် မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် လူသားချင်းစာနာကူညီမှု လုပ်ငန်းတွေမှာ WFP ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေကို ဒီစာအုပ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ မှတ်တမ်းတင် ထားပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
WFP ကထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာစုစုပေါင်း ၉ဝ ကျော် ပါရှိပြီး နိုင်ငံတကာက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆု ရရှိထားသူ ဓာတ်ပုံဆရာ ဂရက် ကွန်စတန်တင်းရဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ WFP ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခရစ်စ် ကေးနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာ World Vision အဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဘဲလစ် တမ်မက်စ်ဂင်လည်း အဓိက ပြောဆိုခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက် စုစုပေါင်း ၃ဝ နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
WFP အနေနဲ့ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဓိက ဘယ်လိုအချက်တွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က WFP ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခရစ်စ် ကေးကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှု ပပျောက်ရေး မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို ကိုရီးယား သမတတိုက်တွန်း
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေတာကို ကမႝာက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရတဲ့အတွက် ဒါကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂ရက်မှာ တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ သမတရုံးက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ လျော့ပါးအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် (ဝဲ) အား တောင်ကိုရီးယားသမတ လီမျောင်ဘက် (ယာ) က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျေဂျူး စခန်းသာက္ဆွန်းတွင် ကျင်းပသော ကိုရီးယား-အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ပြင်ပ ဟိုတယ်တခုတွင် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့က တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂျေးဂျူး အပန်းဖြေက္ဆွန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ- အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်းနဲ့ တောင်ကိုရီးယား ထိပ်သီးညီလာခံ ပြင်ပမှာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံချိန်မှာ တောင်ကိုးရီးယား သမတ Lee Myung-Bak က အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး ဖြစ်စဉ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရာက တဆင့် ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ပြီး နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ပူပန်နေတာကို ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သမတက ပြောကြားတယ်လို့ တွေ့ဆုံပွဲအပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ သမတရုံး ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ကြေညာချက်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းမပြပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရ အရေးယူဆောင်ရွက်နေပုံကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုတာလို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူ တယောက်က ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Abhisit ဟာ ဒီထိပ်သီးညီလာခံ ပြင်ပမှာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးပမ်းပေမဲ့ ညီလာခံ တက်ရောက်လာတဲ့ တချို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အစီအစဉ်တွေ အပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက် သူ့ကြိုးပမ်းချက်က မအောင်မြင်ဘူးလို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား-အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ပြင်ပမှာ တောင်ကိုရီးယား သမတဟာ ဗီယက်နမ်သမတ၊ ဖိလစ်ပိုင်သမတနဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်း သမတရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပဒေကြောင်းနဲ့ တရားစွဲဆိုတာဟာ ဟန်ပြ တရားစွဲဆိုတာလို့ အမေရိကန်သမတ အိုဘားမားက ပြောကြားသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဥရောပ သမဂ္ဂက ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။
အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား ထိပ်သီးညီလာခံပြင်ပမှာ တောင်ကိုရီးယား သမတ Lee Myung-Bak ဟာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမႝာက စိုးရိမ်ပူပန်နေတာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အရင်က ဒီလိုမျိုး ပြောဆိုတာမျိုး မရှိတဲ့အကြောင်း NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေ တောင်ကိုရီးယား ဌာနခွဲ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုရန်နိုင်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ ကိုရန်နိုင်ထွန်းကို RFA မှ ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။ အသံဖိုင်ယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်စားနေပါတယ်လို့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးကို ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယားရောက် မြန်မာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေရဲ့ အမြင်ကို RFA မှ ဒေါ်ခင်ခင်အိက တင်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှု ပပျောက်ရေး မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို ကိုရီးယား သမတတိုက်တွန်း2009-06-02
နိုင်ငံတကာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ လျော့ပါးအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် (ဝဲ) အား တောင်ကိုရီးယားသမတ လီမျောင်ဘက် (ယာ) က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျေဂျူး စခန်းသာက္ဆွန်းတွင် ကျင်းပသော ကိုရီးယား-အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ပြင်ပ ဟိုတယ်တခုတွင် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့က တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ (တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂျေးဂျူး အပန်းဖြေက္ဆွန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ- အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်းနဲ့ တောင်ကိုရီးယား ထိပ်သီးညီလာခံ ပြင်ပမှာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံချိန်မှာ တောင်ကိုးရီးယား သမတ Lee Myung-Bak က အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား ထိပ်သီးညီလာခံပြင်ပမှာ တောင်ကိုရီးယား သမတ Lee Myung-Bak ဟာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမႝာက စိုးရိမ်ပူပန်နေတာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အရင်က ဒီလိုမျိုး ပြောဆိုတာမျိုး မရှိတဲ့အကြောင်း NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေ တောင်ကိုရီးယား ဌာနခွဲ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုရန်နိုင်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ ကိုရန်နိုင်ထွန်းကို RFA မှ ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ခေတ်စားနေပါတယ်လို့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးကို ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယားရောက် မြန်မာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေရဲ့ အမြင်ကို RFA မှ ဒေါ်ခင်ခင်အိက တင်ပြထားပါတယ်။
မလေးရှား၌ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေ
ဇော်ကြီး။ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ တရုတ်တန်းဈေးအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံ ခြားသား အလုပ်သမားများအားအလုပ်လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်သည့် အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြသည်။
ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းက မလေးရှားအာဏာပိုင်များမှ ဈေးအတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုများရှိပြီး အလုပ်ရှင်များက နိုင်ငံ ခြားသားအလုပ်သမားများအား အလုပ်လုပ်ခွင့် ပိတ်လိုက်သည့် အတွက်အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြသည်ဟု အနား ယူလိုက်ရသည့် အလုပ်သမား ကိုရဲစိုးလင်း ကယခုလိုပြောသည်။
“ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတာက ၃၁ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတာ လေ။ နိုင်ငံခြားသားကိုနောက်ဆုံး Chance ပေးထားတာ ၁ ရက်နေ့၊ ဒီနေ့ကစဖမ်းမယ်လို့ပြောထား တာကိုး ဒီနေ့ကတော့ အများကြီးလာတာပဲ။ ဒီက ပြည်သူ့စစ် ရေလာတွေနဲ့ ဘန်ဒါဘန်ရာ စည်ပင်က ကောင်တွေရယ် ရဲတွေရယ်အကုန် ၀င်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြိုပြောထားပြီးသားကို ကျနော်တို့ဒီမှာ အား လုံးကနောက်ဆုံးရက်ကို သတ်မှတ် ထားတယ်ဆိုတော့၊ ပြီးတော့ သတင်းစာမှာလည်း တရားဝင်ကြေ ညာထားတာကိုး။ အဲဒီတော့ အားလုံးက နားပေ့ါ။ ဒါဘဲရှိတယ်။”
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၏နေရာတွင် မလေးရှား နိုင်ငံသားအလုပ် သမားများနှင့် အစားထိုးသွားမည်ဟုကွာလာလမ်ပူမြို့တော်ဝန်က လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၆ ရက်နေ့က တရားဝင် ကြေညာခဲ့သည့်အတွက် အလုပ်ရှင်များက ရပ်နားခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအနေအထားအရ အလုပ်ရှင်မှ ၎င်းတို့၏ လုပ်အားခများကို မပေးသေးသည့် အတွက်အခက်အခဲ ရှိသော် လည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေကို ခန့်မှန်း၍မရနိုင်သေး ဟုကိုရဲစိုးလင်းက ဆက်ပြောသည်။
“လောလောဆယ်ကတော့ ဖြစ်သလိုနေထိုင်စားသောက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပဲရှိတာပေ့ါ။ သူတို့ဖက်က အခြေအ နေ ဘယ်လိုမျိုး ပြန်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဖက်ကနေစောင့်ကြည့်ပေ့ါ။ အဲလိုမျိုးအနေအထား။ ဘာ ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကျနော်တို့တွေအကုန်လုံး လစာမရကြသေးဘူးလေ။လစာမရကြသေးတော့ ရှိတာ လေးနဲ့ဖြစ်သလိုနေပေ့ါ။ အဆင်ပြေသလို နေပေ့ါ။”
ယမန်နေ့က တရုတ်တန်းဈေးအတွင်းဖမ်းဆီးမိသူမရှိသော်လည်း Jalan Silang နှင့် Central Market အနီးပတ် ၀န်းကျင်တွင် လူ ၁၂၁ ဦးဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးတရားဝင်မဟုတ်သူ ၄၃ ဦးပါဝင်သည်ဟု မလေးရှားနိုင်ငံ နေ့စဉ်ထုတ် The NewsStraits Time သတင်း၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထိုဈေးအတွင်းရှိ အလုပ်ရှင်များအနေနှင့် နိုင်ငံသားအလုပ်သမားများထက်နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများကို ပိုမိုအားထားကြသော်လည်း ယခုကိစ္စသည်ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည် ဟု မြန်မာအလုပ်သမား ကာကွယ်ပေးရေး ကော်မတီ (BWRPC) မှကိုရဲမင်းထွန်းက ယခုလို ပြောဆိုသည်။
“နောက်ပြီးတော့ အဲဒီမှာက သူဌေးတွေရဲ့ အနေအထားကလည်း ဒီလူတွေကိုပဲ မှီခိုနေရတာလေ။ ဒီ တရုတ်တန်းဈေးထဲက ပစ္စည်းတွေကလည်း မှောင်ခိုပစ္စည်းတွေ ဆိုတော့ သူတို့ပြောသလို local တွေနဲ့ သုံးဖို့ဆိုတာက အဲဒီမှာ ဥပဒေတွေနဲ့ ပြဿနာ တွေက အစုံရှိတယ်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီကအလုပ် တွေကလည်း ပင်ပန်းတယ်။ဆိုင်ရှင်း၊ ဆိုင်သိမ်းကလည်း ဆိုင်တွေက ဒိပြင်နေရာတွေကနေ သယ် လာပြီးတော့ဖွင့်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးပေ့ါဗျာ။ အချိန်မီအောင် ဖွင့်ဟယ်ခင်းဟယ်နဲ့ ဆိုတော့။ အဲတာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကတော့အလုပ်သမားအများစုကလည်း တရားမ၀င်ဖြစ်နေတော့ ဖြေရှင်းဖို့ နည်း လမ်းကတော့မရှိဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။”
ယခုစီမံချက်သည်အစိုးရမှ နိုင်ငံသားများ အလုပ်ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ် သော်လည်း နိုင်ငံသား များ မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကြမ်းတမ်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် အလုပ်သမားရှားပါးမှု ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာ မည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များက စိုးရိမ်နေကြသည်။
တရုတ်တန်းဈေးအတွင်း၌ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်၊ နီပေါ နှင့် အခြားနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အ လုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား၂၀၀၀ ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကော့သောင်းတွင် ည၁၁နာရီ နောက်ပိုင်းအပြင် မထွက်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့်် ကော့သောင်းတွင် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ည ၁၁ နာရီ နောက်ပိုင်းမထွက်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခင်အပတ်မှစ၍ မြို့တွင်းတွင် ည ၁၁ နာရီ ကျော်လျှင် အရက်၊ ဘီယာနှင့် လက်ဘက်ရည် ဆိုင်များကို ဖွင့်ခွင့် မပြုကြောင်း ကော့သောင်းဒေသခံ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“ည ၁၁နာရီ ထွက်မရဘူး လောလောဆယ်။ သူတို့က တရားဝင်တော့ မထုတ်ပြန်ဘူးလေ။ ဘီယာ ဆိုင်တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေ အဲချိန်ထိမရောင်းရဘူး။ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမား တွေလဲ ၁၁နာရီ ကျော်ရင် ဖမ်းတယ်လို့ကြားတယ်။ တရားဝင်တော့ မထုတ်ပြန်ဘူး။ သူတို့ ဘာသာလိုက် အကြောင်း ကြားတာ။”
မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စက်လှေတိမ်းမှောက်ပြီး လူ ၁၁ ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကော့သောင်းသို့ ကုန်း လမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေလမ်းကြောင်းမှ ရောက်ရှိလာသည့် ခရီးသည် များကို စစ်ဆေးပြီး အထောက်အထား ခိုင်လုံ စွာ မပြနိုင်သူ ၂၀၀ ကျော်အား အာဏာပိုင်များ က ရပ်ကွက်ရုံးများတွင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့ အမိန့်ကိုထုတ်ပြန် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
ညဘက်တွင် မထွက်ရဲကြသဖြင့် ယခင်ကထက် လူသွားလူလာ နည်းပါးနေသည်ဟု ကော့သောင်း ဒေသခံ တဦး က ပြောသည်။
“၁၀နာရီထိုးရင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကစ ပိတ်ရတယ်။ ဟိုးနေ့က လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ချင် လို့ အိမ်နားကကလေး သွားဝယ်ခိုင်းတော့ ခုဆယ်နာရီထိုးလို့ဆိုင်ပိတ်တယ်။ ဘယ်ဆိုင်မှ မဖွင့်ရဘူး လို့ ပြောတယ်။”
လူဝင်လူထွက်များကို တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေဖြစ်ရ သည်ဟု အခြား ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“နည်းနည်းတော့ ကျပ်သွားတာပေါ့ ကော့သောင်းမြို့က။ အရောင်းအ၀ယ် အေးသွားတယ်။ တက္ကစီ သမား၊ လှေသမားအားလုံး ညှိနေကြတယ် အားလုံးအားလုံး။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေကြဘူး။”
လောလောဆည်တွင် လူကုန်ကူးမှု ပြသာနာများကြောင့် ကော့သောင်းဗျူဟာမှုးက ထိုင်းတစ်ဘက်ကမ်းသို့ တစ် ပတ်စာ သွားရောက် လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားသည့် ယာယီ လက်မှတ်အား ပိတ်ပင်ထားသည်။
တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့နှင့် နအဖ တပ် တင်းမာမှုကြောင့် နှစ်ဖက်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်
ဂျွန် ၁ ရက်ကစပြီး တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့များ ခရီးသွားလာပါက စစ်အစိုးရ၏သက်ဆိုင်ရာဒေသခံစစ်ဗျူဟာမှူးရုံး၊ တပ်ရင်းရုံး သို့ သတင်း ပေးပို့ရမည်ဟု သျှမ်းပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်း ပုံပါကျင်မြို့နယ်ခွဲ အခြေစိုက် စစ်ဗျူဟာမှူးကပြောကြောင်း နယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်ဆိုသည်။
တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့အား မြောက်ပိုင်းသို့ တပ်ရုတ်ပြန်ရန်/လက်နက်ချရန်/စစ်အစိုးရ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လက်အောက် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရဖက်က အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးပြောဆိုခဲ့၏။ ဝ တပ်ဖွဲ့ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် စစ်အစိုးရက စစ်ရေးဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန် (သို့) ခြိမ်းခြောက်ရန် တပ်မများ အဆင်သင့် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာ ဥက္ကဌ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ဆင့်ခေါ်သည့် အစည်းအဝေး၌ ပုံပါကျင်အခြေစိုက်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သူက ၂၉/ဝ၅/ဝ၉ နေ့၌ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
“မေ ၂၉ ရက်နေ့က တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့ တပ်မဟာမှူး တပ်ရင်းမှူးတွေ အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်။ သူတို့အဓိက ဆွေး နွေးတာက တောင်ပိုင်းဒေသရှိ အဓိကတပ်စခန်းသုံးခုအား စစ်အစိုးရက အမြန်ဆုံးရုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စကို မလိုက်လျော နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်။ နောက်တခုက တောင်ပိုင်းဝ တပ်ဖွဲ့တွေ ခရီးသွား/လာရင် စစ်အစိုးရတပ်ကို သတင်းပေးပို့ဖို့အချက်ကိုတော့ လိုက်လျောပေးဖို့၊ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတယ်” ဟု တောင်ပိုင်းဝ တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးသူတဦး ကပြောသည်။
“အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီတပ်စခန်းတွေမဖြစ်မနေ လက်လွတ်လိုက်ရရင်တောင်မှ ပြန်တိုက်ယူမှာဘဲ။ အခု အဲဒီတပ် တွေ ရုတ်မပေးနိုင်လို့ စစ်အစိုးရ တပ်မ ၅၅ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၅ ရင်း ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ကို ခြိမ်း ခြောက်တာဖြစ်တယ်။ တကယ်တမ်းတော့မလာသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘယ်သွားသွား သတင်းပေးပို့ရမယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စက တော့ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်” - ဟု ဝတပ်မှူး တဦးက ဆိုသည်။
ဒေသခံကုန်သည်တဦး၏ ပြောပြချက်အရ စစ်အစိုးရတပ်ဘက်မှ တပ်ရင်းများ တပ်စခန်းများ အသင့်အနေအထား စစ်ရေး ပြင်ဆင်ထားသလို ဝ တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်း စားနပ်ရိက္ခာ၊ လူသူလက်နက် အဆင်သင့် ဖြည့်တင်းသည့်အပြင် ကျေးရွာတွင်း မြို့တွင်း မိသားစုနှင့်နေသည့် ဝ စစ်သား/အရာရှိများလည်း တပ်စခန်းအသီးသီးပြန်နေကြကြောင်း ဆိုပါ သည်။
ဝ တပ်ဖွဲ့ နှင့် စစ်အစိုးရ တို့၏ တင်းမာလာသော ဆက်ဆံရေးကြောင့် တောင်ပိုင်း နှင့် မြောက်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့လည်း အတက် အဆင်း ကျဲသွားပြီး မလိုအပ်လျှင် ခရီးမသွားကြတော့ကြောင်း၊ ကြေးနန်း/ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်သွားရန် မေလလယ်ပိုင်း ကစပြီး ဝ အကြီးအကဲများ ညွှန်ကြားထားကြောင်း၊ စစ်အစိုးရဘက်ကလည်း ဒေခံပြည်သူများအား သတိရှိရှိသွားလာနေ ထိုင်ကြဖို့ မေလ ၉ ရက် ကတည်းက ဗျူဟာမှူးရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
သျှမ်း/အရှေ့  ကလေးငယ်များအား ရဲညွှန့်အဖြစ် အဓမ္မကောက်ယူ
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပြင်းမြို့နယ် ကလေးငယ်များအား ရဲညွှန့်အဖြစ် နအဖ စစ်တပ်က အဓမ္မကောက်ယူနေ ကြောင်း သျှမ်းပြည်အရှေ့ ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
ဧပြီလမှစ၍ မေလကုန်ပိုင်းအထိ မိုင်းပြင်းအခြေစိုက် ခမရ ၃၆ဝ နှင့် ခလရ ၄၃ တို့က ဒေသအတွင်း လားဟူ ပြည်သူ့စစ် များနှင့်ပူးပေါင်းကာ မိုင်းပြင်းမြို့နယ် ပက်ကန့်ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးငယ်များအား တရွာ ၅ယောက်နှုန်း မပေးမနေရ အဓမ္မကောက်ယူပြီး ယမန်နေ့ တနင်္လာနေ့က သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း နမ့်ဇန် ရဲညွှန့်ကျောင်းသို့ပို့ ဆောင်လိုက် ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါသည်။
ပက်ကန့်မှာ ကျေးရွာပေါင်း ၂၇ ရွာရှိတယ်၊ တရွာ ၅ ယောက်နှုန်း ပေးရတယ်၊ ကျောင်းထားပေးမယ် လို့ပြောတယ်။ ကျမသား ၁၂ နှစ် ဘဲရှိပါသေးတယ်၊ ဒီနှစ်ရှင်ပြုပေးမလို့ ပိုက်ဆံမလောက်သေးတာနဲ့ မလုပ်ရဘူး။ အခုဗမာစစ်သား တွေ ခေါ်သွားတော့ စိတ်ပူရတာပေါ့၊ နိုင်ငံရေးကလဲ မငြိမ်မသက်နဲ့ဆိုတော့ ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးကိုရှေ့ တန်းတက် ခိုင်းပြီး တိုက်ပွဲမှာအသုံးပြုမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်ရတယ်” - ဟု မိဘကလေး တဦးပြောပြသွားပါတယ်။
အမည်မဖေါ်လိုကျောင်းဆရာတဦးက- “ ရဲညွှန့်အတွက်လို့ ဆိုပြီးလာကောက်တာ အမှန်ကတော့ ကလေးတွေကို နမ့်ဇန် စစ်ကျောင်းပို့လိုက်တာဘဲ၊ မိဘအစုံရှိတဲ့ အရွယ်မရောက်ကလေးငယ်တွေကို အခုလိုအဓမ္မကောက်ယူ နေတာ ကလေးစစ်သားကောက်ယူမှု ကျူးလွန်တာဘဲ” ဟု ဆို၏။
အသက် ၁၂-၁၅ နှစ်အထိ ကလေးငယ်များအား စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မကောက်ယူရာတွင် မိုင်းပြင်းအခြေစိုက် ခမရ ၃၆ဝ မှ ဗိုလ်ကြီးသိန်းအောင် ၊ ခလရ ၄၃ မှ ဗိုလ်အောင်နိုင်နှင့် ကောင်းပက်က လားဟူ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ပူးပေါင်း နယ်လှည့် ကောက်ယူကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
ပက်ကန့်ကျေးရွာအုပ်စုသည် သံလွင်အရှေ့ ခြမ်း မိုင်းပြင်းမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၃ဝ ကျော် ခန့်တွင် တည်ရှိပြီး လားဟူ၊ ပလောင် နှင့် သျှမ်းလူမျိုးများအတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။
မိုင်းပြင်းမြို့နယ် ကလေးငယ်များအား ဆင့်ခေါ်ကောက်ယူနေသည့်အပြင် မေလ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး သောလူငယ်များ နှင့် အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားများအားလည်း ပထမအသုတ်အဖြစ် ပြည်သူ့ စစ် မလုပ်မနေရ အယောက် ၁ဝဝ ခေါ်ယူပြီး သင်တန်းကာလ ၂ဝ ရက် ဖြင့် ခလရ ၄၃ အတွင်း တသုတ်ပြီးတသုတ် စစ်ရေးလေ့ကျင့် နေရကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။